(No. 65 , October 13, 2020)
၁။ နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အပြန်အလှန်ဖမ်းဆီးခြင်းကြောင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ဟု KNU/KNLA-PC ဆို
၂။ ကရင်ကိုချစ်သော်လည်း ကရင်ပါတီကိုမဲမပေးဟု ပြောဆိုနေသူများသည် နိုင်ငံရေးအသိသေးသိမ်သူများသာဖြစ် သည်ဟု KNDP ပြော
၃။ ကျောက်မဲ ပုံဝိုးစစ်ရှောင်စခန်းအနီး စစ်ရဟတ်ယာဉ် ၄ စီးဖြင့် အင်အားဖြည့်
၄။ ရွာသား ၃ ဦးကို မူးယစ်ဆေးဝါးအမှုဖြင့် KNU ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိစ္စ ပြည်နယ်အစိုးရ ကန့်ကွက်
၅။ ကချင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ပါတီ KSPP က နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံတွင် ဟောပြောမှုအစီစဉ် ပါဝင်မည် မဟုတ်
၆။ ကရင်ပြည်နယ်ရွာနှစ်ရွာ ပဲခူးတိုင်းမဲစာရင်းထဲရောက်နေမှု ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိသေး
၇။ တပ်မတော်နှင့် RCSS/SSA တို့ တိုက်ပွဲကြောင့် ပြည်သူလူထု အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး မဆုံးရှုံးစေရေး တာဝန်ယူ ဖြေရှင်း ပေးရန် ကျောက်မဲ မြို့နယ်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက လက်မှတ်ရေးထိုး၍ တင်ပြတောင်းဆို
၈။ ကယားတွင် မဲပေးရန် လျှောက်ထားသည့် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ၅၀၀၀ ကျော်ရှိ
၉။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရန်ကုန်ကရင်ရေးရာအတွက် ကရင်မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေ ၅၅, ၀၀၀ ကျော်တိုးလာ
၁၀။ ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုအား ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေ အလွဲသုံးခဲ့သည်ဟုဆိုကာကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ခွင့်ပြုချက် ဖြင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကလွိုင်ကော်ရဲစခန်းတွင် တိုင်တန်းခဲ့ပြီး အမှုမဖွင့်ပေးသေးဟုဆို
၁၁။ မဲဆွယ်ကာလ စနစ်တကျဖြစ်ဖို့ အစိုးရကို UNA တိုက်တွန်း
၁၂။ ကျောက်မဲအနီး ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အမျိုးသမီး တဦး ဗုံးစ ထိမှန်
၁၃။ လူမျိုးအမည်မှန်ရရှိရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းဖြစ်ဟု ခမီအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးပါတီပြော
၁၄။ ရေးမြို့ပေါ်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်လျှော့ချရေး လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်
၁၅။ မြောက်ဦးခရိုင်ရုံးမှ ပျောက်ဆုံးနေသည့် လဝကဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား သေဆုံးလျက်တွေ့ရှိ
၁၆။ ကျောက်မဲတွင် တိုက်ပွဲများဖြစ်နေသော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန်ပြင်ထား
၁၇။ ပုဏ္ဏားကျွန်းတွင် စားဝတ်နေရေးအတွက် ၀ ဥရှာသူ အမျိုးသမီး ၃ ဦး မိုင်းထိပြီး အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် မစန်းစန်းအေး သေဆုံး
၁၈။ ဘောလခဲမြို့မှာ ပြည်နယ်အခြေစိုက်ပါတီ ဆိုင်းပုဒ်ဖျက်ဆီးခံရ
၁၉။ ကိုဗစ် ရောဂါကူးစက်ခံရသူ ထပ်မံတွေ့ရှိမှုမရှိပါက စမ်းမြို့ရက်ကွက်အား Stay at Home မှ ပယ်ဖျက်သွားမည်
၂၀။ မြို့ပြနဲ့အလှမ်းဝေးတဲ့ ကျေးလက်ဒေသမှာ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါး
၂၁။ ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်သည့် မြို့နယ်များကို အမြန်ဆုံးကြေငြာပေးရန် တောင်းဆို
၂၂။ ရခိုင်အရေး ICC လွှဲပေးဖို့ လုံခြုံရေးကောင်စီကို AI တောင်းဆို
၂၃။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မတရားမှု အမှောင်ကျရောက်နေမှု ဖယ်ရှားရေး မကောင်းဆိုးဝါး နှင်သည့် စံဂိုးခတ်လှုပ်ရှားမှု လုပ်ဆောင်
၂၄။ တပ်မတော် အရာရှိ ၅၀ ကျော် နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ သို့ ပြောင်းရွေ့ တာဝန် ထမ်းမည်
၂၅။ ထိုင်းဘက်ခြမ်းမှ မြန်မာကားများအား ဝင်ရောက်ခွင့် မပြုသဖြင့် မြန်မာဘက်မှ တန်ပြန်ပိတ်ဆို့မှု ဖြစ်ပွား
နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အပြန်အလှန် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုကြောင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ-NMSPနှင့် ၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့အကြား ယမန် နေ့ (အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့)က ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၊ ကျောက်ရေတွင်းရွာနှင့် မင်းရွာကြားတွင် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ-KNU/KNLA-PC ဘက်က ပြောသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ နယ်မြေအတွင်း ၎င်းတို့၏တပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦး တစ်ပတ်ကြာ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းနှင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ခံထားသောကြောင့် သွားရောက်ခေါ်ယူရာ၌ လမ်းတွင် ၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပစ်ခတ်ခံရခြင်းဖြစ်သည်ဟု KNU/KNLA -PC တပ်ရင်း (၇၇၆)၏ ဒုတပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူးစောစန္ဓိမာက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။“အရင်က တစ်ဖွဲ့နဲ့ တစ်ဖွဲ့အကြားမှာ မနာလို ဝန်တိုမှုကနေ သူ့လူကိုယ်ဖမ်း၊ ကိုယ့်လူသူဖမ်းလုပ်ကြတာ။ ကျနော်တို့ဘက် ဖမ်းထားရင် သွားပြန်ပို့ပေးတယ်။ ကျနော့်ကလေးတွေကို လာပို့ခိုင်းတာ တစ်ခါလည်း မပို့ နှစ်ခါလည်း မပို့နဲ့ဆိုတော့ ကျနော့်တပ်သားတွေကို သွားခေါ်ခိုင်း လိုက်တာ။ သွားဖို့ကိုလည်း သူတို့ကိုအကြောင်းကြားလိုက်တယ်။ လမ်းမှာအပစ်ခံရတာပဲ”ဟု ဗိုလ်မှူးစောစန္ဓိမာက ပြော သည်။ KNU/KNALA-PC တပ်ဖွဲ့ဝင်များ စီးနင်းလာသည့် ကားကို မွန်ပြည်သစ်ဘက်မှ စတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ ဘက်က ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခြင်းမရှိကြောင်း၊ ယာဉ်ပေါ်တွင် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၀ ဦးခန့် ပါဝင်သွားပြီး အပြင်းအထန်ထိခိုက်မှု မရှိ သော်လည်း ရဲဘော် ၂ ဦးမှာ ကျည်ရှပ်မှန်၍ ဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရရှိသွားကြောင်းနှင့် ကားတစ်စီးလုံးမှာ သေနတ်မှန်ရာများ ဖြင့် ပျက်စီးကြေမွသွားကြောင်း ဗိုလ်မှူးစောစန္ဓိမာက ဆက်ပြောသည်။
အဆိုပါ မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသူများမှာ ၎င်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားရာ ကျေးရွာ အနီးဝန်းကျင်တွင် မူးယစ် ဆေးဝါးများ လာရောက်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းကြောင့် ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း နှင့် ၎င်းဖမ်းဆီးမှုကို အကြောင်းပြ၍ ၎င်းတို့ နယ်မြေအတွင်းသို့ အင်အားဖြင့် ဝင်ရောက်လာခြင်းကြောင့် မထင်မှတ်ဘဲ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားရခြင်းဖြစ်သည်ဟု မွန်ပြည်သစ်ပါတီ သထုံခရိုင်အတွင်းရေးမှူး နိုင်ကွန်းစိုက်က မွန်သတင်းအေဂျင်စီသို့ ပြောဆိုထားသည်။ မွန်ပြည်သစ်ပါတီဘက်မှ ဖမ်းဆီးထားသူ ၂ ဦးအနက် စောသူရဆိုသူမှာ တပ်ဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ ထုတ်ပယ် ထားကြောင်း KNU/ KNLA-PC ဘက်က ပြောဆိုထားကြောင်း ၎င်းစောသူရမှ ၎င်းတို့ နယ်မြေအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လှုပ်ရှား ခြင်းမပြုရန်လည်း အပြန်အလှန် သဘောတူထားကြောင်းလည်း နိုင်ကွန်းစိုက်က ဆက်လက်ပြောဆိုထားသည်။ မွန်ပြည်သစ် ပါတီ(NMSP) နှင့် KNU/KNLA-PC နှစ်ဖွဲ့စလုံးသည် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူ စာချုပ်(NCA)ကို လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သည်။ http://kicnews.org /2020/10/% e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%96%e1%80
ကရင်ကိုချစ်သော်လည်း ကရင်ပါတီကို မဲမပေးဟု ပြောဆိုနေသည့် အချို့ကရင်များသည် နိုင်ငံရေးအသိ သေးသိမ်သူများ သာဖြစ်ကြောင်း ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ-KNDP မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စောညွန့်သောင်းက ပြောဆိုလိုက်သည်။ ဖားအံမြို့၊ တော်ဝင်ရတနာဟိုတယ်၌ (အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်)တွင် ပြုလုပ်သော KNDP ၏ အောင်လံ အပ်နှင်းပွဲနှင့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် မည့် ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စောညွန့်သောင်းက ပြောဆိုလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ “ကရင်ပြည်နယ်ကိုချစ်လို့၊ ကရင် ကိုချစ်လို့ ကရင်ပါတီကို မဲပေးဖို့ အချိန်မတန်သေးဘူးလို့ ပြောတာ ဒါဘယ်လိုမှ လက်ခံလို့မရတဲ့ စကားပေါ့နော်။ အဲဒီလို ပြောတဲ့လူတွေဟာ နိုင်ငံရေးအသိအမြင် တော်တော်လေးကိုတိမ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကရင်ပြည်နယ်မှာ ကရင်အစိုးရဖွဲ့နိုင်ဖို့ဆို ရင် ကရင်ပါတီကို မဲများများပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ကရင်ပါတီ အနိုင်ရရှိပါက စစ်အာဏာရှင်များနှင့်ပြန်လည်ပူးပေါင်းကာ အာဏာရှင်စနစ်ကို ပြန်လည်အသက် သွင်းမည်ဖြစ် သည့်အတွက် ကရင်ပါတီအားမဲမပေးရန် ယခုလပိုင်းအတွင်း လူမှုကွန်ရက် Facebook တွင် လူတချို့မှ လှုံ့ဆော်ရေးသား ဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေမှုများ ထွက်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ ထိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုများအပေါ် KNDP အနေဖြင့် အမျိုးသားတန်းတူရေး နှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကိုအာမခံသော ပြည်နယ်များနှင့်ဖွဲ့စည်းသည့် ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို တည်ဆောက် သွားမည်ဟုသာ မူဝါဒချမှတ်ထားကြောင်း ပါတီ ဖက်မှတုံ့ပြန်ပြောဆိုထားသည်။
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြည်နယ်အခြေစိုက်ပါတီများပူးပေါင်းထားသည့် KNDP သည် ဗမာတိုင်းရင်းသား ရေးရာနေရာ အပါအဝင် ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ဖားအံ၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီး၊ လှိုင်းဘွဲ၊ ကော့ကရိတ်၊ ဖာပွန်၊ မြဝတီ စ သည့် ၆ မြို့နယ်စလုံးတွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၃၀ ဦးဖြင့် နေရာပြည့် ယှဉ်ပြိုင်သွားမည် ဖြစ်သည်။ http://kicnews.org/2020/10/%e1% 80%80%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%80%e1%
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ် ပုံဝိုးကျေးရွာ စစ်ရှောင်များခိုလှုံရာဘုန်းကြီးကျောင်းအနီး တပ်မတော်မှ စစ်ရ ဟတ်ယာဉ်ဖြင့် လူအင်အားနှင့် လက်နက်အင်အားတို့ကို ထပ်မံဖြည့်တင်းနေသဖြင့် စစ်ရှောင်များ စိုးရိမ်ထိတ်လှန့် နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရသည်။
ယနေ့ အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခန့်က သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့အခြေစိုက်အေ ရှ့မြောက်တိုင်း (ရမခ)စစ်ဌာနချုပ်မှ စစ်ရဟတ်ယာဉ် (၄)စီးဖြင့် လူအင်အား၊ လက်နက်အင်အားတို့ကို တင်ဆောင်ကာ ကျောက်မဲမြို့ ပုံဝိုးကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်းစစ်ရှောင်များရှိရာအနီးတွင် အားဖြည့်ချပေး ကြောင်းစစ်ရှောင်များကပြောသည်။“ဒီနေ့ သူတို့ ၂ ခေါက်တောင်လာတယ်။ (၄) စီးလာတယ်။ ၂ စီးက ပစ္စည်းချပြီး ၂ စီးက ကောင်းကင်ပေါ်မှာ ပျံနေတယ်။ ပစ္စည်းချပြီးရင် လေယာဉ်၂ စီးလုံး ကအတူတူပြန်သွားကြတယ်” ဟု ပုံဝိုးကျေးရွာနေ မြင်တွေ့ရသူ အမျိုးသမီးတဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကိုပြောသည်။
စစ်ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့်လာသော စစ်သားများသည် ရွာဘက်သို့ ခြေကျင်ဖြင့်ဆက်လျှောက်သွားကြောင်း၎င်း အမျိုးသမီး ကပြောသည်။“ အဲဒီရဟတ်ယာဉ်နဲ့လာတဲ့ စစ်သားတွေက ရွာထဲဝင်လာပြီး ၅ မိနစ်လောက်သေနတ်ပစ်ပြီးတော့ တောင် ပေါ်ဆက်တက်သွားတယ်။ ”ဟု ၎င်းအမျိုးသမီးက ထပ်လောင်းပြောသည်။
လက်ရှိ ပုံဝိုးကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် စစ်ဘေးရှောင် ၇၀၀ ကျော်ရှိပြီး၊ တိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်လာမည်ကို ၎င်းတို့ကစိုးရိမ်နေကြသည်ဟုဆိုပါသည်။“ စစ်ရေး က ဘယ်လို ထပ်လာမယ်မလဲဆိုတာ မသိဘူး။ တိုက်ပွဲတွေမဖြစ်စေချင်ဘူး။ နေ့တိုင်းနီးပါး သေနတ်သံတွေကြားနေရတယ်။ ကျေးရွာအနီးတွေမှာတော့ မ ဖြစ်စေချင်ဘူး” ဟု စစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသမီး နန်းအောင် က သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြော သည်။ သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ်အတွင်း သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူးထောင်ရေးကောင်စီ၊ သျှမ်းပြည် တပ်မတော် RCSS/SSA နှင့် အစိုးရတပ်မတော်တို့သည် အောက်တိုဘာ ၂ ရက်မှ စတင်ကာ ယနေ့ချိန်ထိ စစ်ရေးပြင်း ထန်နေသေး ကြောင်းသိရသည်။ တိုက်ပွဲကြောင့် စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ ၃၀၀၀ နီးပါး ရှိပြီး၊ စားဝတ်နေရေး အတွက် ခက်ခဲနေကြောင်း သိရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/18861
KNU -ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး တပ်မဟာ (၆) ၊ တပ်ရင်း (၁၆)မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးနှင့်အဖွဲ့သည် ဒေသခံရွာသား (၃)ဦးကို စိတ်ကြွဆေးပြားတွေ့ရှိ၍ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသည့်အပေါ် ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရမှ အောက်တိုဘာလ(၈) ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာပူးတွဲ စောင့်ကြည့်မှု ကော်မတီ (JMC-S)သို့ ကန့်ကွက်အကြောင်း ကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ (၅)ရက်နေ့က KNU တပ်မဟာ(၆)၊ တပ်ရင်း (၁၆)၏ တပ်ခွဲ (၃)မှ ဒုအရာခံဗိုလ် အဆင့်ရှိသူ ဖိုးထွန်းအပါအဝင် ၃ဦးသည် အရပ်ဝတ်ဖြင့် လက်နက်ငယ်ပါ၍ သံဖြူဇရပ် မြို့နယ်၊ အတွင်းစခန်းကြီးကျေးရွားရှိ မွန်လူမျိုး (၂)ဦးနှင့် ကရင်လူမျိုး (၁)ဦးတို့ထံမှ (WY)စိတ်ကြွဆေးပြား ၁၄ဝ ပြားတွေ့၍ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ကန့်ကွက်စာ၌ ဖော်ပြထားသည်။ ထိုသို့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး KNU အနေဖြင့် NCA သဘောတူစာချုပ်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊ နယ်ဘက် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက် ခြင်းမပြုရန်၊ ဖမ်းဆီးထားသူများအား တရားဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး သက်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းအပ်နှံ ရန်ဟူ၍လည်း ကန့်ကွက်အကြောင်းကြား ထားသည်။
သို့သော် ၎င်းဖမ်းဆီးမှုဖြစ်စဉ်တွင် အဆိုပါ ဒေသခံများကို လမ်းတွင် မသင်္ကာ၍ ခေါ်ယူစစ်ဆေးမေးမြန်းစဉ် စိတ်ကြွဆေးပြားများ လက်ဝယ်ထားရှိကြောင်းတွေ့ရှိ၍ ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ KNU ၏ မူးယစ်ဥပဒေအရ အရေးယူ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဖမ်းဆီးထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း KNU ဘက်က ဆိုသည်။
အဆိုပါ ဖမ်းဆီးထားသူများကို KNU ဝင်ရေးမြို့နယ်ရုံးတွင် ထိန်းသိမ်းထားပြီး ကရင်အမျိုးသား ရဲတပ်ဖွဲ့ (KNPF)မှ လိုအပ် သည့်အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှု ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပဒိုစောလစ္စတန်က ဆက်ပြောသည်။
KNU နှင့် အစိုးရ၊ တပ်မတော် အကြား ၉ နှစ်နီးပါး ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်လာခဲ့ပြီး NCA အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုထားနိုင်သော်လည်း ယနေ့ အချိန်ထိ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာနှင့် တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ နယ်မြေ သတ်မှတ်ခြင်း ကိစ္စရပ်များ မဆွေးနွေးနိုင်သေးသောကြောင့် ယခုလို နယ်မြေအငြင်းပွားမှုပြဿနာများ၊ နှစ်ဖက် အုပ်ချုပ် ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ် များနှင့်ပတ်သက်ပြီး အပြန်အလှန် ကန့်ကွက်မှုများ မကြာခဏ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ http://kicnews.org/2020/10/e1 %80%9b%e1%80%bc%e1%80%ac%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80
ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ (KSPP) အနေဖြင့် နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများဟောပြောခြင်းအစီစဉ်တွင် ပါဝင်တော့ မည် မဟုတ်ကြောင်း ပါတီတာဝန်ခံများထံမှ သိရသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ပါတီ၏ဟောပြောရန်စီစဉ် ထားသည့် စာသားတွင် ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်ပေးရန် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဘက်က ပြောဆိုမှုများရှိသောကြောင့် ပါဝင်ခြင်းမပြုတော့ တာဖြစ်ကြောင်း ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ KSPP ၏ ဗဟိုလူငယ်တာဝန်ခံ ဦးနော်ခုန့် က ယခုလို ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ကတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ပါတီ Page ကနေပြီးဘဲလွှင့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် သူတို့ဖြတ်ပေးလိုက်တာတွေ မကြိုက်လို့။ ကျနော်တို့က ပြည်နယ်အခြေစိုက်ဖြစ်တဲ့ပါတီဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့က ပြည်နယ်မှထွက်ရှိတဲ့သယံဇာတများကို ပြည်နယ်သားများ အပြည့်အဝခံစားရရှိနိုင်ရေးဆိုတာကို သူတို့က ပြည်နယ်သားများနှင့် နိုင်ငံသားများဆိုပြီး ထည့်ခိုင်းစေ ချင်တယ်။ ကျနော်တို့က နိုင်ငံသားများဆိုတာကို မထည့်ခိုင်းစေချင်ဘူး။ အဲကြောင့် ကျနော်တို့နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံကို ထပ်မပို့ တော့ဘူး။”ဟု ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီမှ လူငယ်တာဝန်ခံ ဦးနော်ခုန့်က ဆိုသည်။ သဘာဝသယံဇာတအကျိုးအမြတ် ကို ကချင်ပြည်နယ်သားများ အပြည့်အဝခံစားရရှိနိုင်ရေး ဆိုသည့်အကြောင်းအရာတွင် နိုင်ငံသားများ ထပ်ထည့်စေသည့် အတွက်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီသည် ပြည်နယ်ကိုအခြေခံထားသည့် ပါတီဖြစ်ကာ ပါတီ၏မူဝါဒတွင်လည်း ပြည်နယ်သားများ၏ အခွင့်အရေးကို အဓိကထားချမှတ်ထားသည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ ဆင်ဆာဖြတ်ခြင်းကို အလိုမရှိကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြော သည်။ နိုင်ငံရေးပါတီများအား နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံဌာနဖြစ်သည့် MRTV မှ မဲဆွယ်ဟောပြောခြင်းလုပ်ငန်းများကို စက်တင်ဘာလမှ စတင်ခဲ့သည်။ ကချင်ပြည်နယ်တွင် လာမည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း ၁၉ ပါတီရှိ ကာ မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေ ၁၁ သိန်းခန့်ရှိသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/10/09/l1/
ကရင်ပြည်နယ်၊ သံတောင်ကြီးမြို့နယ်၊ သာမိုတောင်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကပ်ပယ်ရွာနှင့် ထမုံကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ခပေါင်းပင် ကျေးရွာ (ဒေသအခေါ် ထမုံ ဥယျာဉ်ရွာ)များ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေတာ ရှည်မြို့နယ် မဲစာရင်းထဲ ရောက်ရှိနေမှု ပြန်လည် ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ကျေးရွာနှစ်ရွာနှစ်ရွာကို မူလဇာတိဖြစ်သည့် ကရင်ပြည်နယ် သံတောင်ကြီးဘက်မှ စာရင်းပြန်သွင်းရန် လိုအပ်ပြီး ထိုသို့ စာရင်းပြန်သွင်းပြီးသွားမှသာ ပဲခူးတိုင်း ရေတာရှည်မဲစာရင်းမှ ဖြုတ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရေတာရှည်မြို့နယ် ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိန်ထွန်းက ပြောသည်။“ဟိုဘက်က ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ လွှဲပေးမယ်လို့ ပြောထားတယ်။ ကျနော်တို့ ဘက်က ဖျက်လိုက်ပြီး ဟိုးဘက်က ထည့်လို့မရရင် ခက်ကုန်မှာစိုးလို့။ အခုကတော့ ဒီဘက်က အထည့်ပြတာပဲ ဟိုးဘက်က ကျနော်တို့ ထည့်ပြီးပါပြီ၊ ဖျက်ပါဆိုရင် ကျနော်တို့ ဖျက်ရတာလွယ်တယ်လေ။ အခုချိန်ထိတော့ ကျနော်တို့ဆီကို ဘာမှ မပြောသေးဘူးဗျ” ဟု ဦးစိန်ထွန်းက အောက်တိုဘာ ၉ ရက်တွင် ပြောသည်။
ကပ်ပယ်ရွာနှင့် ခပေါင်းပင်ကျေးရွာတို့သည် ယခင်ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ သံတောင်ကြီးမြို့နယ်၊ မဲစာရင်း တွင်သာပါရှိခဲ့သော်လည်း ရေတာရှည်မြို့နယ်ထဲသို့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က ထည့်သွင်းလိုက်သည့်အတွက် ယခုအခါ ရေတာရှည် မြို့နယ် မဲစာရင်ထဲသို့ ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကရင်ပြည်နယ်၊ သံတောင်ကြီးမြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဋ္ဌ စောကားရှယ်က “မဲစာရင်း ကြေငြာပြီးမှ ဒီကိစ္စတက်လာတယ်၊ နောက်တစ်ကြိမ် မဲစာရင်းကျမှ ကြည့်ပါ” ဟုပြောသည်။
ယခုလို ရေတာရှည်မြို့နယ်အတွင်း ထည့်သွင်းလိုက်သည့်အပေါ် တစ်နှစ်ခန့်အကြာမှ သံတောင်ကြီးမြို့နယ်ဘက်မှ သိရ ပြီးနောက် မူလအတိုင်း ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် သံတောင်ကြီးမြို့နယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် နော်ခရစ္စထွန်းက ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ် ၆ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေး တွင် မေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့သည်။ ထိုသို့မေးမြန်းမှုအပေါ် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန ဒု-ဝန်ကြီး ဦးတင်မြင့်က အဆိုပါရွာနှစ်ရွာသည် ယခင်က သံတောင်ကြီးမြို့နယ်၊ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိခဲ့သော်လည်း သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် မြို့နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနတို့၏ မြေပုံမှတ်တမ်းတွင် မပါရှိသည့်အတွက် ရေတာရှည် မြို့နယ် ထဲသို့ ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ http://kicnews.org/2020/10/%e1%80%80%e 1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%bb%e1%
တပ်မတော်နှင့် RCSS/SSA တပ်ဖွဲ့တို့ကြား တိုက်ပွဲများကြောင့် ပြည်သူလူထု အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး မဆုံးရှုံးစေရေး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရက တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးရန် ကျောက်မဲ မြို့နယ်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက လက်မှတ်ရေးထိုး၍ တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်၊ ပုံဝိုးဒေသတွင် တပ်မတော်နှင့် RCSS/SSA တပ်ဖွဲ့တို့ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်မှ စတင်ခဲ့သော တိုက်ပွဲကြောင့် လူဦးရေ ၃၀၀၀ ကျော် လူဦးရေသုံးထောင်ကျော်တို့သည် ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေရပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း၊ အိုးအိမ် ပစ္စည်းများပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ ကြုံတွေ့ခံစားနေရကြောင်း သိရသည်။ ထိုအခြေအနေတွင် ကျောက်မဲဒေသအတွင်း တိုက်ပွဲကြောင့် ပြည်သူလူထု အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး မဆုံးရှုံးစေရေး အတွက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရမှ တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးပါရန် တောင်းဆိုကြောင်း ကျောက်မဲမြို့နယ်တွင်းရှိ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လေးဦးတို့က လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ ထံသို့ အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်တွင် စာတင်ပြထားကြောင်း သိရ သည်။
“မနေ့က ရက်စွဲနဲ့ရိုက်လိုက်တာ၊ ဒီနေ့ပဲ ပို့လိုက်တာပေ့ါ။ အဓိကတော့ စစ်ပွဲဖြစ်နေတာ တစ်ပတ်ကျော်သွားပြီ။ အစိုးရက မသိသလို မကြားသလို ဖြစ်နေတာပေ့ါ။ ရွှေလီဘက်မှာ NLD အင်အားပြတာ တစ်ခါထဲ ပြဿနာဖြစ်တာ တစ်ခါထဲ ရှင်းပေး လိုက်တာလေ။ ကျောက်မဲမှာ လူပေါင်း သုံးထောင်ကျော်လောက် သူတို့ ရဲ့ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးပေါ့။ ထွက်ပြေးတိမ်း ရှောင်နေရတယ်။ ပစ္စည်းတွေ ပျက်စီးသလို ဒဏ်ရာရမှုတွေ ဖြစ်နေတယ်။ အစိုးရကနေ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုတာပေ့ါ။ တိုက်တွန်းတောင်းဆိုတဲ့သဘောပေ့ါ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးမှာ အလှူခံဌာနဖွင့်ပြီးတော့ ရုံးမှာထိုင်ပြီး လက်ခံသလို စိုင်းထွန်းဝင်း က နေ့တိုင်း သွားနေတယ်။ ပါတီလူကြီးကနေ စာထွက်ဖို့ လိုတယ်လို့ ဆိုလို့လေ၊ အစိုးရကနေ သမ္မတကို အကြောင်းကြား၊ သမ္မတကနေ ဒီစစ်ပွဲကိုချက်ချင်းရပ်ပါလို့ လုပ်လို့ရတယ်လို့ မြင်တယ်လေ။ သမ္မတ က ပြောမယ်ဆိုရင် တော့ စစ်တပ်ပိုင်းကလည်း လိုက်နာဖို့လိုတယ်လေ။ ခုလောလောဆယ် မသိသလိုဖြစ်နေတော့ စာထွက်တဲ့ သဘောပါပဲ။ အဓိကတော့ စားဝတ်နေရေးပဲပေ့ါ။ သူက လူဦးရေများများ လာတာ လူဦးရေသုံးထောင်ကျော် သွားတာပေ့ါ။ တိုက်ပွဲတွေ လည်း ဖြစ်နေတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲလည်း ရှိနေတာ တစ်လလောက်ပဲလိုတယ်။ သက်ဆိုင်ရာတွေလည်း သိရှိသွားအောင် ဖြေရှင်းနိုင်အောင်ပေ့ါ။ ကျောက်မဲမြို့ပေါ်လာတဲ့သူတွေကတော့ ဆွေမျိုးတွေဆီလာတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ရောက်နေ တာ ၇ နေရာရှိတယ်။ လူဦးရေ သုံးထောင်ကျော်တယ် ” ဟု ကျောက်မဲမြို့နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းထွန်းဉာဏ် က ပြောကြားသည်။ https://news-eleven.com/article/195194
ကယားပြည်နယ်အတွင်းရောက်ရှိနေတဲ့ ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့ မိမိရောက်ရှိတဲ့ ဒေသမှာ ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ဖို့ ပုံစံ ၃ (က)နဲ့ လျှောက်ထားသူ ၅၀၀၀ ကျော်ရှိတယ်လို့ ကယားပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲက သိရပါတယ်။
မိမိနေရပ်မှာ ပြန်ပြီး မဲမပေးနိုင်တဲ့ ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေ မဲပေးနိုင်ရေးအတွက် ပုံစံ ၃ (က)လျှောက်ထားမှုကို အခုလ ၁၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား လျှောက်ထားခိုင်းတာဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်နေ့အထိ တပြည်နယ်လုံးမှာ လျှောက်ထားသူ ၅၂၀၀ ကျော်ရှိကြောင်း ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ ကယားပြည်နယ် အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်ဆန်းဝင်းက ပြောပါတယ်။
လျှောက်ထားမှုအများဆုံးကတော့ လွိုင်ကော်မြို့နယ်မှာ ၂၆၀၀ ကျော်ရှိပြီး ဖားဆောင်း မြို့နယ်မှာ ၁၆၀၀ ကျော်ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ မယ်စဲမြို့နယ်မှာတော့ ပုံစံ ၃ (က) လျှောက်ထားသူ ၂၀၀ ကျော်ရှိကြောင်းလည်း ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ ကယားပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်ဆန်းဝင်းက ပြောပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ မယ်စဲမြို့နယ်မှာ မဲပေးပိုင်ခွင့်ဦးရေ ၄၉၀၀ ကျော် ရှိပြီးတပြည်နယ်လုံးမှာ မဲဆန္ဒရှင် အနည်းဆုံးမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကယား ပြည်နယ် တစ်ခုလုံးမှာ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးရေ ၅၀၀၀ ကျော်ရှိတဲ့အတွက် မယ်စဲမြို့နယ် တခုလုံးမှာ ရှိတဲ့ မဲဆန္ဒရှင် ဦးရေထက် များပြားနေပါတယ်။ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားအများစု သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်တဲ့ ဖားဆောင်းမြို့ နယ် မော်ချီးကျေးရွာအုပ်စုမှာ ဆိုရင် ပုံစံ ၃(က) လျှောက်ထားသူ ၁၅၀၀ ကျော်၊ ၁၆၀၀ နီးပါးလောက်ရှိမယ်လို့ မော်ချီး ရပ်ကျေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းနိုင်က ပြောပါတယ်။ မော်ချီးသတ္တုတွင်း ထဲက တခုဖြစ်တဲ့ ကဘ-၃၂ (ခေါ်) အမှတ် ၃ သတ္တုကျင်းဟာ လုပ်ကွက်ပေါင်း ၇၀ ကျော်ရှိပြီး လုပ်ကွက်အများစုမှာ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေ လုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။
ဒီရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရရှိအောင် ကျင်းပိုင်ရှင်တွေဆီကနေဆင့် အကြောင်းကြားပြီး လုပ်သားတွေကို ပုံစံ ၃ (က) လာရောက် လျှောက်ခိုင်းထားကြောင်း အမှတ် ၃ ကျင်းဦးစီးမှူး စောဖလယ်ကော်က ပြောပါတယ်။ အမှတ် ၃ ကျင်းထဲက လုပ်ကွက်ပိုင်ရှင် ဦးမိုင်ကယ်ကတော့ သူ့မှာ လုပ်သား ၄ ဦးရှိပြီး ဖရူဆိုမြို့နယ်ကနေ လာရောက်လုပ်လုပ်ကိုင် တာဖြစ်လို့ ဖရူဆိုမှာပဲ မဲပြန်ပေးဖို့ဆန္ဒရှိပေမယ့် တဖက်မှာ ရောဂါအခြေအနေကြောင့် ပြန်လာမရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက် ပုံစံ ၃ (က) ကို ဖြည့်ထားကြောင်းပြောပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေ အားလုံးရဲ့ ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့် မဆုံးရှုံးရအောင်မဲပေးခွင့်ရှိတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေ နေထိုင်တဲ့ သက်တမ်းကို ရွေးကောက် ပွဲနည်းဥပဒေမှာ ရက်ပေါင်း ၁၈၀ အစား တဝက်လျှော့ချပြီး ရက် ၉၀ ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ပြင်ဆင်လိုက် တာဟာ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် များစွာ ထိခိုက်နစ်နာနိုင်တယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံရေးပါတီတချို့က ဝေဖန်ထောက်ပြ ကန့်ကွက်တာ တွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/416395
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာအတွက် လာမည့် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေး ကောက်ပွဲ မဲပေးခွင့်ရှိသူ ကရင်မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေမှာ ၂၃၀,၀၀၀ ကျော်ရှိသည့်အတွက် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေး ကောက်ပွဲကာလ မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေထက် ၅၅,၀၀၀ ကျော် တိုးလာကြောင်း သိရသည်။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ထုတ်ပြန်ထားမှုများအရ ရန်ကုန်ကရင်ရေးရာ အတွက် မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေမှာ ၁၈၀, ၀၀၀ ကျော်သာ ရှိသဖြင့် လာမည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကရင်မဲဆန္ဒ ရှင်ဦးရေမှာ အနည်းငယ်တိုးတက်လာခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်-NLDမှ ရန်ကုန် ကရင်ရေးရာကိုယ်စားလှယ်လောင်း နော်စူစဲန်နာလှလှစိုးက “အနော် ကွင်းဆင်းတဲ့အချိန်မှာ တွံတေးက ကရင်လူမျိုးတွေဆို ကရင်စာရင်းမပေါက်တဲ့သူတွေ အများကြီးပဲ။ သူတို့ စာရင်းဇယားနဲ့ကို ပြုစုထားတယ်။ အဲဒါကို အနော်လ၀ကကို တင်ပြထားတယ်။ သူတို့အချိန်မှီ လုပ်ပေးနိုင်လား မနိုင်လားတော့ မပြောတတ်ဘူး ပေါ့နော်။ အခုအချိန်အထိ စာရင်းမပေါက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ ဒီတစ် ခေါက်မဲ ပေးနိုင်ဖို့က မကျိန်းသေဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့။ နောက်ပြီး ကွမ်းခြံကုန်းတို့ လှည်းကူးတို့လိုမှာတောင် မှတ်ပုံတင် မရှိတဲ့ကရင်လူမျိုးတွေအများကြီးဆိုတော့ ဒီစာရင်းက တိုးဖို့ပဲ ရှိတယ်။ လျော့ဖို့တော့မရှိဘူး”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ -KPP မှ ကရင်ရေးရာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမန်းသန်းဝင်းဦးက “ ဒီရန်ကုန်တိုင်း အတိုင်း အတာအရ တော့ ၅ နှစ်အတွင်းမှာ ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူတိုးလာတာ၊ ရွှေ့ပြောင်းလာသူတွေများလာတာ၊ နောက် တစ်ခုက ထူးခြားဖြစ်စဉ် ဖြစ်တဲ့ ကိုဗစ်အခြေအနေအပြင်ကို တိုင်းရင်းသားရေးရာနဲ့ပတ်သက်လို့ မဲပေးခွင့်အပေါ် ဖြေလျော့ပေးတာတွေ၊ မိမိလက်ရှိ နေထိုင်ရာနေရာမှာ ၃ လ နေထိုင်ရင်မဲပေးခွင့်ရှိတာတွေကြောင့်လို့ယူ ဆ တယ်”ဟု ပြောသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ ထုတ်ပြန်ထားမှုများအရ ကရင်မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေမှာ ပြီးခဲ့သည့် ၅ နှစ်ကထက်တိုးတက် မှုရှိသော် လည်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ် ၄၅ မြို့နယ်အတွင်း နေထိုင်သူကရင်လူမျိုးများ အနေဖြင့် မှတ်ပုံတင်တွင် လူမျိုးအမည် မှားယွင်းနေမှုအများအပြား ရှိနေသေးသည်ဟုလည်း ကရင်စာပေ ယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီ တာဝန်ရှိသူများ၏ ပြောပြချက်များအရ သိရသည်။ http://kicnews.org/2020/10/%e1%81%82%e1%8 1%80%e1%81%82%e1 %8
ကယားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုအား ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေ အလွဲသုံးခဲ့သည်ဟုဆိုကာ ကယားပြည်နယ် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဖရူဆိုမြို့နယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသဲရယ်က အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်တွင် လွိုင်ကော်ရဲစခန်း၌ တိုင်တန်းခဲ့ပြီးအမှုမဖွင့်ပေးသေးကြောင်း တရားလို၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုကို စုံစမ်းဖော်ထုတ် အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန် စက်တင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ် စားလှယ် ခူးသဲရယ်က အဂတိလိုက်စားမှုတိုက် ဖျက်ရေးကော်မရှင်သို့ တိုင်ကြားခဲ့သော်လည်းကောင်မရှင်၏ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက် အကြောင်းပြန်ကြားစာတွင် ယခုတိုင်ကြားမှုသည် ယခင်အခြားသူတစ်ဦးတိုင်ကြားခဲ့ သည့်ကိစ္စဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုစဉ် ကကော်မရှင် အနေဖြင့် ဆုံးဖြတ်ထားရာတွင် တိုင်ကြားမှုသည် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေ စတုတ္ထအကြိမ်ပြင် ဆင်ပြဋ္ဌာန်းခြင်း မပြုမီကကိစ္စများဖြစ်ခြင်းကြောင့် ကော်မရှင် အနေဖြင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ပေး၍မရ ကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင် ရာဌာနမှ တည်ဆဲ ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စဖြစ်ကြောင်းကို အကြောင်းပြန်ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုတိုင်တန်းမှုသည် ယခင်တိုင်တန်းမှုနှင့်အကြောင်းအရာတူဖြစ်နေခြင်း၊ သက်သေခံ ချက်အသစ်မရှိခြင်းတို့ကြောင့် ကော်မရှင် အနေဖြင့် စုံစမ်း စစ်ဆေးခွင့်မရှိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
ထိုသို့ကော်မရှင်၏ အကြောင်းပြန်ကြားစာအရ တည်ဆဲဥပဒေနှင့်သာဆောင်ရွက်ရန် မှတ်ချက်ရှိသဖြင့် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုအား တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီဆက်လက်အရေးယူဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုရန် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တာ်ဥက္ကဋ္ဌ တင်ပြခဲ့ရာကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းနှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ခွင့်ပြုသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ အမှုဖွင့်လှစ်ပေးရန် တိုင်တန်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဦးသဲရယ်က ပြောကြားသည်။ လွိုင်ကော်မြို့မရဲစခန်းတွင် အောက်တို ဘာ ၁၀ ရက်က တိုင်ကြားသော်လည်း မည်သို့ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ထားသည်ကို သိလိုကြောင်း၊ ရဲလက်စွဲအပိုဒ် ၁၄၁၄ တွင် ရဲအရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိသော ပြစ်မှုများ အား နှောင့်နှေးခြင်းမရှိ တိုင်ချက်ဖွင့်ရေး သားရန်နှင့် မည်သည့်သတင်းပေးမှုကိုမဆို ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးပုဒ်မ ၁၅၄ အရချက် ချင်း တိုင်ချက်ဖွင့် ရေးသားရမည်ဟုပါရှိသော် လည်းမှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် ရေးမှတ်ခြင်း မရှိသဖြင့် အခြေအနေအားသိလို ကြောင်း ဦးသဲရယ်က အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်တွင် ရဲစခန်းသို့ စာထပ်မံပေးပို့ခဲ့သည်။
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော် မရှင်က အရေးယူခြင်းမရှိနိုင်သည့်အခြေအနေ နောက်တွင် ကယားပြည်နယ်လွှတ် တော်၌ ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုသည် စက်ယန္တရားများ ငှားရမ်းခရငွေများကိုသီးခြားရန်ပုံငွေတွင် ထားရှိအသုံးပြုခဲ့ခြင်းမှာ လွှတ်တော်က ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ် သော်လည်း ထိုစဉ်ကဘဏ္ဍာငွေများအသုံး ပြုခဲ့မှုသည် ဥပဒေနှင့် မညီ သုံးစွဲခဲ့ခြင်း၊ ကယားဒေးကွင်းအတွင်းရှိ ဟိုတယ်နှင့်ရေလွှာ လျှောစီးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းအား ဖယ်ရှားရန် လွှတ်တော်၌ အဆိုအောင်မြင်ခဲ့သော်လည်း အဆိုပါမြေနေရာကိုစည်ပင်ပိုင်မြေနေရာအဖြစ်ပြောင်းပြီး ယခင်ကုမ္ပဏီများကပင် အမည် ပြောင်း၍ ပန်းခြံနှင့်ဆိုင်ခန်းများ တည်ဆောက်နေခြင်း စသည့်ဖြင့် စွပ်စွဲပြစ်တင်ကာ ရာထူးတာဝန်မှ ဖြုတ်ချခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဦးသဲရယ်က အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်သို့ ထပ်မံတိုင်ကြား ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ https://news-
ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးခွင့် မဆုံးရှုံးစေရေး၊ မဲဆွယ်ကာလ တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုတွေကို ဖော်ထုတ်အရေးယူပေးရေးအတွက် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ မဟာမိတ်အဖွဲ့ UNA နဲ့ မိတ်မိတ်အဖွဲ့အစည်း ၁၀၀ ကျော်က အစိုးရနဲ့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို တောင်း ဆိုလိုက်ပါတယ်။ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖို့ တစ်လတောင် မလိုတော့ပေမယ့် အခုချိန်အထိ မဲပေးခွင့် ရရေး မရေမရာ ဖြစ်နေသူတွေကတော့ ရခိုင်၊ ချင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာ နေရပ်စွန့်ခွာ တိမ်းရှောင်နေရတဲ့ သိန်းနဲ့ချီရှိတဲ့ ဒေသခံတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲမှာ စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရသူတွေ မဲပေးခွင့်ရအောင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ဘယ်လို စီစဉ်တယ်ဆိုတာ မသိရသေးဘူးလို့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီ တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး စိုင်းကျော်ညွှန့် က ပြောပါတယ်။ “ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာက ပြည်သူတွေက မဲထည့်ရမှာ၊ စစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်ပြုနေ ရတယ်ဆိုရင် စစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့သူတွေ မဲထည့်လိုရအောင် ဘယ်လို့စီစဉ်မလည်းဆိုတဲ့ စီစဉ်သံလည်းမကြားရဘူး၊ အဲဒါ က လူ့အခွင့်ရေးဆုံးရှုံးတယ်၊ နိုင်ငံသားတစ်ဦး အခွင့်အရေးမဆုံးရှုံးရအောင် ကျနော်တို့က ပြောရခြင်းဖြစ်တယ်”ရှမ်း ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ်မှာ အောက်တိုဘာလဆန်းကတည်းက တပ်မတော်နဲ့ RCSS တို့ တိုက်ပွဲဆက်တိုက် ဖြစ်နေလို့ အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့ ဒုက္ခသည် ၂၅၀၀ ကျော်ရှိနေတာပါ။
ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ မဟာမိတ်အအဖွဲ့ UNA အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၃ ခုနဲ့ မိတ်ဖက်အအဖွဲ့ ၁၀၀ ကျော် ကလည်း အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံသားတိုင်း မဲပေးခွင့်ရရေးအတွက် ကြေညာချက်ထုတ် တောင်းဆိုထားပါ တယ်။ ကြေညာချက်ထဲမှာ ရခိုင်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေ အမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့် အစိုးရ၊ တပ်မတော်နဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ အမြဆုံးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ ပါဝင်သလို တိုင်းရင်းသားဒေသ အသီးသီးမှာရှိတဲ့ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေ မဲပေးခွင့်မဆုံးရှုံးအောင် အစိုးရအနေနဲ့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် က နှစ်နဲ့ချီနေပြီဖြစ်တဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် စစ်ဘေးဒုက္ခသည် ၂ သိန်း၂ သောင်းကျော်ဟာ နေရပ်မပြန်နိုင်သေးဘူးလို့ ဒုက္ခသည်ကူညီနေတဲ့ ဒေသအခြေစိုက် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်များအစည်းအရုံး REC ရဲ့ စာရင်းအရ သိရပါတယ်။ ဒီဒုက္ခသည်တွေမဲပေးခွင့် ဆုံးရှုံးမှာကိုလည်း UNA နဲ့ မိတ်ဖက်အဖွဲ့တွေက စိုးရိမ်နေပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်နေ့ ကြေညာချက်မှာတော့ UNA အဖွဲ့ဝင် ရှမ်း၊ ကချင်၊ ရခိုင်၊ ကရင် စတဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေ အပါအဝင် ၁၃ ပါတီနဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်များ အစည်းအရုံး REC၊ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်(မြန်မာနိုင်ငံ) WLB၊ ပေါင်းကူး၊ တို့မြေကွန်ရက်၊ Generation Wave စတဲ့ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ၁၃၄ ဖွဲ့ပါဝင်ပါတယ်။ https://w ww.r fa.org/burmese/news/2020-election-una-10122020060354.html
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ် ကျွဲကုန်းကျေးရွာအတွင်း ယမန်နေ့ ညပိုင်းက ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အမျိုးသမီး တဦး ဗုံးစ ထိမှန်ခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။
(အောက်တိုဘာ ၉ )ရက် ည ၈နာရီ မှ ၉ နာရီခွဲတွင် ကျောက်မဲမြို့နယ် ကျွဲကုန်းကျေးရွာတွင် လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ် များဖြင့် ပစ်ခတ်ရာ အမျိုးသမီး တဦး ဗုံးစ ထိမှန်ခဲ့ပြီး၊ အိမ်ခြေ ၃အိမ် ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း ကျောက်မဲမြို့နယ် အမှတ်(၁) မဲဆန္ဒနယ်တွင် SNLD ပါတီ မှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် နန်းအိမွန်အောင် (ခ) နန်းလောဝ်လောဝ် က သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။“ အမျိုးသမီး ဗုံးစထိမှန်တာဟုတ်ပါတယ်။ နဖူးနဲ့ ဒူးနားထိပါတယ်။ ဒီမနက်တော့ ဆေးရုံသွားပြ ခဲ့တယ်။ ဆေးပဲ လိမ်းပြီး ပြန်လွှတ်တယ်။ ဓာတ်မှန်မရိုက်ပေးသေးဘူး” ဟု နန်းလောဝ်လောဝ် က ဆိုသည်။ ဗုံးစ ထိမှန်သည့် အမျိုးသမီးကို ကျောက်မဲဆေးရုံမှ တနင်္လာနေ့ပြန်လာပြရန် ရက်ချိန်းခဲ့ကြောင်း၊ ဓာတ်မှန်လည်း မရိုက်ပေးသည့် အတွက် ဗုံးစများအသား ထဲတွင် ရှိ၊မရှိ မသိရှိရသေးကြောင်းလည်း နန်းလောဝ်လောဝ် က ပြောသည်။
ယမန်နေ့ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်သည့် ကျွဲကုန်းကျေးရွာသည် ကျောက်မဲမြို့ အဝင်လမ်းခွဲတွင်သာရှိပြီး၊ ပစ်ခတ်သည့် အသံသည် တဖက်သာပစ်ခတ်သည့် အသံများဖြစ်နေကြောင်း ကျွဲကုန်းကျေးရွာမှ ပြည်သူများက ပြောသည်။“ မနေ့က အသံအကျယ် ကြီးပဲ ဒီကလူတွေအသံကြားတာလဲ အိမ်ထဲမှာပဲ နေနေရတယ်”ဟု ကျွဲကုန်းဒေသခံ တဦး ကပြောသည်။ လက်ရှိ မှာလည်း ကျွဲကုန်းကျေးရွာအတွင်း တပ်မတော်မှ တပ်သားများ သွား၊လာ လှုပ်ရှားနေသဖြင့် ပြည်သူများအနေဖြင့်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှု ဖြစ်နေကြောင်းလည်း သိရသည်။ ထိုစစ်ရေးသည် အောက်တိုဘာ ၂ ရက် မှ စတင်ကာ ယနေ့ချိန်ထိ သျှမ်းပြည်ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ကောင်စီ၊ သျှမ်းပြည် တပ်မတော်(RCSS/SSA) နှင့် အစိုးရတပ်မတော်တို့တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်နေဆဲ ဟုသိရ သည်။ ကျောက်မဲအတွင်း RCSS/SSA နှင့် အစိုးရတပ်မတော်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ကျောက်မဲမြို့နယ် အတွင်းစစ်ဘေး ရှောင် ၃၀၀၀ နီးပါး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီး၊ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲ ဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။ https://burme se.shannews.org/archives/18849
၁၃။ လူမျိုးအမည်မှန်ရရှိရေးအတွက်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းဖြစ်ဟုခမီအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးပါတီပြော
၂၀၂၀ပါတီစုံ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအား ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းသည် အနာဂတ်တွင် လူမျိုးအမည်မှန်ဖြင့် ရပ်တည်နိုင် ရေးအတွက်ဖြစ်ကြောင်း ခမီအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗဟိုကော်မတီဝင် ဦးအောင်အောင်က ပြောသည်။
လူမျိုးအမည်နှင့်ပတ်သက်၍ လက်ရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ရာ၌ တစ်ကြိမ်နှင့် ယခုနှစ်အစောပိုင်းက နိုင်ငံတော်အဆင့် ပြဌာန်းလိုက်သည့် သတ္တမတန်း ပထဝီဝင်ဖတ်စာအုပ် တွင် တစ်ကြိမ် လူမျိုးအမည်အား ဖော်ပြရာတွင် “ခမွီး”ဟု မှားယွင်းစွာအသုံးပြုထားသည်။ ထိုသို့အသုံးပြုခြင်းကို လက်မခံ နိုင် ကြောင်း နှင့် လူမျိုးကို ကိုယ်စားပြု၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ် (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်း မရှိသည့်အတွက် ဟု မှတ်ယူကာ မိမိလူမျိုးနေရာရရေးကို ကြိုးပမ်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
“ကိုယ့်လူမျိုးနာမည်ကို မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ရပ်တည်နိုင်အောင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အပြည့်ပါ။ အရင် ကနေပြီးတော့ ခမီလို့ ပြောတာကို “ခမွီး”ဆိုပြီး ခေါ်ကြတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာကော ကိုယ့်ရင်ထဲမှာပါ မခံချိ၊ မခံနိုင် ဖြစ်ရတယ်။ အော်… မသိကြလို့လား မသိဘူးဆိုပြီးတော့ ထိန်းထားရတယ်။ ၂၀၁၀ မှာ ပြိုင်တုန်းကလည်း မှန်မှန်ကန်ကန်။ (၂၀)၁၅ ကလည်း မှန်မှန်ကန် ကန်ပဲ။ အခု ၂၀၂၀ ကျတော့ ကော်မရှင်ရုံးက ကိုယ်တိုင် “ခမွီး”ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို သုံးလာတယ်။”ဟု ယင်းပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗဟိုကော်မတီဝင် ဦးအောင်အောင်က ပြောသည်။ ခမီအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးပါတီသည် လာမည့် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲတွင် ကျောက်တော်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အတွက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်နေရာ၊ မြောက်ဦးမြို့နယ်တွင် အမျိုးသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တစ်နေရာနှင့် ဘူးသီးတောင် မြို့နယ်တွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်နေရာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမည် ဖြစ်သည်။
“အဓိက အောင်နိုင်ရေးမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ ကျောက်တော်မြို့နယ်မှာဆိုရင် ကျနော်တို့ ခမီလူမျိုးတွေ အားလုံး ကို တစုတစည်းတည်း ပေါင်းလိုက်ရင် ကျောက်တော်နယ်မှာ အောင်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။ ကျန်တဲ့နေရာမှာတော့ မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူး။ ရပ်ရွာတွေက တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာဝေးတယ်။ တစ်စုတစည်းတည်း မရှိဘူး။” ဦးအောင်အောင်က ပြောသည်။ ခမီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီသည် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၅ တို့တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော်လည်း ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။ ခမီလူမျိုးများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ၁၃၅ မျိုးတွင်တရားဝင်သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရပြီး လက်ရှိတွင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် လူဦးရေတစ်သိန်းကျော် ဖြန့်ကျက်နေထိုင်လျှက်ရှိကြောင်း ဗဟိုကော်မတီဝင် ဦးအောင်အောင်က ဆိုသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-76193
ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ ပြန့်ပွားနေသည့် ကာလအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု များပြားလာသဖြင့် လူငယ်များအကြား မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ် လျှော့ချရေး လှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်ကို ရေးမြို့အခြေစိုက် မွန်ဒေသရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ MACDO က အောက်တိုဘာလ (၆) ရက်နေ့မှစ၍ ၃ ရက်ကြာလှုပ်ရှားခဲ့သည်။
မူးယစ်းဆေးဝါး တားဆီးနှိမ်နှင်းရေးတွင် ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးရန်၊ ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားအချိန် အခွင့်ကောင်းယူပြီး မူယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖြန့်ဖြူးမှုများအား သက်ဆိုင်ရာသို့ သတင်းပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း MACDO ဒါရိုက်တာ မိမာလာမွန် (မိဖြူ)က ပြောသည်။“ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတာကြောင့် ဒီလှုပ်ရှားမှုကို ကျမတို့ လူအင်အားက (၂၀) ဝန်းကျင် လောက်ပဲရှိတယ်။ ဖာလိန်ဒေသက မွန်လူငယ်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး လက်ကမ်းစာစောင်တွေ ဖြန့်ဝေတယ်၊ လှုပ်ရှားမှု (၃) ရက် တာအတွင်းမှာ (၄) နေရာရောက်ခဲ့တယ်။ ရေးမြို့ ပေါ်က အောင်ရပ်ကွက် (၃) ရပ်ကွက်၊ ဈေးကြီး၊ ရွှေဆံတော်ဘုရားရှေ့ နဲ့ အဏ္ဏဝါရပ်ကွက်မှာ ဖြစ်တယ်＂ ဟု မိမာလာမွန် ဆက်ပြောသည်။
အောင်သုခဈေးဆိုင်ရှင် နိုင်အောင်ဇော်မိုး (နဲာအးစရဲာ) က “ဒီလှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ရာမှာ အရမ်းကိုကောင်းပါတယ်၊ ဒါမယ့် ထိရောက်မှုမရှိဘူးလို့ မြင်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လက်ကမ်းစာစောင် ဖြန့်ဝေတဲ့နေရာမှာ ဖတ်မယ့်သူနည်းနေတယ် ဖတ်တဲ့သူတွေကလည်း လေးလေးနက်နက်မရှိဘူးလို့ မြင်တယ်၊ အရင်နှစ်ကဆို နယ်တွေသွားပြီး သင်တန်းတွေပို့ချတာမျိုး ရှိတယ်၊ အခုတော့ ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ အကယ်၍ ဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခု ပြုလုပ်ပြီး မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလန်းသူ တွေကို ဆိုးကျိုး ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တာတွေ၊ မိဘတွေကြည့်နိုင်ရင် ပိုပြီးသတိပြုလာကြမှာ ဖြစ်တယ်၊ နောက်ပြီး သူတို့ Facebook စာမျက်နှာပေါ် တင်ပြီး ကြည့်သူရော၊ မျှဝေသူလည်း များမယ်လို့ ထင်တယ်” ဟု သုံးသပ်ပြောကြားသည်။ http://burmese.monnews.org/2020/10/10/%e 1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%99%e1%
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးခရိုင်(လဝက)ရုံးမှ အမှုတွဲထိန်းဝန်ထမ်းတစ်ဦး ပျောက်ဆုံးနေရာ အောက်တိုဘာ ၉ ရက် မွန်းလွဲ ပိုင်းအချိန်က သေဆုံးလျှက်တွေ့ရှိကြောင်း သိရသည်။
၎င်းသည် မင်းပြားမြို့နယ်၊ ဥက္ကာပျံရပ်ကွက်မှ အသက်(၃၈)နှစ် အရွယ် ကိုကျော်လင်းခိုင်ဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာ ၇ ရက် နေ့လည် ၁၁ နာရီခန့်တွင် ပျောက်ဆုံးသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း အမည် မဖော်လိုသည့် လဝကဝန်ထမ်း တစ်ဦးက DMG သို့ ပြောသည်။“မနေ့က သူမိန်းမက ကျွန်တော့်ဆီဖုန်းဆက်တယ်။ မင်းပြား ကိုမရောက်ဘူးလို့ ပြောတယ်။ အဲဒီအချိန် ပျောက်နေ တယ်လို့သိရတာ။ လိုက်ရှာကြည့်တော့ ဗားမဲ့၊ ဗားကရားဂူနားက တောထဲမှာကြိုတွဲချပြီးတော့ သေနေတာကို တွေ့ရတယ်” ဟု ၎င်းကရှင်းပြသည်။
အဆိုပါဝန်ထမ်းသည် မိမိကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံစည်သွားခြင်းမဟုတ်ဘဲ သတ်ဖြတ်ခံရခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပတ်ဝန်းကျင် က သုံးသပ်ပြောဆိုနေကြသည်။ လက်ရှိမှာ သေဆုံးသူအား မင်းပြားမြို့တွင် သင်္ဂြိုလ်ခဲ့ပြီး မည်သို့သေဆုံးသွားသည်ကို မသိရသေးကြောင်း ၎င်းကဆက်ပြောသည်။ ထိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြောက်ဦးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် မြောက်ဦးရဲစခန်းကို DMG က ဆက်သွယ်ခဲ့ သော်လည်း ဖုန်းအဆက်အသွယ်မရရှိခဲ့ပေ။ https://www.bnionline.n et/mm/news-76196
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ်တွင် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားထားသော်လည်း တမြို့နယ်လုံး ရွေး ကောက်ပွဲကို ကျင်းပနိုင်ရန်သာ စီစဉ်ထားသည်ဟု ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲရုံး အတွင်း ရေးမှူး ဦးနှစ်ဆန်းဦးက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ကျောက်မဲမြို့နယ်တွင် အောက်တိုဘာ ၃ ရက်မှ ၉ ရက်အထိ တပ်မတော်နှင့် ရှမ်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကောင်စီ (RCSS) တို့ကြား တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားပြီး ပုံဝိုးကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှ ဒေသခံ ၂၅၀၀ ခန့်မှာ နေ့ရပ်စွန့်ခွာပြီး ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေရသဖြင့် ပဋိပက္ခဖြစ်သည့် နယ်မြေများကို လုံခြုံရေး အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ချန်လှပ်ခံခဲ့ရ မည်ကို ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများက စိုးရိမ်နေကြသည်။ ဦးနှစ်ဆန်းဦးက “ကျနော်တို့ လက်ရှိ တင်ထားတာက တန့်ယန်းမှာ ကျေးရွာအုပ်စု ၉ စု၊ ကုန်းကြမ်းမှာ ကျေးရွာအုပ်စု ၁ အုပ်စု၊ မန်တုံမှာ၂ အုပ်စု ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ အတည်မပြု နိုင်သေးပါဘူး။ ကျောက်မဲကတော့ မပါသေးပါဘူး။ ကျောက်မဲက အကုန်လုံး ကျင်းပနိုင်တယ်လို့ ကျနော်တို့ ပေးထားပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ကျောက်မဲမြို့နယ်တွင်း အောက်တိုဘာ ပထမပတ်တွင် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေသော်လည်း တိုက်ပွဲ ဖြစ်သည့် ဧရိယာများ အပါအဝင် မြို့နယ် တခုလုံးကို ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်သည့် စာရင်းတွင်သာ ထည့်ထားပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့် ရက်အနီးတွင် နယ်မြေလုံခြုံရေး တာဝန်ရှိသူများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း တာဝန်ရှိသူများ၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များက မလုံခြုံ ကြောင်း တင်ပြလာပါက ထိုအချိန်မှသာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခြင်း ရှိမရှိကို ထပ်မံ ဆုံးဖြတ်မည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ တပ်မတော် သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှ ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ကျောက်မဲမြို့နယ် တွင် အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်မှ စ၍ ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုများ မရှိတော့ပါဟု ပြောသည်။
SNLD မှ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးစိုင်းအောင်မြင့်ကလည်း “အတတ်နိုင်ဆုံးကတော့ ထိုးစစ်မဆင်ကြ ဘဲ ငြိမ်းချမ်းရေး စကား ပြောစေချင်တယ်။ စစ်ပွဲ မဖြစ်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အရင်တုန်းက ဖြစ်လာတဲ့ ပြဿနာတွေ အခု ချိန်မှာ မကျေနပ်ရင်လည်း ဆက်မဖြစ်ဖို့ ကျနော်တို့ကတော့ အနူးအညွတ် တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။ စစ်ပွဲ မဖြစ်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ” ဟု ဆိုသည်။ တပ်မတော်နှင့် RCSS သည် ပဏာမအပစ်ရပ်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် ၁ စောင်နှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် သဘော တူညီချက်၂ စောင်တို့ကို လက်မှတ် ရေးထိုးထားသည့်အပြင်၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်ကလည်း တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် (NCA) ကို လက်မှတ် ရေးထိုးထားသည်။ https://burma.irrawaddy.com /news/2020/10/12/231464.html
ရခိုင်ပြည်နယ် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် ဗန်းဗွီးကျေးရွာအနီးရှိ တောထဲသို့ ဝဥရှာဖွေရန် သွားရောက်စဉ် အသက် ၁၉နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦး ယနေ့ နေ့လည် ၁နာရီဝန်းကျင်က မိုင်းထိသေဆုံးသွားကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မှ အမျိုး သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်လတ်ကပြောဆိုသည်။ “ မိုင်းထိတယ်လို့ပြောတယ်။ ဒီနေ့ မွန်းလွဲ ၁နာရီလောက်က ဗန်းဗွီးကျေးရွာမှာ နေထိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးပေါ့။ သူတို့က တောထဲကိုသွားတာ မိုင်းထိတာပေါ့။ မိုင်းထိတဲ့သူကတော့ သေဆုံးသွားတယ်လို့ ဒေသခံတွေပြောဆိုချက်အရတော့သိရတယ်” ဟု ၎င်းကပြောဆိုသည်။
အဆိုပါ သေဆုံးသူ အမျိုးသမီးငယ်အမည်မှာ မစန်းစန်းအေးဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောကြောင့် ကျောင်းမနေနိုင်ဘဲ တောထဲ တွင် မိသားစု စားရေးသောက်ရေးအတွက် ဝဥသွားရောက်ရှာဖွေစဉ် မိုင်းထိကာ သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများ ပြောဆိုချက်အရသိရသည်။“ဗန်းဗွီးကျေးရွာရဲ့ အနောက်ဘက်မှာ သူတို့ကဆင်းရဲတော့ ဝဥသွားတူးတာပေါ့။ အားလုံးပေါင်း ၆ ယောက်ပေါ့။ အမျိုးသမီး ၄ ယောက် အမျိုးသား ၂ ယောက်ပေါ့။ မိုင်းထိတာက မစန်းစန်းအေး အသက်က ၁၉ နှစ်ပေါ့။ ကျန်တဲ့သူ ၂ ယောက်တော့ ဒဏ်ရာရတယ်။ မလပြည့်မ အသက် ၂၂နှစ် နဲ့ မထွီး အသက် ၂၅ နှစ်ပေါ့။ သူတို့တော့ နှစ်ယောက်က နည်းနည်းလေးပဲထိတယ်။ ဒဏ်ရာက မစိုးရိမ်ရဘူး။ မိုင်းထိတဲ့ မစန်းစန်းအေးကတော့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေက ထမ်းပြီးတော့ ရွာကိုပြန်အပို့မှာ ရွာမရောက်ခင်လမ်းမှာ သူကအသက်ဆုံးသွားတာပေါ့။ နေ့လည် ၁ နာရီဝန်းကျင်လောက် တော့ရှိမယ် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တာကတော့ အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ကလေးမလေးကတော့ ကျောင်းတော့မနေတော့ဘူး။ ဆင်းရဲ တယ်ဆိုတော့ ကျောင်းမထားနိုင်ဘူးလေ”ဟု ဗန်းဗွီးကျေးရွာ သားတစ်ဦးကပြောဆိုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တပ်မတော်နှင့် ရခိုင်တပ်တော် (AA) တို့ကြား လက်ရှိချိန်ထိ တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များကြောင့် အရပ်သားသေဆုံးမှုများ အပါအဝင် ယခုကဲ့သို့ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကမှ တာဝန်ယူခြင်းမရှိ သော ထောင်ထားသည့် မိုင်းနင်းမိ၍ သေဆုံးဒဏ်ရာရသည့် ဖြစ်စဉ်များလည်း မကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားလျက်ရှိရသည်။ https://www.khitthitnews.com/2020/10/%e1%80%95%e1%80%af%e1%80%8f%e 1%80%b9%e1%80%
ကယားပြည်နယ် ဘောလခဲမြို့ နန်းဖဲသာယာကုန်းရပ်ကွက်မှာ ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (KySDP ) ဆိုင်းပုဒ် ဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။
KySDP အနေနဲ့ ပါတီဆိုင်းပုဒ်ဖျက်စီးခံရတာ ပထမဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ ဒါဟာ ပါတီကြီးတွေက ပါတီငယ်တွေကို နှောက်ယှက် တာဖြစ်တယ်လို့ KySDP အတွင်းရေးမှူးလည်းဖြစ် လက်ရှိ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်လည်းဖြစ်တဲ့ ဦးသဲရယ်က ပြောပါတယ်။“ကျနော်တို့သုံးသပ်မိသလောက်က ပါတီကြီးတွေက ပါတီငယ်တွေကို လိုက်ပြီးနှောက်ယှက်တာလို့ ကျနော် တို့ မြင်တယ်။ ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာတော့ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ ရှိကြတာကို အားလုံးလက်ခံနိုင်ဖို့ လိုတယ်။ အခုဟာက ဒီပါတီ ကမ ရှိရဘူး။ ငါတို့ဘဲရှိရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ ဆိုလို့ရှိရင်တော့ တကယ်လို့ အစိုးရဖြစ်လာ တဲ့တစ်နေ့ ကျရင်တော့ ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ။ ဒါကလဲ အာဏာရှင်ဆန်တုန်းပါဘဲ။ ” လို့ ပြောပါတယ်။ ဖျက်စီးခံရတဲ့ဆိုင်ပုဒ်အနီးမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစုပါတီ ( NDF ) နဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေးစီအဖွဲ့ချုပ် ( NLD ) ဆိုင်းပုဒ်တို့ရှိပါတယ်။ ဖျက်ဆီးတဲ့ သူက စိတ်မနှံ့ဆို ပေမယ့် ယုံဖို့ခက်တယ်လို့ ဦးသဲရယ်ကပြောပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံတင်ပြ သွားမယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
ဘောလခဲမြို့နယ်အတွင်းမှာ လက်ရှိ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဟောင်းဖြစ်တဲ့ ဦးစိုးသိန်းက ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီကနေ ဝင်ပြိုင်မည့်မဲဆန္ဒနယ်မြေလည်းဖြစ်ပြီး တခြား အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု ၊ ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ၊ တိုင်းရင်း သား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ ၊ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလတို့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြတဲ့ မဲဆန္ဒနယ် ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ဘောလခဲမြို့နယ်အတွင်းမှာ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကနေပြီး ၂၀၁၅ ရွေးကောက် ပွဲမှာ မဲဆန္ဒနယ်ဖြစ်တဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၁နေရာ အမျိုးသားလွှတ်တော် ၂ နေရာ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ၂ နေရာတို့မှာ အနိုင်ရရှိခဲ့ကြတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ https://www.bnionline.net/mm/news-76160
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်ခံရသူများပြားလာမှုကြောင့် Stay at Home အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည့် ကလေးမြို့ စမ်းမြို့ ရက်ကွက်အား ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရသူ ထပ်မံတွေ့ရှိမှုမရှိပါက Stay at Home ဒေသမှ ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိ ရသည်။“စမ်းမြို့ကို Stay at Home အဖြစ် ၁၄ ရက်သတ်မှတ်ထားတာပေါ့၊ ဒီနေ့က ၁၁ ရက်ရှိသွားပြီဆိုတော့ မနက်က လုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမှာ စမ်းမြို့ရက်ကွက်ကို ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ပိုးထပ်တွေ့တာမရှိရင် Stay at Home ကနေ ပြန်ဖျက်ပေး ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့၊ မနေ့က တစ်ယောက်ထပ်တွေ့ပေမယ့် သူက စမ်းမြို့ရပ်ကွက်ကမဟုတ်ဘူး ရန်ကုန်ကနေလာတဲ့ ကားသမားပေါ့” ဟု ကလေးခရိုင်ပြန်ဆက်ရုံးမှ ဉီးစီးမှူး ဉီးညီဇော်ကပြောသည်။
ကိုဗစ်-၁၉ ဒုတိယလှိုင်းကာလတွင် ရန်ကုန်မြို့မှ ပြန်လာသည့်အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဉီးထံမှ တစ်ဆင့် စမ်းမြို့ရပ်ကွက်တွင် အယောက် ၂၀ ကျော် ပိုးတွေ့လူနာတွေ့ရှိခဲ့မှုကြောင့် စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ကစ၍ စမ်းမြို့ရပ်ကွက်တစ်ခုလုံးကို Stay at Home အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အောက်တိုဘာ ၈ ရက်နေ့က ကလေးမြို့နယ်မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာမည့် အရေး ကြီးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး ယာဉ်မောင်းနှင့် ယာဉ်နောက်လိုက် (၅၅) ဦး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေဦးစီးဌာနမှ ကိုဗစ် – ၁၉ ရောဂါပိုး ရှိ မရှိ Test kit ဖြင့် စစ်ဆေးရာမှ High Class ဂိတ်မှ ယာဉ်နောက်လိုက်တစ်ဦး ထံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးတွေ့ ရှိခဲ့ပြီး Close Contact ၁၃ ဉီးအား ကွာရင်တင်းဝင်ခိုင်း ထားကြောင်းသိရသည်။
ကလေးမြို့တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ဒုတိယလှိုင်းကာလအတွင်း ပိုးတွေ့လူနာ (၂၈) ဦးထိရှိခဲ့ပြီး (၁၁ ) ဦးမှာ ဆေးရုံမှ ဆင်းသွားပြီး ဖြစ်၍ ယခုလက်ရှိတွင် (၁၇) ဦးမှာ ကုသမှုခံယူလျှက်ရှိသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-76176
ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်ပွားမှုနဲ့အတူ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲတွေကြောင့် မြို့ပြနဲ့အလှမ်းဝေးတဲ့ ကျေးလက်ဒေသက ပြည်သူ တွေ မှာ မဲစာရင်းကြည့်ဖို့နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဆန္ဒမဲပေးဖို့ စိတ်ပါဝင်စားမှုနည်းပါး နေကြတာပါ။ အဆိုပါ ဒေသခံတွေကို သက်ဆိုင်ရာ ကော်မရှင်က ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အသိပညာပေးမှု နည်းပါးတာကြောင့် ဒေသခံလူမှုရေးအဖွဲ့တွေက ကို့အစီအစဉ်နဲ့ကို ရွေးကောက်ပွဲအသိပညာပေးမှုတွေ ဆောင်ရွက်နေရပါတယ်။
“ရပ်ကျေးကော်မရှင်ရုံးခွဲတွေမှာ ကပ်ထားပေမယ့် လာကြည့်တဲ့သူက တော်တော်ကိုနည်းတယ်။ ရွာသူရွာသားအများစုက ရွေးကောက်ပွဲကို တစ်ကြိမ်လောက်ပဲ နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့တွေ့ဖူးကြတာ။ကိုယ့်စားဝတ်နေရေးကိုယ် ရှုပ်နေတာတစ်ကြောင်း ဒီဟာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လိုက်လံနှိုးဆော်တဲ့သူ မရှိတာက တစ်ကြောင်းပေါ့။ ကော်မရှင်ကတော့ အဆောက်အဦးတွေ ကျောင်း တွေမှာ ဒီအတိုင်းပဲကပ်ထားလိုက်တာပဲ လိုက်လံနှိုးဆော်တာ မရှိဘူး”လို့ ရေးမြောက်ပိုင်းကျေးရွာတွေမှာ အသိပညာပေး ဆောင်ရွက်နေသူ ကိုစောအောင်ရွှေဝင်းက ပြောပါတယ်။ ဒီဒေသခံတွေကိုတော့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေက ရွေးကောက်ပွဲ အသိပညာပေးမှုထက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွေကိုသာ ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်နေကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရေးအရှေ့ပိုင်း ကျေးရွာတွေဟာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတာမို့ အနီးစပ်ဆုံး မဲရုံမှာ ဆန္ဒမဲလာထည့်ဖို့ မိုင် ၃၀ ကျော်ခန့်ခရီးကို တစ်နေကုန်လာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒေသခံတွေ ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ဖို့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ ကော်မရှင်တို့က သွားလာရေးအဆင်ပြေအောင် စီစဉ်ပေးရင် မဲပေးမယ့်သူ တိုးလာနိုင်တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ “ပါတီတွေက သူတို့အောင်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုပို့ အစီအစဉ် တွေ လုပ်မယ်လို့ ကြားမိတယ်။ ပါတီဖြစ်ဖြစ် ကော်မရှင်ဖြစ်ဖြစ် ကြိုပို့လုပ်ပေးရင် မဲပေးသူက ၂၀၁၅ ထက် ပိုများလာ မယ်ထင်တယ်”လို့ ကံလှကျေးရွာဒေသခံ ကိုကျော်မျိုးထူးက ပြောပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ ဒီဒေသ က မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူဦးရေရဲ့ ထက်ဝက်ခန့်သာ ဆန္ဒမဲလာပေးခဲ့ကြတာပါ။ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ ရေးမြို့နယ် အတွင်း ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူ ၂ သိန်းကျော်ရှိ ပါတယ်။ https://www.bnionline.net/mm/news-76218
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်သည့် မြို့နယ်များကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (UEC) အ နေဖြင့် အမြန်ဆုံးကြေငြာပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကပြောသည်။
ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်သည့် မြို့နယ်များကို UEC အနေဖြင့် လက်ရှိအချိန်ထိ ကြေငြာခြင်းမရှိသည့်အတွက် အဆိုပါ မကျင်းပနိုင်သည့်မြို့နယ်များကို အမြန်ဆုံးကြေငြာပေးရန်လိုအပ်ကြောင်း ရသေ့တောင်မြို့နယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ယှဉ်ပြိုင်မည့် ဒေါ်ခင်စောဝေက ပြောသည်။“အခုဆိုရင် ကိုဗစ်ကြောင့် သွားလာရေး တော်တော်ခက်ခဲတာတွေရှိတယ်။ ပြီးရင် ဗီနိုင်းတွေ၊ ပန်းဖလက်တွေ၊ လုပ်ရတဲ့အခါကျတော့ ငွေရေးကြေးရေးကလည်း တော်တော်အကုန်ကျခံထားပြီးပြီဖြစ်တယ်။ ဥပဒေကြောင်းအရ ရွေးကောက်ပွဲမရှိဘူးဆိုရင်တော့ ကျမတို့စောဒကတက်စရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် အမြန်ဆုံး သိချင်နေတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲနီးမှ သိရမယ်ဆိုရင် ကျမတို့လုပ်ထားတဲ့ လူပင်ပန်း ခံထားတာ၊ အချိန်ကုန်ခံထားတာတွေက အလာဟသအချည်းနှီးဖြစ်သွားမယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် မှ မြို့နယ်တချို့တွင် လုံခြုံရေးအခြေအနေအရ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ခြေမရှိသည့် မြို့နယ်များ ရှိနေပြီး အဆိုပါ မကျင်းပနိုင် သည့်မြို့နယ်များကို အောက်တိုဘာလအတွင်းတွင်ကြေငြာသွားမည်ဟု UEC မှ ပြောဆိုထားသော်လည်း ယခုအချိန်ထိ ကြေငြာခြင်းမရှိသည့် အတွက် အမြန်ဆုံးကြေငြာပေးရန် လိုလားနေ ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းအပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမှတ်(၂) နေရာမှလွဲ၍ ကျန်မြို့နယ်များအားလုံးတွင် နေရာစုံဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမည့် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ(ANP) အနေဖြင့်လည်း ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်မည့်မြို့နယ်များ ကို မကြေငြာသေးသည့်အပေါ် စိုးရိမ်မိကြောင်း ယင်းပါတီ အတွင်းရေးမှူး(၁) ဦးအောင်မြကျော်ကဆိုသည်။ ဤသို့ ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်သည့် မြို့နယ်များကြေငြာမည့် နေ့ရက်ကိုသိရှိနိုင်ရန် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ တာဝန်ရှိသူများကို ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း ဖုန်းလက်ခံဖြေကြားခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့နယ်တို့တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းမှ လက်ရှိအချိန်ထိ တပ်မတော် နှင့် ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့(AA)တို့ ထိတွေ့မှုများ မကြာခဏဖြစ်ပွားနေလျက်ရှိသည်။ ထိုသို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုများ ရှိနေခြင်း ကြောင့် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပမည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲအား ၎င်းဒေသများတွင် ကျင်းပရန်ရှိ၊ မရှိ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးသော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ဖွယ်မရှိကြောင်း အများပြည်သူက သုံးသပ်လျက် ရှိသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-76208
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မြန်မာ့တပ်မတော်က ကျေးရွာတွေကို မီးရှို့ပြီး အရပ်သားတွေကို သတ်ဖြတ်နေတဲ့အတွက် အရေးယူပေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကို နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ AI က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်က လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို မျက်မြင်သက်သေတွေ ဂြိုလ်တုက ရရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ကိုးကားပြီး ထုတ်ပြန်တဲ့ အဲဒီကြေညာချက်မှာ မြန်မာ့တပ်မတော်ဟာ အရပ်သားတွေရဲ့ ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကို လုံးဝဥပက္ခာပြုထားတယ်လို့ AI ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ AA ကြား ပဋိပက္ခတွေ ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာနေပြီး အရပ်သားတွေ ပိုမိုထိခိုက်နစ်နာနေတဲ့အတွက် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီက မြန်မာနိုင်ငံကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုတရားရုံး ICC ကို လွှဲပြောင်းပြီး အရေးယူသင့်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မြေမြှုပ်မိုင်းတွေကြောင့် အရပ်သားတွေ သေကြေဒဏ်ရာရနေကြကြောင်း အဲဒီမြေမြှုပ်မိုင်းတွေကို AA ရော မြန်မာ့တပ်မတော်ကရော သုံးစွဲနေကြောင်းလည်း အဲဒီကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ AI ရဲ့ ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစိုးရနဲ့ တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကို RFA က ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ အဆက်အသွယ် မရခဲ့ပါဘူး။ https://www.rfa.org/burmese/news/ai-urges-icc-10122020091034.html
ရခိုင်ပြည်နယ်အပေါ် အမှောင်ကျရောက်နေမှုကို ဖယ်ရှားရေးအတွက် မကောင်းဆိုးဝါးနှင်သည့် စံဂိုးခတ်လှုပ်ရှားမှုကို ရခိုင်ပြည်ကျောင်းသားသမဂ္ဂက ဦးဆောင်၍ ရခိုင်တစ်ပြည်နယ်လုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ယမန်နေ့ညက လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ရခိုင်ပြည်ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှ သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ကိုကျော်နိုင်ဌေးက ပြောဆိုသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ဝန်း လုံးတွင် ရခိုင်ရိုးရာဓလေ့ စကောများကို ရိုက်တီး၍ မကောင်းဆိုးဝါးနှင်သည့် လှုပ်ရှားမှုကို ယမန်နေ့က လုပ်ဆောင်ခဲ့ ကြောင်း၊ အဓိက အားဖြင့် ရခိုင်ပြည်အပေါ် အမှောင်ကျရောက်နေမှုနှင့် မတရားလုပ်ဆောင်မှုများ အဆုံးသတ်ရေးဖြစ် ကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်သူများ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ကြောင်း ရခိုင်အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများထံမှ သိရှိရသည်။
“စံဂိုးခတ်ဆိုတာက ရခိုင်လိုဆိုရင် သူက စကောရိုက်ပြီး မကောင်းဆိုးဝါးနှင်တာပေါ့။ ရခိုင်ရိုးရာမှာ အဲဒါကို ကျနော်တို့ လုပ်ဆောင်တာပါ။ ရခိုင်တစ်ပြည်နယ်လုံး မနေ့က ပါဝင်ကြပါတယ်။ အခု တောက်လျှောက် မနေ့ညက လှုပ်ရှားမှုကို ပါဝင်တဲ့ သတင်းတွေ ဝင်လာနေပါတယ်။ သံတွဲနဲ့ ဂွကတော့ သတင်းမရသေးဘူးပေါ့။ ၁၇ မြို့နယ်မှာ ကျန်တာတွေ အားလုံးက ပါဝင်ကြတယ်။ ပြည်ပ ရောက် ရခိုင်တွေကလည်း ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ပါတယ်။ အဓိကက ကျနော်တို့ ရခိုင်တွေအပေါ်မှာ မကောင်းဆိုးဝါးကျရောက်နေတဲ့အတွက် ဒီမကောင်းဆိုးဝါးတွေကို နှင်ထုတ်တာပါ။ မနေ့ညက ရခိုင်ပြည်သူတွေက ည ၈ နာရီ ၄၀ လောက်မှာ စတယ်။ ကျနော်တို့က ည ၉ နာရီ လောက်ကနေ ၉ နာရီ ၂၀ မှာပါဝင်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်ကျောင်းသား သမဂ္ဂက ဦးဆောင်တာပါ။ တချို့တွေကလည်း ဒီလို စကောတွေပေါ်မှာ စစ်ပွဲ ရပ်တန့်ရေး”ဟု ကိုကျော်နိုင်ဌေးက ဆို သည်။ အချို့သော ရခိုင်ပြည်သူများက စကောများပေါ်တွင် ရခိုင်ပြည်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၏ကြွေးကြော်သံများကို ရေးထိုး၍ မကောင်းဆိုးဝါးနှင်ကြသည်ဟု သိရှိရသည်။
စံဂိုးခတ်လှုပ်ရှားမှုကို အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုပုံစံဖြင့် ထပ်မံ လုပ်ဆောင်သွားရန်ရှိပြီး မည်သည့်အချိန်တွင် ထပ်မံလုပ် ဆောင်မည်ကိုမူ မသိရှိသေးကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ထပ်မံ ကြုံလာရမည့် အခြေအနေများအပေါ်တွင်မူတည်ကြောင်း ရခိုင်အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများက ပြောဆိုသည်။ https://www.khitthitnews.com/2020/10/%e1%80%9b%e 1%80%81%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့် နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ ကို အင်အား တောင့်တင်း စေရန် တပ်မတော်မှ အရာရှိကြီး ၅၁ ဦး ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ သို့ ပြောင်းရွှေ့ တာဝန် ထမ်းဆောင် မည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်သည့် နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး၏ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ဧရာဝတီ သတင်းဌာနက တပ်မ တော် အရာရှိများ ရဲတပ်ဖွဲ့ သို့ ပြောင်းရွေ့ မည့် သတင်း အပေါ် အတည်ပြုစဉ် သမ္မတရုံး ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဇော်ဌေးက အ ထက်ပါအတိုင်း ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့တွင် အသစ် ထပ်မံ ဖွဲ့ စည်းမည့် နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ရင်း ၂ ရင်းတွင် ယင်းတပ်မတော် အရာရှိများ တာဝန်ထမ်းဆောင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ရင်း သဘောသဘာဝသည် နယ်မြေရဲ၊ မှုခင်းရဲ သဘော သဘာဝက မတူကြောင်း သမ္မတရုံး ပြောခွင့်ရသူ ဦးဇော်ဌေးက ဆိုသည်။“လိုအပ်ချက်အရ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီးကနေပြီး တော့ ဗိုလ်ကြီးအဆင့် ကပ္ပတိန် Level အထိပေါ့။ ၅၁ ယောက် ရှိပါတယ်။ ကျန်တဲ့ အဖွဲ့ တွေကတော့ ရဲသန္ဓေတွေနဲ့ စုဖွဲ့ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့မှာ လိုအပ်ချက်အရ ရွေ့ပြောင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကက်ဘိနက်(အစိုးရအဖွဲ့)ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်လည်း ပြီးသွားပါပြီ”ဟု ဦးဇော်ဌေးက ပြောသည်။ ၎င်းက ဆက်၍ “ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တာဝန် ထမ်းဆောင်နေတဲ့ နယ်ခြားစောင့်ရဲတွေက ARSA ၊ AA တို့လို အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာ။ တိုက်ခိုက်ရေးကို ဦးစားပေးတဲ့ အဖွဲ့ တွေ ဖြစ်တယ်”ဟု ပြောသည်။
ယင်းရွေ့ ပြောင်းလာသူ တပ်မတော် အရာရှိများသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ ဘက်သို့ သတင်းပို့နိုင်ခြင်း မရှိသေးသော်လည်း စစ်ရာထူး ခန့်ချုပ်ရုံးမှ ပြောင်းရွေ့ မိန့် ထွက်သွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ရာထူးပြောင်းရွေ့လာသည့်အခါ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး အဆင့်သည် ရဲဘက်သို့ ရောက်သည့်အခါ ဒုတိယ ရဲမှူးကြီး အဖြစ် အဆင့်တူ ပြောင်းရွေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဦးဇော်ဌေးက ရှင်းပြသည်။ အစိုးရဘက်က အကူအညီတောင်းခံသဖြင့် တပ်မတော်ဘက်မှ အရာရှိ၊ အခြားအဆင့် တပ်မတော်သားများကို စိစစ် ရွေး ချယ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ အခါအားလျော်စွာ စေလွှတ်ပေးနေသည်မှာ ကြာပြီဖြစ် ကြောင်း၊ လုံခြုံရေး၊ စစ်ဆင်ရေး ကိစ္စရပ်များတွင် အတွေ့ အကြုံ ရှိသူများကို စေလွှတ်ပေးလျက်ရှိကြောင်း တပ်မတော်မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/10/231 378.html
ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီနယ်စပ် ထိုင်း-မြန်မာ အမှတ်(၂)တံတားမှတဆင့် ကုန်သွယ်မှု ပြုလုပ်နေသည့် မြန်မာကား များအား ယနေ့ (အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်) နံနက်ပိုင်းက ထိုင်းဘက်ခြမ်းမှ ဝင်ရောက်ခွင့်မပြုသဖြင့် မြန်မာ ကားသမား (၁၀၀) ဦး ခန့်မှ မြန်မာဘက်ခြမ်း Cargo gate အဝတွင် ထိုင်းယာဉ်များ ဝင်မလာစေရန် တန်ပြန်ပိတ်ဆို့တားဆီးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ Covid-19 ကူးစက်မှု ဂယက်အား အကြောင်းပြကာ ယနေ့ နံနက် ၆ နာရီခန့်က ထိုင်းစစ်တပ်မှ မြန်မာ မော်တော် ယာဉ်များအား ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်မပြုသဖြင့် မြန်မာဘက်မှာလည်း ထိုင်းချစ်ကြည်ရေးတံတား အမှတ်(၂) တံတား၊ မြန်မာဘက်ခြမ်း CARGO Gate တွင် မြန်မာကုန်တင်ယာဉ်မောင်း(၁၀၀)နီးပါးခန့် စုဝေး၍ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှ မော် တော်ယာဉ်ကုန်ကားများအား မြန်မာဘက်ခြမ်းသို့ဝင်ရောက်မှု မရှိစေရေးအတွက် စောင့်ဆိုင်းပိတ်ဆို့မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။
“မဲဆောက်မြို့သို့ ကုန်ပစ္စည်းများတင်ဆောင်ဖို့အတွက် ထိုင်းဘက်ခြမ်း အမှတ်(၂)တံတားရှိ သက်ဆိုင်ရာသို့ ပေးသွင်းရ မယ့် ငွေကြေးတွေကို ပေးပြီးကာမှ ကုန်ပစ္စည်းတင် မြန်မာမော်တော်ယာဉ်ငယ်တွေကို အမှတ်(၂) တံတား ထိုင်းဘက်ခြမ်း CARGO ဂိတ်ရှိ ထိုင်းစစ်တပ်က မဲဆောက်မြို့တွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်မပြုဘဲ ပိတ်ပင်တား ဆီးခဲ့တာပါ။ ပေးသွင်းထားတဲ့ ငွေတွေလည်းပြန်မရခဲ့လို့ နစ်နာမှုရှိခဲ့တယ်”ဟု နံနက်ပိုင်းက ထိုင်းဘက်ခြမ်းသို့ ရောက်ရှိပြီးကာမှ ဝင်ခွင့်မရဘဲ လှည့်ပြန်ခဲ့ ရတဲ့ မြန်မာယာဉ်မောင်းတစ်ဦးက ပြောသည်။ အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှု အဆင်ပြေစေရန်အတွက် မြဝတီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဉီးတေဇာအောင်နှင့် တာ့ခ်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့က ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်၍ မြန်မာကုန်တင် ယာဉ်ငယ်များကို အမှတ် ၂ တံတား ထိုင်းဘက်ခြမ်း BCF ဇုန်တွင် ကုန်ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းစေမည်ဖြစ်သလို မြန်မာဘက်ခြမ်း အနေဖြင့်လည်း ထိုင်းကားများအား CARGO ဂိတ်တွင်သာ ကုန်ပစ္စည်းများ လွှဲပြောင်းစေမည်ဟု ကနဉီး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ သည်ဟု ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြောသည်။
သို့သော် ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် မြန်မာကုန်ပစ္စည်းတင်ယာဉ်များပေါ်သို့ ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတင် ယာဉ်ပေါ်မှ ကုန်ပစ္စည်းများ အား ထိုင်းဘက်ခြမ်း BCF ဇုန်တွင် လွှဲပြောင်းတင်ဆောင်လျက်ရှိသော်လည်း ထိုင်းတပ်မတော်မှ ထွက်ခွာခွင့်မပြုသေး ကြောင်း သိရှိရသည်။ http://kicnews.org/2020/10/%e1%80%9 1%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84% e1%80%b9%e1%80
၁။ နှဈဖကျတပျဖှဲ့ဝငျမြား အပွနျအလှနျဖမျးဆီးခွငျးကွောငျ့ မှနျပွညျသဈပါတီနှငျ့ ပဈခတျမှုဖွဈပှားခဲ့ဟု KNU/KNLA-PC ဆို
၂။ ကရငျကိုခဈြသျောလညျး ကရငျပါတီကိုမဲမပေးဟု ပွောဆိုနသေူမြားသညျ နိုငျငံရေးအသိသေးသိမျသူမြားသာဖွဈ သညျဟု KNDP ပွော
၃။ ကြောကျမဲ ပုံဝိုးစဈရှောငျစခနျးအနီး စဈရဟတျယာဉျ ၄ စီးဖွငျ့ အငျအားဖွညျ့
၄။ ရှာသား ၃ ဦးကို မူးယဈဆေးဝါးအမှုဖွငျ့ KNU ဖမျးဆီးချေါဆောငျသှားခွငျးကိစ်စ ပွညျနယျအစိုးရ ကနျ့ကှကျ
၅။ ကခငျြပွညျနယျ ပွညျသူ့ပါတီ KSPP က နိုငျငံပိုငျရုပျသံတှငျ ဟောပွောမှုအစီစဉျ ပါဝငျမညျ မဟုတျ
၆။ ကရငျပွညျနယျရှာနှဈရှာ ပဲခူးတိုငျးမဲစာရငျးထဲရောကျနမှေု ပွနျလညျပွငျဆငျနိုငျခွငျးမရှိသေး
၇။ တပျမတျောနှငျ့ RCSS/SSA တို့ တိုကျပှဲကွောငျ့ ပွညျသူလူထု အခွခေံလူ့အခှငျ့အရေး မဆုံးရှုံးစရေေး တာဝနျယူ ဖွရှေငျး ပေးရနျ ကြောကျမဲ မွို့နယျမှ လှတျတျောကိုယျစားလှယျမြားက လကျမှတျရေးထိုး၍ တငျပွတောငျးဆို
၈။ ကယားတှငျ မဲပေးရနျ လြှောကျထားသညျ့ ရှပွေ့ောငျးလုပျသား ၅၀၀၀ ကြျောရှိ
၉။ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲ ရနျကုနျကရငျရေးရာအတှကျ ကရငျမဲဆန်ဒရှငျဦးရေ ၅၅, ၀၀၀ ကြျောတိုးလာ
၁၀။ ဦးအယျလျဖောငျးရှိုအား ပွညျသူ့ဘဏ်ဍာငှေ အလှဲသုံးခဲ့သညျဟုဆိုကာကယားပွညျနယျလှတျတျောဥက်ကဋ်ဌ ခှငျ့ပွုခကျြ ဖွငျ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျတဈဦးကလှိုငျကျောရဲစခနျးတှငျ တိုငျတနျးခဲ့ပွီး အမှုမဖှငျ့ပေးသေးဟုဆို
၁၁။ မဲဆှယျကာလ စနဈတကဖြွဈဖို့ အစိုးရကို UNA တိုကျတှနျး
၁၂။ ကြောကျမဲအနီး ပဈခတျမှုကွောငျ့ အမြိုးသမီး တဦး ဗုံးစ ထိမှနျ
၁၃။ လူမြိုးအမညျမှနျရရှိရေးအတှကျ ရှေးကောကျပှဲ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခွငျးဖွဈဟု ခမီအမြိုးသားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျ ရေးပါတီပွော
၁၄။ ရေးမွို့ပျေါတှငျ မူးယဈဆေးဝါးအန်တရာယျလြှော့ခရြေး လှုပျရှားမှုပွုလုပျ
၁၅။ မွောကျဦးခရိုငျရုံးမှ ပြောကျဆုံးနသေညျ့ လဝကဝနျထမျးတဈဦးအား သဆေုံးလကျြတှရှေိ့
၁၆။ ကြောကျမဲတှငျ တိုကျပှဲမြားဖွဈနသေျောလညျး ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပရနျပွငျထား
၁၇။ ပုဏ်ဏားကြှနျးတှငျ စားဝတျနရေေးအတှကျ ၀ ဥရှာသူ အမြိုးသမီး ၃ ဦး မိုငျးထိပွီး အသကျ ၁၉ နှဈအရှယျ မစနျးစနျးအေး သဆေုံး
၁၈။ ဘောလခဲမွို့မှာ ပွညျနယျအခွစေိုကျပါတီ ဆိုငျးပုဒျဖကျြဆီးခံရ
၁၉။ ကိုဗဈ ရောဂါကူးစကျခံရသူ ထပျမံတှရှေိ့မှုမရှိပါက စမျးမွို့ရကျကှကျအား Stay at Home မှ ပယျဖကျြသှားမညျ
၂၀။ မွို့ပွနဲ့အလှမျးဝေးတဲ့ ကြေးလကျဒသေမှာ ရှေးကောကျပှဲအပျေါ စိတျဝငျစားမှုနညျးပါး
၂၁။ ရှေးကောကျပှဲမကငျြးပနိုငျသညျ့ မွို့နယျမြားကို အမွနျဆုံးကွငွောပေးရနျ တောငျးဆို
၂၂။ ရခိုငျအရေး ICC လှဲပေးဖို့ လုံခွုံရေးကောငျစီကို AI တောငျးဆို
၂၃။ ရခိုငျပွညျနယျတှငျ မတရားမှု အမှောငျကရြောကျနမှေု ဖယျရှားရေး မကောငျးဆိုးဝါး နှငျသညျ့ စံဂိုးခတျလှုပျရှားမှု လုပျဆောငျ
၂၄။ တပျမတျော အရာရှိ ၅၀ ကြျော နယျခွားစောငျ့ ရဲတပျဖှဲ့ သို့ ပွောငျးရှေ့ တာဝနျ ထမျးမညျ
၂၅။ ထိုငျးဘကျခွမျးမှ မွနျမာကားမြားအား ဝငျရောကျခှငျ့ မပွုသဖွငျ့ မွနျမာဘကျမှ တနျပွနျပိတျဆို့မှု ဖွဈပှား
နှဈဖကျတပျဖှဲ့ဝငျမြား အပွနျအလှနျ ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးမှုကွောငျ့ မှနျပွညျသဈပါတီ-NMSPနှငျ့ ၎င်းငျးတို့တပျဖှဲ့အကွား ယမနျ နေ့ (အောကျတိုဘာလ ၁၁ ရကျနေ့)က ကရငျပွညျနယျ၊ ကော့ကရိတျမွို့နယျ၊ ကြောကျရတှေငျးရှာနှငျ့ မငျးရှာကွားတှငျ ပဈခတျမှုဖွဈပှားခဲ့ကွောငျး ကရငျငွိမျးခမျြးရေးကောငျစီ-KNU/KNLA-PC ဘကျက ပွောသညျ။
မှနျပွညျသဈပါတီ၏ နယျမွအေတှငျး ၎င်းငျးတို့၏တပျဖှဲ့ဝငျနှဈဦး တဈပတျကွာ ပြောကျဆုံးနကွေောငျးနှငျ့ ဖမျးဆီးထိနျးသိမျး ခံထားသောကွောငျ့ သှားရောကျချေါယူရာ၌ လမျးတှငျ ၎င်းငျးတို့တပျဖှဲ့ဝငျမြား ပဈခတျခံရခွငျးဖွဈသညျဟု KNU/KNLA -PC တပျရငျး (၇၇၆)၏ ဒုတပျရငျးမှူး ဗိုလျမှူးစောစန်ဓိမာက ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။“အရငျက တဈဖှဲ့နဲ့ တဈဖှဲ့အကွားမှာ မနာလို ဝနျတိုမှုကနေ သူ့လူကိုယျဖမျး၊ ကိုယျ့လူသူဖမျးလုပျကွတာ။ ကနြျောတို့ဘကျ ဖမျးထားရငျ သှားပွနျပို့ပေးတယျ။ ကနြေျာ့ကလေးတှကေို လာပို့ခိုငျးတာ တဈခါလညျး မပို့ နှဈခါလညျး မပို့နဲ့ဆိုတော့ ကနြေျာ့တပျသားတှကေို သှားချေါခိုငျး လိုကျတာ။ သှားဖို့ကိုလညျး သူတို့ကိုအကွောငျးကွားလိုကျတယျ။ လမျးမှာအပဈခံရတာပဲ”ဟု ဗိုလျမှူးစောစန်ဓိမာက ပွော သညျ။ KNU/KNALA-PC တပျဖှဲ့ဝငျမြား စီးနငျးလာသညျ့ ကားကို မှနျပွညျသဈဘကျမှ စတငျပဈခတျခဲ့ခွငျးဖွဈပွီး ၎င်းငျးတို့ ဘကျက ပွနျလညျပဈခတျခွငျးမရှိကွောငျး၊ ယာဉျပျေါတှငျ တပျဖှဲ့ဝငျ ၁၀ ဦးခနျ့ ပါဝငျသှားပွီး အပွငျးအထနျထိခိုကျမှု မရှိ သျောလညျး ရဲဘျော ၂ ဦးမှာ ကညျြရှပျမှနျ၍ ဒဏျရာအနညျးငယျရရှိသှားကွောငျးနှငျ့ ကားတဈစီးလုံးမှာ သနေတျမှနျရာမြား ဖွငျ့ ပကျြစီးကွမှေသှားကွောငျး ဗိုလျမှူးစောစန်ဓိမာက ဆကျပွောသညျ။
အဆိုပါ မှနျပွညျသဈပါတီမှ ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးထားသူမြားမှာ ၎င်းငျးပဈခတျမှုဖွဈပှားရာ ကြေးရှာ အနီးဝနျးကငျြတှငျ မူးယဈ ဆေးဝါးမြား လာရောကျဖွနျ့ဖွူးရောငျးခခြွငျးကွောငျ့ ပွီးခဲ့သညျ့ စကျတငျဘာလ ၂၄ ရကျနကေ့ ဖမျးဆီးထားခွငျးဖွဈကွောငျး နှငျ့ ၎င်းငျးဖမျးဆီးမှုကို အကွောငျးပွ၍ ၎င်းငျးတို့ နယျမွအေတှငျးသို့ အငျအားဖွငျ့ ဝငျရောကျလာခွငျးကွောငျ့ မထငျမှတျဘဲ ပဈခတျမှုဖွဈပှားရခွငျးဖွဈသညျဟု မှနျပွညျသဈပါတီ သထုံခရိုငျအတှငျးရေးမှူး နိုငျကှနျးစိုကျက မှနျသတငျးအဂေငျြစီသို့ ပွောဆိုထားသညျ။ မှနျပွညျသဈပါတီဘကျမှ ဖမျးဆီးထားသူ ၂ ဦးအနကျ စောသူရဆိုသူမှာ တပျဖှဲ့ဝငျအဖွဈမှ ထုတျပယျ ထားကွောငျး KNU/ KNLA-PC ဘကျက ပွောဆိုထားကွောငျး ၎င်းငျးစောသူရမှ ၎င်းငျးတို့ နယျမွအေတှငျးသို့ ဝငျရောကျလှုပျရှား ခွငျးမပွုရနျလညျး အပွနျအလှနျ သဘောတူထားကွောငျးလညျး နိုငျကှနျးစိုကျက ဆကျလကျပွောဆိုထားသညျ။ မှနျပွညျသဈ ပါတီ(NMSP) နှငျ့ KNU/KNLA-PC နှဈဖှဲ့စလုံးသညျ တဈနိုငျငံလုံး ပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေး သဘောတူ စာခြုပျ(NCA)ကို လကျမှတျရေးထိုးထားကွသညျ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးမြား ဖွဈသညျ။ http://kicnews.org/20 20/10/% e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%96%e1%80
ကရငျကိုခဈြသျောလညျး ကရငျပါတီကို မဲမပေးဟု ပွောဆိုနသေညျ့ အခြို့ကရငျမြားသညျ နိုငျငံရေးအသိ သေးသိမျသူမြား သာဖွဈကွောငျး ကရငျအမြိုးသားဒီမိုကရကျတဈပါတီ-KNDP မှ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး စောညှနျ့သောငျးက ပွောဆိုလိုကျသညျ။ ဖားအံမွို့၊ တျောဝငျရတနာဟိုတယျ၌ (အောကျတိုဘာ ၁၀ ရကျ)တှငျ ပွုလုပျသော KNDP ၏ အောငျလံ အပျနှငျးပှဲနှငျ့သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲတှငျ ကွာအငျးဆိပျကွီးမွို့နယျ၊ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၁)မှ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျ မညျ့ ပွညျနယျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး စောညှနျ့သောငျးက ပွောဆိုလိုကျခွငျးလညျးဖွဈသညျ။ “ကရငျပွညျနယျကိုခဈြလို့၊ ကရငျ ကိုခဈြလို့ ကရငျပါတီကို မဲပေးဖို့ အခြိနျမတနျသေးဘူးလို့ ပွောတာ ဒါဘယျလိုမှ လကျခံလို့မရတဲ့ စကားပေါ့နျော။ အဲဒီလို ပွောတဲ့လူတှဟော နိုငျငံရေးအသိအမွငျ တျောတျောလေးကိုတိမျတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကရငျပွညျနယျမှာ ကရငျအစိုးရဖှဲ့နိုငျဖို့ဆို ရငျ ကရငျပါတီကို မဲမြားမြားပေးနိုငျဖို့လိုအပျပါတယျ။”ဟု ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
ကရငျပါတီ အနိုငျရရှိပါက စဈအာဏာရှငျမြားနှငျ့ပွနျလညျပူးပေါငျးကာ အာဏာရှငျစနဈကို ပွနျလညျအသကျ သှငျးမညျဖွဈ သညျ့အတှကျ ကရငျပါတီအားမဲမပေးရနျ ယခုလပိုငျးအတှငျး လူမှုကှနျရကျ Facebook တှငျ လူတခြို့မှ လှုံ့ဆျောရေးသား ဝဖေနျတိုကျခိုကျနမှေုမြား ထှကျပျေါလကျြရှိသညျ။ ထိုဝဖေနျတိုကျခိုကျမှုမြားအပျေါ KNDP အနဖွေငျ့ အမြိုးသားတနျးတူရေး နှငျ့ကိုယျပိုငျပွဌာနျးခှငျ့ကိုအာမခံသော ပွညျနယျမြားနှငျ့ဖှဲ့စညျးသညျ့ ဒီမိုကရစေီဖကျဒရယျပွညျထောငျစုကို တညျဆောကျ သှားမညျဟုသာ မူဝါဒခမြှတျထားကွောငျး ပါတီ ဖကျမှတုံ့ပွနျပွောဆိုထားသညျ။
၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ ပွညျနယျအခွစေိုကျပါတီမြားပူးပေါငျးထားသညျ့ KNDP သညျ ဗမာတိုငျးရငျးသား ရေးရာနရော အပါအဝငျ ကရငျပွညျနယျရှိ ဖားအံ၊ ကွာအငျးဆိပျကွီး၊ လှိုငျးဘှဲ၊ ကော့ကရိတျ၊ ဖာပှနျ၊ မွဝတီ စ သညျ့ ၆ မွို့နယျစလုံးတှငျ ကိုယျစားလှယျလောငျး ၃၀ ဦးဖွငျ့ နရောပွညျ့ ယှဉျပွိုငျသှားမညျ ဖွဈသညျ။ http://kicnews.org/2020/10/%e1% 80%80%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%80%e1%
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး ကြောကျမဲမွို့နယျ ပုံဝိုးကြေးရှာ စဈရှောငျမြားခိုလှုံရာဘုနျးကွီးကြောငျးအနီး တပျမတျောမှ စဈရ ဟတျယာဉျဖွငျ့ လူအငျအားနှငျ့ လကျနကျအငျအားတို့ကို ထပျမံဖွညျ့တငျးနသေဖွငျ့ စဈရှောငျမြား စိုးရိမျထိတျလှနျ့ နကွေောငျးစုံစမျးသိရှိရသညျ။
ယနေ့ အောကျတိုဘာ ၁၀ ရကျ မှနျးလှဲ ၂ နာရီခနျ့က သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး လားရှိုးမွို့အခွစေိုကျအေ ရှ့မွောကျတိုငျး (ရမခ) စဈဌာနခြုပျမှ စဈရဟတျယာဉျ (၄)စီးဖွငျ့ လူအငျအား၊ လကျနကျအငျအားတို့ကို တငျဆောငျကာ ကြောကျမဲမွို့ ပုံဝိုးကြေးရှာဘုနျးကွီးကြောငျးစဈရှောငျမြားရှိရာအနီးတှငျ အားဖွညျ့ခပြေး ကွောငျးစဈရှောငျမြားကပွောသညျ။“ဒီနေ့ သူတို့ ၂ ခေါကျတောငျလာတယျ။ (၄) စီးလာတယျ။ ၂ စီးက ပစ်စညျးခပြွီး ၂ စီးက ကောငျးကငျပျေါမှာ ပြံနတေယျ။ ပစ်စညျးခပြွီးရငျ လယောဉျ၂ စီးလုံး ကအတူတူပွနျသှားကွတယျ” ဟု ပုံဝိုးကြေးရှာနေ မွငျတှရေ့သူ အမြိုးသမီးတဦးက သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကိုပွောသညျ။
စဈရဟတျယာဉျဖွငျ့လာသော စဈသားမြားသညျ ရှာဘကျသို့ ခွကေငျြဖွငျ့ဆကျလြှောကျသှားကွောငျး၎င်းငျး အမြိုးသမီး ကပွောသညျ။“ အဲဒီရဟတျယာဉျနဲ့လာတဲ့ စဈသားတှကေ ရှာထဲဝငျလာပွီး ၅ မိနဈလောကျသနေတျပဈပွီးတော့ တောငျ ပျေါဆကျတကျသှားတယျ။ ”ဟု ၎င်းငျးအမြိုးသမီးက ထပျလောငျးပွောသညျ။ လကျရှိ ပုံဝိုးကြေးရှာဘုနျးကွီးကြောငျးတှငျ စဈဘေးရှောငျ ၇၀၀ ကြျောရှိပွီး၊ တိုကျပှဲဆကျလကျပွငျးထနျလာမညျကို ၎င်းငျးတို့ကစိုးရိမျနကွေသညျဟုဆိုပါသညျ။“ စဈရေး က ဘယျလို ထပျလာမယျမလဲဆိုတာ မသိဘူး။ တိုကျပှဲတှမေဖွဈစခေငျြဘူး။ နတေို့ငျးနီးပါး သနေတျသံတှကွေားနရေတယျ။ ကြေးရှာအနီးတှမှောတော့ မ ဖွဈစခေငျြဘူး” ဟု စဈဘေးရှောငျအမြိုးသမီး နနျးအောငျ က သြှမျးသံတျော ဆငျ့ကို ပွော သညျ။ သြှမျးပွညျ မွောကျပိုငျး ကြောကျမဲမွို့နယျအတှငျး သြှမျးပွညျပွနျလညျထူးထောငျရေးကောငျစီ၊ သြှမျးပွညျ တပျမတျော RCSS/SSA နှငျ့ အစိုးရတပျမတျောတို့သညျ အောကျတိုဘာ ၂ ရကျမှ စတငျကာ ယနခြေိ့နျထိ စဈရေးပွငျး ထနျနသေေး ကွောငျးသိရသညျ။ တိုကျပှဲကွောငျ့ စဈဘေးရှောငျပွညျသူ ၃၀၀၀ နီးပါး ရှိပွီး၊ စားဝတျနရေေး အတှကျ ခကျခဲနကွေောငျး သိရသညျ။ https://burmese. shannews.org/archives/18861
KNU -ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး တပျမဟာ (၆) ၊ တပျရငျး (၁၆)မှ တာဝနျရှိသူတဈဦးနှငျ့အဖှဲ့သညျ ဒသေခံရှာသား (၃)ဦးကို စိတျကွှဆေးပွားတှေ့ရှိ၍ ဖမျးဆီးချေါဆောငျသှားသညျ့အပျေါ ကရငျပွညျနယျအစိုးရမှ အောကျတိုဘာလ(၈) ရကျနေ့ ရကျစှဲဖွငျ့ ပဈခတျတိုကျခိုကျမှု ရပျစဲရေးဆိုငျရာပူးတှဲ စောငျ့ကွညျ့မှု ကျောမတီ (JMC-S)သို့ ကနျ့ကှကျအကွောငျး ကွားခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ပွီးခဲ့သညျ့ အောကျတိုဘာလ (၅)ရကျနကေ့ KNU တပျမဟာ(၆)၊ တပျရငျး (၁၆)၏ တပျခှဲ (၃)မှ ဒုအရာခံဗိုလျ အဆငျ့ရှိသူ ဖိုးထှနျးအပါအဝငျ ၃ဦးသညျ အရပျဝတျဖွငျ့ လကျနကျငယျပါ၍ သံဖွူဇရပျ မွို့နယျ၊ အတှငျးစခနျးကွီးကြေးရှားရှိ မှနျလူမြိုး (၂)ဦးနှငျ့ ကရငျလူမြိုး (၁)ဦးတို့ထံမှ (WY)စိတျကွှဆေးပွား ၁၄ဝ ပွားတှေ့၍ ဖမျးဆီးချေါဆောငျသှားခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး အဆိုပါ ကနျ့ကှကျစာ၌ ဖျောပွထားသညျ။ ထိုသို့ ဖမျးဆီးချေါဆောငျသှားမှုနှငျ့ပတျသကျပွီး KNU အနဖွေငျ့ NCA သဘောတူစာခြုပျပါအတိုငျး လိုကျနာဆောငျရှကျရနျ၊ နယျဘကျ အုပျခြုပျရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားတှငျ ဝငျရောကျစှကျဖကျ ခွငျးမပွုရနျ၊ ဖမျးဆီးထားသူမြားအား တရားဥပဒနှေငျ့အညီ ဆောငျရှကျနိုငျရေး သကျဆိုငျရာ ရဲတပျဖှဲ့သို့ လှဲပွောငျးအပျနှံ ရနျဟူ၍လညျး ကနျ့ကှကျအကွောငျးကွား ထားသညျ။ သို့သျော ၎င်းငျးဖမျးဆီးမှုဖွဈစဉျတှငျ အဆိုပါ ဒသေခံမြားကို လမျးတှငျ မသင်ျကာ၍ ချေါယူစဈဆေးမေးမွနျးစဉျ စိတျကွှဆေးပွားမြား လကျဝယျထားရှိကွောငျးတှရှေိ့၍ ဖမျးဆီးခဲ့ခွငျးဖွဈပွီး သကျဆိုငျရာ KNU ၏ မူးယဈဥပဒအေရ အရေးယူ ဆောငျရှကျနိုငျရနျ ဖမျးဆီးထားခွငျးဖွဈကွောငျး KNU ဘကျက ဆိုသညျ။
အဆိုပါ ဖမျးဆီးထားသူမြားကို KNU ဝငျရေးမွို့နယျရုံးတှငျ ထိနျးသိမျးထားပွီး ကရငျအမြိုးသား ရဲတပျဖှဲ့ (KNPF)မှ လိုအပျ သညျ့အရေးယူ ဆောငျရှကျမှု ပွုလုပျသှားမညျဖွဈကွောငျးလညျး ပဒိုစောလစ်စတနျက ဆကျပွောသညျ။ KNU နှငျ့ အစိုးရ၊ တပျမတျော အကွား ၉ နှဈနီးပါး ငွိမျးခမျြးရေး ဆှေးနှေးမှု ပွုလုပျလာခဲ့ပွီး NCA အပဈအခတျရပျစဲရေး သဘောတူစာခြုပျ ခြုပျဆိုထားနိုငျသျောလညျး ယနေ့ အခြိနျထိ လုံခွုံရေးဆိုငျရာနှငျ့ တပျပိုငျးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြား၊ နယျမွေ သတျမှတျခွငျး ကိစ်စရပျမြား မဆှေးနှေးနိုငျသေးသောကွောငျ့ ယခုလို နယျမွအေငွငျးပှားမှုပွဿနာမြား၊ နှဈဖကျ အုပျခြုပျ ရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျ မြားနှငျ့ပတျသကျပွီး အပွနျအလှနျ ကနျ့ကှကျမှုမြား မကွာခဏ ပွုလုပျလကျြရှိသညျ။ http://kicnews.org/2020/10/e1 %80%9b%e1%80%bc%e1%80%ac%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80
ကခငျြပွညျနယျပွညျသူ့ပါတီ (KSPP) အနဖွေငျ့ နိုငျငံပိုငျရုပျသံတှငျ နိုငျငံရေးပါတီမြားဟောပွောခွငျးအစီစဉျတှငျ ပါဝငျတော့ မညျ မဟုတျကွောငျး ပါတီတာဝနျခံမြားထံမှ သိရသညျ။ အဘယျ့ကွောငျ့ဆိုသျော ပါတီ၏ဟောပွောရနျစီစဉျ ထားသညျ့ စာသားတှငျ ဖွညျ့စှကျပွငျဆငျပေးရနျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျဘကျက ပွောဆိုမှုမြားရှိသောကွောငျ့ ပါဝငျခွငျးမပွုတော့ တာဖွဈကွောငျး ကခငျြပွညျနယျပွညျသူ့ပါတီ KSPP ၏ ဗဟိုလူငယျတာဝနျခံ ဦးနျောခုနျ့ က ယခုလို ပွောသညျ။
“ကနြျောတို့ကတော့ ကနြျောတို့ရဲ့ပါတီ Page ကနပွေီးဘဲလှငျ့မယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုရငျ သူတို့ဖွတျပေးလိုကျတာတှေ မကွိုကျလို့။ ကနြျောတို့က ပွညျနယျအခွစေိုကျဖွဈတဲ့ပါတီဖွဈတယျ။ ကနြျောတို့က ပွညျနယျမှထှကျရှိတဲ့သယံဇာတမြားကို ပွညျနယျသားမြား အပွညျ့အဝခံစားရရှိနိုငျရေးဆိုတာကို သူတို့က ပွညျနယျသားမြားနှငျ့ နိုငျငံသားမြားဆိုပွီး ထညျ့ခိုငျးစေ ခငျြတယျ။ ကနြျောတို့က နိုငျငံသားမြားဆိုတာကို မထညျ့ခိုငျးစခေငျြဘူး။ အဲကွောငျ့ ကနြျောတို့နိုငျငံပိုငျရုပျသံကို ထပျမပို့ တော့ဘူး။”ဟု ကခငျြပွညျနယျပွညျသူ့ပါတီမှ လူငယျတာဝနျခံ ဦးနျောခုနျ့က ဆိုသညျ။
သဘာဝသယံဇာတအကြိုးအမွတျ ကို ကခငျြပွညျနယျသားမြား အပွညျ့အဝခံစားရရှိနိုငျရေး ဆိုသညျ့အကွောငျးအရာတှငျ နိုငျငံသားမြား ထပျထညျ့စသေညျ့ အတှကျဖွဈသညျဟု ဆိုသညျ။
ကခငျြပွညျနယျပွညျသူ့ပါတီသညျ ပွညျနယျကိုအခွခေံထားသညျ့ ပါတီဖွဈကာ ပါတီ၏မူဝါဒတှငျလညျး ပွညျနယျသားမြား၏ အခှငျ့အရေးကို အဓိကထားခမြှတျထားသညျ့အတှကျ ယခုကဲ့သို့ ဆငျဆာဖွတျခွငျးကို အလိုမရှိကွောငျး ၎င်းငျးက ဆကျပွော သညျ။ နိုငျငံရေးပါတီမြားအား နိုငျငံပိုငျရုပျသံဌာနဖွဈသညျ့ MRTV မှ မဲဆှယျဟောပွောခွငျးလုပျငနျးမြားကို စကျတငျဘာလမှ စတငျခဲ့သညျ။ ကခငျြပွညျနယျတှငျ လာမညျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ နိုငျငံရေးပါတီပေါငျး ၁၉ ပါတီရှိ ကာ မဲဆန်ဒရှငျဦးရေ ၁၁ သိနျးခနျ့ရှိသညျ။ https://burmese .kachinnews.com/2020/10/09/l1/
ကရငျပွညျနယျ၊ သံတောငျကွီးမွို့နယျ၊ သာမိုတောငျကြေးရှာအုပျစုရှိ ကပျပယျရှာနှငျ့ ထမုံကြေးရှာအုပျစုအတှငျးရှိ ခပေါငျးပငျ ကြေးရှာ (ဒသေအချေါ ထမုံ ဥယြာဉျရှာ)မြား ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး၊ ရတော ရှညျမွို့နယျ မဲစာရငျးထဲ ရောကျရှိနမှေု ပွနျလညျ ပွငျဆငျနိုငျခွငျးမရှိသေးကွောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါ ကြေးရှာနှဈရှာနှဈရှာကို မူလဇာတိဖွဈသညျ့ ကရငျပွညျနယျ သံတောငျကွီးဘကျမှ စာရငျးပွနျသှငျးရနျ လိုအပျပွီး ထိုသို့ စာရငျးပွနျသှငျးပွီးသှားမှသာ ပဲခူးတိုငျး ရတောရှညျမဲစာရငျးမှ ဖွုတျပေးနိုငျမညျဖွဈကွောငျး ရတောရှညျမွို့နယျ ကျောမရှငျဥက်ကဋ်ဌ ဦးစိနျထှနျးက ပွောသညျ။“ဟိုဘကျက ထညျ့မယျဆိုရငျတော့ လှဲပေးမယျလို့ ပွောထားတယျ။ ကနြျောတို့ ဘကျက ဖကျြလိုကျပွီး ဟိုးဘကျက ထညျ့လို့မရရငျ ခကျကုနျမှာစိုးလို့။ အခုကတော့ ဒီဘကျက အထညျ့ပွတာပဲ ဟိုးဘကျက ကနြျောတို့ ထညျ့ပွီးပါပွီ၊ ဖကျြပါဆိုရငျ ကနြျောတို့ ဖကျြရတာလှယျတယျလေ။ အခုခြိနျထိတော့ ကနြျောတို့ဆီကို ဘာမှ မပွောသေးဘူးဗြ” ဟု ဦးစိနျထှနျးက အောကျတိုဘာ ၉ ရကျတှငျ ပွောသညျ။
ကပျပယျရှာနှငျ့ ခပေါငျးပငျကြေးရှာတို့သညျ ယခငျရှေးကောကျပှဲမြားတှငျ ကရငျပွညျနယျ၊ သံတောငျကွီးမွို့နယျ၊ မဲစာရငျး တှငျသာပါရှိခဲ့သျောလညျး ရတောရှညျမွို့နယျထဲသို့ ၂၀၁၈ ခုနှဈက ထညျ့သှငျးလိုကျသညျ့အတှကျ ယခုအခါ ရတောရှညျ မွို့နယျ မဲစာရငျထဲသို့ ရောကျရှိနခွေငျးဖွဈသညျ။ ယခုကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ ကရငျပွညျနယျ၊ သံတောငျကွီးမွို့နယျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲ ဥက်ကဋ်ဌ စောကားရှယျက “မဲစာရငျး ကွငွောပွီးမှ ဒီကိစ်စတကျလာတယျ၊ နောကျတဈကွိမျ မဲစာရငျးကမြှ ကွညျ့ပါ” ဟုပွောသညျ။
ယခုလို ရတောရှညျမွို့နယျအတှငျး ထညျ့သှငျးလိုကျသညျ့အပျေါ တဈနှဈခနျ့အကွာမှ သံတောငျကွီးမွို့နယျဘကျမှ သိရ ပွီးနောကျ မူလအတိုငျး ကရငျပွညျနယျအတှငျး ပွနျလညျထညျ့သှငျးရနျ သံတောငျကွီးမွို့နယျ၊ အမြိုးသားလှတျတျော ကိုယျစားလှယျ နျောခရစ်စထှနျးက ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ မတျ ၆ ရကျနတှေ့ငျ ကငျြးပသညျ့ အမြိုးသားလှတျတျော အစညျးအဝေး တှငျ မေးခှနျးမေးမွနျးခဲ့သညျ။ ထိုသို့မေးမွနျးမှုအပျေါ ပွညျထောငျစုအစိုးရအဖှဲ့ရုံးဝနျကွီးဌာန ဒု-ဝနျကွီး ဦးတငျမွငျ့က အဆိုပါရှာနှဈရှာသညျ ယခငျက သံတောငျကွီးမွို့နယျ၊ အုပျခြုပျမှုအောကျတှငျရှိခဲ့သျောလညျး သဈတောဦးစီးဌာနနှငျ့ မွို့နယျလယျယာမွစေီမံခနျ့ခှဲရေးနှငျ့ စာရငျးအငျးဦးစီးဌာနတို့၏ မွပေုံမှတျတမျးတှငျ မပါရှိသညျ့အတှကျ ရတောရှညျ မွို့နယျ ထဲသို့ ထညျ့သှငျးဖှဲ့စညျးခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး ပွနျလညျဖွကွေားခဲ့သညျ။ http://kicnews.org/2020/10/%e1% 80%80%e 1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%bb%e1%
တပျမတျောနှငျ့ RCSS/SSA တပျဖှဲ့တို့ကွား တိုကျပှဲမြားကွောငျ့ ပွညျသူလူထု အခွခေံလူ့အခှငျ့အရေး မဆုံးရှုံးစရေေး ရှမျးပွညျနယျအစိုးရက တာဝနျယူဖွရှေငျးပေးရနျ ကြောကျမဲ မွို့နယျမှ လှတျတျောကိုယျစားလှယျမြားက လကျမှတျရေးထိုး၍ တငျပွတောငျးဆိုခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျး၊ ကြောကျမဲခရိုငျ၊ ကြောကျမဲမွို့နယျ၊ ပုံဝိုးဒသေတှငျ တပျမတျောနှငျ့ RCSS/SSA တပျဖှဲ့တို့ စကျတငျဘာ ၃၀ ရကျမှ စတငျခဲ့သော တိုကျပှဲကွောငျ့ လူဦးရေ ၃၀၀၀ ကြျော လူဦးရသေုံးထောငျကြျောတို့သညျ ထှကျပွေး တိမျးရှောငျနရေပွီး ထိခိုကျဒဏျရာရရှိခွငျး၊ အိုးအိမျ ပစ်စညျးမြားပကျြစီးဆုံးရှုံးမှုမြား ကွုံတှခေံ့စားနရေကွောငျး သိရသညျ။ ထိုအခွအေနတှေငျ ကြောကျမဲဒသေအတှငျး တိုကျပှဲကွောငျ့ ပွညျသူလူထု အခွခေံလူ့အခှငျ့အရေး မဆုံးရှုံးစရေေး အတှကျ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရမှ တာဝနျယူဖွရှေငျးပေးပါရနျ တောငျးဆိုကွောငျး ကြောကျမဲမွို့နယျတှငျးရှိ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ လေးဦးတို့က လကျမှတျရေးထိုး၍ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရ ထံသို့ အောကျတိုဘာ ၁၀ ရကျတှငျ စာတငျပွထားကွောငျး သိရ သညျ။
“မနကေ့ ရကျစှဲနဲ့ရိုကျလိုကျတာ၊ ဒီနပေဲ့ ပို့လိုကျတာပေ့ါ။ အဓိကတော့ စဈပှဲဖွဈနတော တဈပတျကြျောသှားပွီ။ အစိုးရက မသိသလို မကွားသလို ဖွဈနတောပေ့ါ။ ရှလေီဘကျမှာ NLD အငျအားပွတာ တဈခါထဲ ပွဿနာဖွဈတာ တဈခါထဲ ရှငျးပေး လိုကျတာလေ။ ကြောကျမဲမှာ လူပေါငျး သုံးထောငျကြျောလောကျ သူတို့ ရဲ့ အခွခေံလူ့အခှငျ့အရေးပေါ့။ ထှကျပွေးတိမျး ရှောငျနရေတယျ။ ပစ်စညျးတှေ ပကျြစီးသလို ဒဏျရာရမှုတှေ ဖွဈနတေယျ။ အစိုးရကနေ ကာကှယျစောငျ့ရှောကျဖို့လိုတာပေ့ါ။ တိုကျတှနျးတောငျးဆိုတဲ့သဘောပေ့ါ။ လှတျတျောကိုယျစားလှယျရုံးမှာ အလှူခံဌာနဖှငျ့ပွီးတော့ ရုံးမှာထိုငျပွီး လကျခံသလို စိုငျးထှနျးဝငျး က နတေို့ငျး သှားနတေယျ။ ပါတီလူကွီးကနေ စာထှကျဖို့ လိုတယျလို့ ဆိုလို့လေ၊ အစိုးရကနေ သမ်မတကို အကွောငျးကွား၊ သမ်မတကနေ ဒီစဈပှဲကိုခကျြခငျြးရပျပါလို့ လုပျလို့ရတယျလို့ မွငျတယျလေ။ သမ်မတ က ပွောမယျဆိုရငျ တော့ စဈတပျပိုငျးကလညျး လိုကျနာဖို့လိုတယျလေ။ ခုလောလောဆယျ မသိသလိုဖွဈနတေော့ စာထှကျတဲ့ သဘောပါပဲ။ အဓိကတော့ စားဝတျနရေေးပဲပေ့ါ။ သူက လူဦးရမြေားမြား လာတာ လူဦးရသေုံးထောငျကြျော သှားတာပေ့ါ။ တိုကျပှဲတှေ လညျး ဖွဈနတေယျ။ ရှေးကောကျပှဲလညျး ရှိနတော တဈလလောကျပဲလိုတယျ။ သကျဆိုငျရာတှလေညျး သိရှိသှားအောငျ ဖွရှေငျးနိုငျအောငျပေ့ါ။ ကြောကျမဲမွို့ပျေါလာတဲ့သူတှကေတော့ ဆှမြေိုးတှဆေီလာတယျ။ ဘုနျးကွီးကြောငျးမှာ ရောကျနေ တာ ၇ နရောရှိတယျ။ လူဦးရေ သုံးထောငျကြျောတယျ ” ဟု ကြောကျမဲမွို့နယျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးစိုငျးထှနျးဉာဏျ က ပွောကွားသညျ။ https://news-eleven.com/article/195194
ကယားပွညျနယျအတှငျးရောကျရှိနတေဲ့ ရှပွေောငျးလုပျသားတှအေနနေဲ့ မိမိရောကျရှိတဲ့ ဒသေမှာ ဆန်ဒမဲပေးနိုငျဖို့ ပုံစံ ၃ (က)နဲ့ လြှောကျထားသူ ၅၀၀၀ ကြျောရှိတယျလို့ ကယားပွညျနယျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲက သိရပါတယျ။ မိမိနရေပျမှာ ပွနျပွီး မဲမပေးနိုငျတဲ့ ရှပွေောငျးလုပျသားတှေ မဲပေးနိုငျရေးအတှကျ ပုံစံ ၃ (က)လြှောကျထားမှုကို အခုလ ၁၀ ရကျနေ့ နောကျဆုံးထား လြှောကျထားခိုငျးတာဖွဈပွီး အောကျတိုဘာ ၁၂ ရကျနအေ့ထိ တပွညျနယျလုံးမှာ လြှောကျထားသူ ၅၂၀၀ ကြျောရှိကွောငျး ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲ ကယားပွညျနယျ အတှငျးရေးမှူး ဦးကြျောဆနျးဝငျးက ပွောပါတယျ။
လြှောကျထားမှုအမြားဆုံးကတော့ လှိုငျကျောမွို့နယျမှာ ၂၆၀၀ ကြျောရှိပွီး ဖားဆောငျး မွို့နယျမှာ ၁၆၀၀ ကြျောရှိကွောငျး သိရပါတယျ။ မယျစဲမွို့နယျမှာတော့ ပုံစံ ၃ (က) လြှောကျထားသူ ၂၀၀ ကြျောရှိကွောငျးလညျး ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ အဖှဲ့ခှဲ ကယားပွညျနယျအတှငျးရေးမှူး ဦးကြျောဆနျးဝငျးက ပွောပါတယျ။ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျရဲ့ထုတျပွနျခကျြအရ မယျစဲမွို့နယျမှာ မဲပေးပိုငျခှငျ့ဦးရေ ၄၉၀၀ ကြျော ရှိပွီးတပွညျနယျလုံးမှာ မဲဆန်ဒရှငျ အနညျးဆုံးမွို့နယျဖွဈပါတယျ။ ကယား ပွညျနယျ တဈခုလုံးမှာ ရှပွေ့ောငျးလုပျသား မဲပေးပိုငျခှငျ့ရှိသူ ဦးရေ ၅၀၀၀ ကြျောရှိတဲ့အတှကျ မယျစဲမွို့နယျ တခုလုံးမှာ ရှိတဲ့ မဲဆန်ဒရှငျ ဦးရထေကျ မြားပွားနပေါတယျ။ ရှပွေ့ောငျးလုပျသားအမြားစု သှားရောကျအလုပျလုပျကိုငျတဲ့ ဖားဆောငျးမွို့ နယျ မျောခြီးကြေးရှာအုပျစုမှာ ဆိုရငျ ပုံစံ ၃(က) လြှောကျထားသူ ၁၅၀၀ ကြျော၊ ၁၆၀၀ နီးပါးလောကျရှိမယျလို့ မျောခြီး ရပျကြေးကျောမရှငျ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးထှနျးထှနျးနိုငျက ပွောပါတယျ။ မျောခြီးသတ်တုတှငျး ထဲက တခုဖွဈတဲ့ ကဘ-၃၂ (ချေါ) အမှတျ ၃ သတ်တုကငျြးဟာ လုပျကှကျပေါငျး ၇၀ ကြျောရှိပွီး လုပျကှကျအမြားစုမှာ ရှပွေ့ောငျးလုပျသားတှေ လုပျကိုငျနကွေပါတယျ။
ဒီရှပွေ့ောငျးလုပျသားတှေ မဲပေးပိုငျခှငျ့ရရှိအောငျ ကငျြးပိုငျရှငျတှဆေီကနဆေငျ့ အကွောငျးကွားပွီး လုပျသားတှကေို ပုံစံ ၃ (က) လာရောကျ လြှောကျခိုငျးထားကွောငျး အမှတျ ၃ ကငျြးဦးစီးမှူး စောဖလယျကျောက ပွောပါတယျ။ အမှတျ ၃ ကငျြးထဲက လုပျကှကျပိုငျရှငျ ဦးမိုငျကယျကတော့ သူ့မှာ လုပျသား ၄ ဦးရှိပွီး ဖရူဆိုမွို့နယျကနေ လာရောကျလုပျလုပျကိုငျ တာဖွဈလို့ ဖရူဆိုမှာပဲ မဲပွနျပေးဖို့ဆန်ဒရှိပမေယျ့ တဖကျမှာ ရောဂါအခွအေနကွေောငျ့ ပွနျလာမရမှာစိုးရိမျတဲ့အတှကျ ပုံစံ ၃ (က) ကို ဖွညျ့ထားကွောငျးပွောပါတယျ။ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျကတော့ မွနျမာနိုငျငံအတှငျးက ရှပွေ့ောငျးနထေိုငျသူတှေ အားလုံးရဲ့ ဆန်ဒမဲပေးပိုငျခှငျ့ မဆုံးရှုံးရအောငျမဲပေးခှငျ့ရှိတဲ့ ရှပွေ့ောငျးနထေိုငျသူတှေ နထေိုငျတဲ့ သကျတမျးကို ရှေးကောကျ ပှဲနညျးဥပဒမှော ရကျပေါငျး ၁၈၀ အစား တဝကျလြှော့ခပြွီး ရကျ ၉၀ ပွငျဆငျခဲ့ပါတယျ။ ဒီလို ပွငျဆငျလိုကျ တာဟာ ဒသေခံ တိုငျးရငျးသားတှအေတှကျ မြားစှာ ထိခိုကျနဈနာနိုငျတယျဆိုပွီး နိုငျငံရေးပါတီတခြို့က ဝဖေနျထောကျပွ ကနျ့ကှကျတာ တှေ ရှိခဲ့ပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/416395
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး လှတျတျောမဲဆန်ဒနယျကရငျတိုငျးရငျးသားလူမြိုးရေးရာအတှကျ လာမညျ့ ၂၀၂၀ အထှထှေရှေေး ကောကျပှဲ မဲပေးခှငျ့ရှိသူ ကရငျမဲဆန်ဒရှငျဦးရမှော ၂၃၀,၀၀၀ ကြျောရှိသညျ့အတှကျ ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၁၅ အထှထှေရှေေး ကောကျပှဲကာလ မဲဆန်ဒရှငျဦးရထေကျ ၅၅,၀၀၀ ကြျော တိုးလာကွောငျး သိရသညျ။ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ၏ ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲရလဒျထုတျပွနျထားမှုမြားအရ ရနျကုနျကရငျရေးရာ အတှကျ မဲဆန်ဒရှငျဦးရမှော ၁၈၀, ၀၀၀ ကြျောသာ ရှိသဖွငျ့ လာမညျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ ကရငျမဲဆန်ဒ ရှငျဦးရမှော အနညျးငယျတိုးတကျလာခွငျးလညျးဖွဈသညျ။
အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ-NLDမှ ရနျကုနျ ကရငျရေးရာကိုယျစားလှယျလောငျး နျောစူစဲနျနာလှလှစိုးက “အနျော ကှငျးဆငျးတဲ့အခြိနျမှာ တှံတေးက ကရငျလူမြိုးတှဆေို ကရငျစာရငျးမပေါကျတဲ့သူတှေ အမြားကွီးပဲ။ သူတို့ စာရငျးဇယားနဲ့ကို ပွုစုထားတယျ။ အဲဒါကို အနျောလဝကကို တငျပွထားတယျ။ သူတို့အခြိနျမှီ လုပျပေးနိုငျလား မနိုငျလားတော့ မပွောတတျဘူး ပေါ့နျော။ အခုအခြိနျအထိ စာရငျးမပေါကျသေးဘူးဆိုရငျတော့ ဒီတဈ ခေါကျမဲ ပေးနိုငျဖို့က မကြိနျးသဘေူးဖွဈသှားတာပေါ့။ နောကျပွီး ကှမျးခွံကုနျးတို့ လှညျးကူးတို့လိုမှာတောငျ မှတျပုံတငျ မရှိတဲ့ကရငျလူမြိုးတှအေမြားကွီးဆိုတော့ ဒီစာရငျးက တိုးဖို့ပဲ ရှိတယျ။ လြော့ဖို့တော့မရှိဘူး”ဟု ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
ကရငျပွညျသူ့ပါတီ -KPP မှ ကရငျရေးရာ ကိုယျစားလှယျလောငျးမနျးသနျးဝငျးဦးက “ ဒီရနျကုနျတိုငျး အတိုငျး အတာအရ တော့ ၅ နှဈအတှငျးမှာ ၁၈ နှဈပွညျ့ပွီးသူတိုးလာတာ၊ ရှပွေ့ောငျးလာသူတှမြေားလာတာ၊ နောကျ တဈခုက ထူးခွားဖွဈစဉျ ဖွဈတဲ့ ကိုဗဈအခွအေနအေပွငျကို တိုငျးရငျးသားရေးရာနဲ့ပတျသကျလို့ မဲပေးခှငျ့အပျေါ ဖွလြေော့ပေးတာတှေ၊ မိမိလကျရှိ နထေိုငျရာနရောမှာ ၃ လ နထေိုငျရငျမဲပေးခှငျ့ရှိတာတှကွေောငျ့လို့ယူ ဆ တယျ”ဟု ပွောသညျ။
ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ၏ ထုတျပွနျထားမှုမြားအရ ကရငျမဲဆန်ဒရှငျဦးရမှော ပွီးခဲ့သညျ့ ၅ နှဈကထကျတိုးတကျ မှုရှိသျော လညျး ရနျကုနျတိုငျး ဒသေကွီးအတှငျးရှိ မွို့နယျ ၄၅ မွို့နယျအတှငျး နထေိုငျသူကရငျလူမြိုးမြား အနဖွေငျ့ မှတျပုံတငျတှငျ လူမြိုးအမညျ မှားယှငျးနမှေုအမြားအပွား ရှိနသေေးသညျဟုလညျး ကရငျစာပေ ယဉျကြေးမှု ကျောမတီ တာဝနျရှိသူမြား၏ ပွောပွခကျြမြားအရ သိရသညျ။ http://kicnews.org/2020/10/%e1%81%82%e1%81%80%e1%81%82%e1 %8
ကယားပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျဟောငျး ဦးအယျလျဖောငျးရှိုအား ပွညျသူ့ဘဏ်ဍာငှေ အလှဲသုံးခဲ့သညျဟုဆိုကာ ကယားပွညျနယျ လှတျတျောဥက်ကဋ်ဌခှငျ့ပွုခကျြဖွငျ့ ဖရူဆိုမွို့နယျ အမှတျ(၁) ပွညျနယျလှတျတျော လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးသဲရယျက အောကျတိုဘာ ၁၀ ရကျတှငျ လှိုငျကျောရဲစခနျး၌ တိုငျတနျးခဲ့ပွီးအမှုမဖှငျ့ပေးသေးကွောငျး တရားလို၏ ပွောကွားခကျြအရ သိရသညျ။
ဦးအယျလျဖောငျးရှိုကို စုံစမျးဖျောထုတျ အရေးယူဆောငျရှကျပေးရနျ စကျတငျဘာ ၈ ရကျတှငျ ပွညျနယျလှတျတျော ကိုယျ စားလှယျ ခူးသဲရယျက အဂတိလိုကျစားမှုတိုကျ ဖကျြရေးကျောမရှငျသို့ တိုငျကွားခဲ့သျောလညျးကောငျမရှငျ၏ စကျတငျဘာ ၃၀ ရကျ အကွောငျးပွနျကွားစာတှငျ ယခုတိုငျကွားမှုသညျ ယခငျအခွားသူတဈဦးတိုငျကွားခဲ့ သညျ့ကိစ်စဖွဈကွောငျး၊ ထိုစဉျ ကကျောမရှငျ အနဖွေငျ့ ဆုံးဖွတျထားရာတှငျ တိုငျကွားမှုသညျ အဂတိလိုကျစားမှု တိုကျဖကျြရေး ဥပဒေ စတုတ်ထအကွိမျပွငျ ဆငျပွဋ်ဌာနျးခွငျး မပွုမီကကိစ်စမြားဖွဈခွငျးကွောငျ့ ကျောမရှငျ အနဖွေငျ့အရေးယူဆောငျရှကျပေး၍မရ ကွောငျးနှငျ့ သကျဆိုငျ ရာဌာနမှ တညျဆဲ ဥပဒနှေငျ့အညီဆောငျရှကျရမညျ့ကိစ်စဖွဈကွောငျးကို အကွောငျးပွနျပွီးဖွဈကွောငျး၊ ယခုတိုငျတနျးမှုသညျ ယခငျတိုငျတနျးမှုနှငျ့အကွောငျးအရာတူဖွဈနခွေငျး၊ သကျသခေံ ခကျြအသဈမရှိခွငျးတို့ကွောငျ့ ကျောမရှငျ အနဖွေငျ့ စုံစမျး စဈဆေးခှငျ့မရှိကွောငျး ဖျောပွခဲ့သညျ။
ထိုသို့ကျောမရှငျ၏ အကွောငျးပွနျကွားစာအရ တညျဆဲဥပဒနှေငျ့သာဆောငျရှကျရနျ မှတျခကျြရှိသဖွငျ့ ဝနျကွီးခြုပျဟောငျး ဦးအယျလျဖောငျးရှိုအား တညျဆဲဥပဒနှေငျ့အညီဆကျလကျအရေးယူဆောငျရှကျခှငျ့ ပွုရနျ ကယားပွညျနယျလှတျတျာဥက်ကဋ်ဌ တငျပွခဲ့ရာကနျ့ကှကျရနျမရှိကွောငျးနှငျ့ ဆကျလကျဆောငျရှကျရနျခှငျ့ပွုသဖွငျ့ ယခုကဲ့သို့ အမှုဖှငျ့လှဈပေးရနျ တိုငျတနျးခွငျး ဖွဈကွောငျး ဦးသဲရယျက ပွောကွားသညျ။ လှိုငျကျောမွို့မရဲစခနျးတှငျ အောကျတို ဘာ ၁၀ ရကျက တိုငျကွားသျောလညျး မညျသို့ အရေးယူ ဆောငျရှကျထားသညျကို သိလိုကွောငျး၊ ရဲလကျစှဲအပိုဒျ ၁၄၁၄ တှငျ ရဲအရေးယူပိုငျခှငျ့ရှိသော ပွဈမှုမြား အား နှောငျ့နှေးခွငျးမရှိ တိုငျခကျြဖှငျ့ရေး သားရနျနှငျ့ မညျသညျ့သတငျးပေးမှုကိုမဆို ရာဇဝတျကငျြ့ထုံးပုဒျမ ၁၅၄ အရခကျြ ခငျြး တိုငျခကျြဖှငျ့ ရေးသားရမညျဟုပါရှိသျော လညျးမှတျတမျးစာအုပျတှငျ ရေးမှတျခွငျး မရှိသဖွငျ့ အခွအေနအေားသိလို ကွောငျး ဦးသဲရယျက အောကျတိုဘာ ၁၂ ရကျတှငျ ရဲစခနျးသို့ စာထပျမံပေးပို့ခဲ့သညျ။
အဂတိလိုကျစားမှုတိုကျဖကျြရေးကျော မရှငျက အရေးယူခွငျးမရှိနိုငျသညျ့အခွအေနေ နောကျတှငျ ကယားပွညျနယျလှတျ တျော၌ ဦးအယျလျဖောငျးရှိုသညျ စကျယန်တရားမြား ငှားရမျးခရငှမြေားကိုသီးခွားရနျပုံငှတှေငျ ထားရှိအသုံးပွုခဲ့ခွငျးမှာ လှတျတျောက ၂၀၁၈ ခုနှဈတှငျ စဈဆေးတှရှေိ့ခဲ့ခွငျးဖွဈ သျောလညျး ထိုစဉျကဘဏ်ဍာငှမြေားအသုံး ပွုခဲ့မှုသညျ ဥပဒနှေငျ့ မညီ သုံးစှဲခဲ့ခွငျး၊ ကယားဒေးကှငျးအတှငျးရှိ ဟိုတယျနှငျ့ရလှော လြှောစီးလုပျငနျးစီမံကိနျးအား ဖယျရှားရနျ လှတျတျော၌ အဆိုအောငျမွငျခဲ့သျောလညျး အဆိုပါမွနေရောကိုစညျပငျပိုငျမွနေရောအဖွဈပွောငျးပွီး ယခငျကုမ်ပဏီမြားကပငျ အမညျ ပွောငျး၍ ပနျးခွံနှငျ့ဆိုငျခနျးမြား တညျဆောကျနခွေငျး စသညျ့ဖွငျ့ စှပျစှဲပွဈတငျကာ ရာထူးတာဝနျမှ ဖွုတျခခြဲ့သညျ။ ထို့နောကျ ဦးသဲရယျက အဂတိလိုကျစားမှု တိုကျဖကျြရေးကျောမရှငျသို့ ထပျမံတိုငျကွား ခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ https://news-
ရခိုငျပွညျမွောကျပိုငျးနဲ့ ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျးက စဈဘေးဒုက်ခသညျတှေ ရှေးကောကျပှဲမှာ မဲပေးခှငျ့ မဆုံးရှုံးစရေေး၊ မဲဆှယျကာလ တရားမဲ့ပွုကငျြ့မှုတှကေို ဖျောထုတျအရေးယူပေးရေးအတှကျ ညီညှတျသော တိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြား မဟာမိတျအဖှဲ့ UNA နဲ့ မိတျမိတျအဖှဲ့အစညျး ၁၀၀ ကြျောက အစိုးရနဲ့ ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျကို တောငျး ဆိုလိုကျပါတယျ။ နိုဝငျဘာ ၈ ရကျနေ့ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပဖို့ တဈလတောငျ မလိုတော့ပမေယျ့ အခုခြိနျအထိ မဲပေးခှငျ့ ရရေး မရမေရာ ဖွဈနသေူတှကေတော့ ရခိုငျ၊ ခငျြး၊ ရှမျးပွညျနယျတို့မှာ နရေပျစှနျ့ခှာ တိမျးရှောငျနရေတဲ့ သိနျးနဲ့ခြီရှိတဲ့ ဒသေခံတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
ရှေးကောကျပှဲမှာ စဈဘေးတိမျးရှောငျနရေသူတှေ မဲပေးခှငျ့ရအောငျ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျက ဘယျလို စီစဉျတယျဆိုတာ မသိရသေးဘူးလို့ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ SNLD ပါတီ တှဲဘကျအတှငျးရေးမှူး စိုငျးကြျောညှနျ့ က ပွောပါတယျ။ “ရှေးကောကျပှဲဆိုတာက ပွညျသူတှကေ မဲထညျ့ရမှာ၊ စဈဘေးရှောငျနရေတယျပွုနေ ရတယျဆိုရငျ စဈဘေးရှောငျနတေဲ့သူတှေ မဲထညျ့လိုရအောငျ ဘယျလို့စီစဉျမလညျးဆိုတဲ့ စီစဉျသံလညျးမကွားရဘူး၊ အဲဒါ က လူ့အခှငျ့ရေးဆုံးရှုံးတယျ၊ နိုငျငံသားတဈဦး အခှငျ့အရေးမဆုံးရှုံးရအောငျ ကနြျောတို့က ပွောရခွငျးဖွဈတယျ”ရှမျး ပွညျနယျမွောကျပိုငျး ကြောကျမဲမွို့နယျမှာ အောကျတိုဘာလဆနျးကတညျးက တပျမတျောနဲ့ RCSS တို့ တိုကျပှဲဆကျတိုကျ ဖွဈနလေို့ အိုးအိမျစှနျ့ခှာထှကျပွေးနရေတဲ့ ဒုက်ခသညျ ၂၅၀၀ ကြျောရှိနတောပါ။
ညီညှတျသော တိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြား မဟာမိတျအအဖှဲ့ UNA အဖှဲ့ဝငျ နိုငျငံရေးပါတီ ၁၃ ခုနဲ့ မိတျဖကျအအဖှဲ့ ၁၀၀ ကြျော ကလညျး အောကျတိုဘာ ၁၀ ရကျနမှေ့ာ နိုငျငံသားတိုငျး မဲပေးခှငျ့ရရေးအတှကျ ကွညောခကျြထုတျ တောငျးဆိုထားပါ တယျ။ ကွညောခကျြထဲမှာ ရခိုငျနဲ့ ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျးမှာဖွဈနတေဲ့ တိုကျပှဲတှေ အမွနျဆုံးရပျတနျ့ဖိျု့ အစိုးရ၊ တပျမတျောနဲ့ လကျနကျကိုငျအဖှဲ့တှေ အမွဆုံးတှဆေုံ့ဆှေးနှေးဖို့ ပါဝငျသလို တိုငျးရငျးသားဒသေ အသီးသီးမှာရှိတဲ့ စဈဘေးဒုက်ခသညျတှေ မဲပေးခှငျ့မဆုံးရှုံးအောငျ အစိုးရအနနေဲ့ စီစဉျဆောငျရှကျပေးဖို့ တိုကျတှနျးထားပါတယျ။ ရခိုငျပွညျနယျ က နှဈနဲ့ခြီနပွေီဖွဈတဲ့ တိုကျပှဲတှကွေောငျ့ စဈဘေးဒုက်ခသညျ ၂ သိနျး၂ သောငျးကြျောဟာ နရေပျမပွနျနိုငျသေးဘူးလို့ ဒုက်ခသညျကူညီနတေဲ့ ဒသေအခွစေိုကျ ရခိုငျတိုငျးရငျးသားမြိုးနှယျမြားအစညျးအရုံး REC ရဲ့ စာရငျးအရ သိရပါတယျ။ ဒီဒုက်ခသညျတှမေဲပေးခှငျ့ ဆုံးရှုံးမှာကိုလညျး UNA နဲ့ မိတျဖကျအဖှဲ့တှကေ စိုးရိမျနပေါတယျ။
အောကျတိုဘာ ၁၀ ရကျနေ့ ကွညောခကျြမှာတော့ UNA အဖှဲ့ဝငျ ရှမျး၊ ကခငျြ၊ ရခိုငျ၊ ကရငျ စတဲ့ တိုငျးရငျးသားပါတီတှေ အပါအဝငျ ၁၃ ပါတီနဲ့ ရခိုငျတိုငျးရငျးသားမြိုးနှယျမြား အစညျးအရုံး REC၊ အမြိုးသမီးမြားအဖှဲ့ခြုပျ(မွနျမာနိုငျငံ) WLB၊ ပေါငျးကူး၊ တို့မွကှေနျရကျ၊ Generation Wave စတဲ့ အရပျဖကျလူမှုအဖှဲ့အစညျး ၁၃၄ ဖှဲ့ပါဝငျပါတယျ။ https://w ww.r fa.org/burmese/news/2020-election-una-10122020060354.html
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး ကြောကျမဲမွို့နယျ ကြှဲကုနျးကြေးရှာအတှငျး ယမနျနေ့ ညပိုငျးက ပဈခတျမှုကွောငျ့ အမြိုးသမီး တဦး ဗုံးစ ထိမှနျခဲ့ကွောငျး စုံစမျးသိရသညျ။
(အောကျတိုဘာ ၉ )ရကျ ည ၈နာရီ မှ ၉ နာရီခှဲတှငျ ကြောကျမဲမွို့နယျ ကြှဲကုနျးကြေးရှာတှငျ လကျနကျကွီး၊ လကျနကျငယျ မြားဖွငျ့ ပဈခတျရာ အမြိုးသမီး တဦး ဗုံးစ ထိမှနျခဲ့ပွီး၊ အိမျခွေ ၃အိမျ ထိခိုကျပကျြစီးခဲ့ကွောငျး ကြောကျမဲမွို့နယျ အမှတျ(၁) မဲဆန်ဒနယျတှငျ SNLD ပါတီ မှ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ နနျးအိမှနျအောငျ (ခ) နနျးလောဝျလောဝျ က သြှမျးသံတျောဆငျ့ကို ပွောသညျ။“ အမြိုးသမီး ဗုံးစထိမှနျတာဟုတျပါတယျ။ နဖူးနဲ့ ဒူးနားထိပါတယျ။ ဒီမနကျတော့ ဆေးရုံသှားပွ ခဲ့တယျ။ ဆေးပဲ လိမျးပွီး ပွနျလှတျတယျ။ ဓာတျမှနျမရိုကျပေးသေးဘူး” ဟု နနျးလောဝျလောဝျ က ဆိုသညျ။ ဗုံးစ ထိမှနျသညျ့ အမြိုးသမီးကို ကြောကျမဲဆေးရုံမှ တနင်ျလာနပွေ့နျလာပွရနျ ရကျခြိနျးခဲ့ကွောငျး၊ ဓာတျမှနျလညျး မရိုကျပေးသညျ့ အတှကျ ဗုံးစမြားအသား ထဲတှငျ ရှိ၊မရှိ မသိရှိရသေးကွောငျးလညျး နနျးလောဝျလောဝျ က ပွောသညျ။
ယမနျနေ့ ပဈခတျမှုဖွဈသညျ့ ကြှဲကုနျးကြေးရှာသညျ ကြောကျမဲမွို့ အဝငျလမျးခှဲတှငျသာရှိပွီး၊ ပဈခတျသညျ့ အသံသညျ တဖကျသာပဈခတျသညျ့ အသံမြားဖွဈနကွေောငျး ကြှဲကုနျးကြေးရှာမှ ပွညျသူမြားက ပွောသညျ။“ မနကေ့ အသံအကယျြ ကွီးပဲ ဒီကလူတှအေသံကွားတာလဲ အိမျထဲမှာပဲ နနေရေတယျ”ဟု ကြှဲကုနျးဒသေခံ တဦး ကပွောသညျ။ လကျရှိ မှာလညျး ကြှဲကုနျးကြေးရှာအတှငျး တပျမတျောမှ တပျသားမြား သှား၊လာ လှုပျရှားနသေဖွငျ့ ပွညျသူမြားအနဖွေငျ့စိုးရိမျထိတျလနျ့မှု ဖွဈနကွေောငျးလညျး သိရသညျ။ ထိုစဈရေးသညျ အောကျတိုဘာ ၂ ရကျ မှ စတငျကာ ယနခြေိ့နျထိ သြှမျးပွညျပွနျလညျ ထူထောငျရေး ကောငျစီ၊ သြှမျးပွညျ တပျမတျော(RCSS/SSA) နှငျ့ အစိုးရတပျမတျောတို့တိုကျပှဲ ပွငျးထနျနဆေဲ ဟုသိရ သညျ။ ကြောကျမဲအတှငျး RCSS/SSA နှငျ့ အစိုးရတပျမတျောတို့ တိုကျပှဲဖွဈပှားမှုကွောငျ့ ကြောကျမဲမွို့နယျ အတှငျးစဈဘေး ရှောငျ ၃၀၀၀ နီးပါး ထှကျပွေးတိမျးရှောငျနရေပွီး၊ စားဝတျနရေေး အခကျအခဲ ဖွဈနကွေောငျး သိရသညျ။ https://burme se.shannews.org/archives/18849
၁၃။ လူမြိုးအမညျမှနျရရှိရေးအတှကျရှေးကောကျပှဲဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခွငျးဖွဈဟုခမီအမြိုးသားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျ ရေးပါတီပွော
၂၀၂၀ပါတီစုံ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲအား ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခွငျးသညျ အနာဂတျတှငျ လူမြိုးအမညျမှနျဖွငျ့ ရပျတညျနိုငျ ရေးအတှကျဖွဈကွောငျး ခမီအမြိုးသားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးပါတီ၏ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဗဟိုကျောမတီဝငျ ဦးအောငျအောငျက ပွောသညျ။
လူမြိုးအမညျနှငျ့ပတျသကျ၍ လကျရှိပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအနဖွေငျ့ ရှေးကောကျပှဲကိစ်စမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ ထုတျပွနျရာ၌ တဈကွိမျနှငျ့ ယခုနှဈအစောပိုငျးက နိုငျငံတျောအဆငျ့ ပွဌာနျးလိုကျသညျ့ သတ်တမတနျး ပထဝီဝငျဖတျစာအုပျ တှငျ တဈကွိမျ လူမြိုးအမညျအား ဖျောပွရာတှငျ “ခမှီး”ဟု မှားယှငျးစှာအသုံးပွုထားသညျ။ ထိုသို့အသုံးပွုခွငျးကို လကျမခံ နိုငျ ကွောငျး နှငျ့ လူမြိုးကို ကိုယျစားပွု၍ လုပျကိုငျဆောငျရှကျနိုငျသညျ့ ပုဂ်ဂိုလျ (သို့မဟုတျ) အဖှဲ့အစညျး မရှိသညျ့အတှကျ ဟု မှတျယူကာ မိမိလူမြိုးနရောရရေးကို ကွိုးပမျးခွငျးဖွဈကွောငျး ၎င်းငျးကဆိုသညျ။
“ကိုယျ့လူမြိုးနာမညျကို မှနျမှနျကနျကနျနဲ့ ရပျတညျနိုငျအောငျ လုပျမယျဆိုတဲ့ ရညျရှယျခကျြကတော့ အပွညျ့ပါ။ အရငျ ကနပွေီးတော့ ခမီလို့ ပွောတာကို “ခမှီး”ဆိုပွီး ချေါကွတော့ ပွညျသူတှရေဲ့ ရငျထဲမှာကော ကိုယျ့ရငျထဲမှာပါ မခံခြိ၊ မခံနိုငျ ဖွဈရတယျ။ အျော… မသိကွလို့လား မသိဘူးဆိုပွီးတော့ ထိနျးထားရတယျ။ ၂၀၁၀ မှာ ပွိုငျတုနျးကလညျး မှနျမှနျကနျကနျ။ (၂၀)၁၅ ကလညျး မှနျမှနျကနျ ကနျပဲ။ အခု ၂၀၂၀ ကတြော့ ကျောမရှငျရုံးက ကိုယျတိုငျ “ခမှီး”ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုနျးကို သုံးလာတယျ။”ဟု ယငျးပါတီပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဗဟိုကျောမတီဝငျ ဦးအောငျအောငျက ပွောသညျ။ ခမီအမြိုးသားဖှံ့ဖွိုးတိုး တကျရေးပါတီသညျ လာမညျ့ နိုဝငျဘာလ ၈ ရကျနတှေ့ငျ ကငျြးပပွုလုပျမညျ့ ပါတီစုံ ဒီမိုကရစေီရှေးကောကျပှဲတှငျ ကြောကျတျောမွို့နယျ မဲဆန်ဒနယျအတှကျ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျ တဈနရော၊ မွောကျဦးမွို့နယျတှငျ အမြိုးသား လှတျတျော ကိုယျစားလှယျတဈနရောနှငျ့ ဘူးသီးတောငျ မွို့နယျတှငျ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျ တဈနရော ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျသှားမညျ ဖွဈသညျ။
“အဓိက အောငျနိုငျရေးမြှျောလငျ့ခကျြတဈခုတော့ရှိတယျ။ ကြောကျတျောမွို့နယျမှာဆိုရငျ ကနြျောတို့ ခမီလူမြိုးတှေ အားလုံး ကို တစုတစညျးတညျး ပေါငျးလိုကျရငျ ကြောကျတျောနယျမှာ အောငျနိုငျတဲ့အနအေထားရှိတယျ။ ကနျြတဲ့နရောမှာတော့ မြှျောလငျ့ခကျြမရှိဘူး။ ရပျရှာတှကေ တဈနရောနဲ့ တဈနရောဝေးတယျ။ တဈစုတစညျးတညျး မရှိဘူး။” ဦးအောငျအောငျက ပွောသညျ။ ခမီအမြိုးသားတိုးတကျရေးပါတီသညျ ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၁၀ နှငျ့ ၂၀၁၅ တို့တှငျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခဲ့သျောလညျး ရှုံးနိမျ့ခဲ့သညျ။ ခမီလူမြိုးမြားသညျ မွနျမာနိုငျငံ၏ တိုငျးရငျးသားလူမြိုး ၁၃၅ မြိုးတှငျတရားဝငျသတျမှတျခွငျးခံထားရပွီး လကျရှိတှငျရခိုငျပွညျနယျမွောကျပိုငျးတှငျ လူဦးရတေဈသိနျးကြျော ဖွနျ့ကကျြနထေိုငျလြှကျရှိကွောငျး ဗဟိုကျောမတီဝငျ ဦးအောငျအောငျက ဆိုသညျ။ https://www.bnionline. net/mm/news-76193
ကိုဗဈ-၁၉ ကပျရောဂါ ပွနျ့ပှားနသေညျ့ ကာလအတှငျး မူးယဈဆေးဝါးရောငျးဝယျမှု မြားပွားလာသဖွငျ့ လူငယျမြားအကွား မူးယဈဆေးဝါးအန်တရာယျ လြှော့ခရြေး လှုပျရှားမှုတဈရပျကို ရေးမွို့အခွစေိုကျ မှနျဒသေရပျရှာဖှံ့ဖွိုးရေးအဖှဲ့ MACDO က အောကျတိုဘာလ (၆) ရကျနမှေ့စ၍ ၃ ရကျကွာလှုပျရှားခဲ့သညျ။
မူးယဈးဆေးဝါး တားဆီးနှိမျနှငျးရေးတှငျ ဝိုငျးဝနျးကူညီပေးရနျ၊ ကပျရောဂါဖွဈပှားအခြိနျ အခှငျ့ကောငျးယူပွီး မူယဈဆေးဝါး ရောငျးဝယျဖွနျ့ဖွူးမှုမြားအား သကျဆိုငျရာသို့ သတငျးပေးရနျ ရညျရှယျခကျြဖွငျ့ ပွုလုပျခွငျးဖွဈကွောငျး MACDO ဒါရိုကျတာ မိမာလာမှနျ (မိဖွူ)က ပွောသညျ။“ကပျရောဂါဖွဈပှားနတောကွောငျ့ ဒီလှုပျရှားမှုကို ကမြတို့ လူအငျအားက (၂၀) ဝနျးကငျြ လောကျပဲရှိတယျ။ ဖာလိနျဒသေက မှနျလူငယျတှနေဲ့ ပူးပေါငျးပွီး လကျကမျးစာစောငျတှေ ဖွနျ့ဝတေယျ၊ လှုပျရှားမှု (၃) ရကျ တာအတှငျးမှာ (၄) နရောရောကျခဲ့တယျ။ ရေးမွို့ ပျေါက အောငျရပျကှကျ (၃) ရပျကှကျ၊ ဈေးကွီး၊ ရှဆေံတျောဘုရားရှေ့ နဲ့ အဏ်ဏဝါရပျကှကျမှာ ဖွဈတယျ＂ ဟု မိမာလာမှနျ ဆကျပွောသညျ။
အောငျသုခဈေးဆိုငျရှငျ နိုငျအောငျဇျောမိုး (နဲာအးစရဲာ) က “ဒီလှုပျရှားမှု ပွုလုပျရာမှာ အရမျးကိုကောငျးပါတယျ၊ ဒါမယျ့ ထိရောကျမှုမရှိဘူးလို့ မွငျတယျ၊ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ လကျကမျးစာစောငျ ဖွနျ့ဝတေဲ့နရောမှာ ဖတျမယျ့သူနညျးနတေယျ ဖတျတဲ့သူတှကေလညျး လေးလေးနကျနကျမရှိဘူးလို့ မွငျတယျ၊ အရငျနှဈကဆို နယျတှသှေားပွီး သငျတနျးတှပေို့ခတြာမြိုး ရှိတယျ၊ အခုတော့ ကိုဗဈရောဂါကွောငျ့လဲ ဖွဈနိုငျတယျ၊ အကယျ၍ ဗီဒီယိုကလဈတဈခု ပွုလုပျပွီး မူးယဈဆေးဝါးစှဲလနျးသူ တှကေို ဆိုးကြိုး ဘယျလိုဖွဈနိုငျတာတှေ၊ မိဘတှကွေညျ့နိုငျရငျ ပိုပွီးသတိပွုလာကွမှာ ဖွဈတယျ၊ နောကျပွီး သူတို့ Facebook စာမကျြနှာပျေါ တငျပွီး ကွညျ့သူရော၊ မြှဝသေူလညျး မြားမယျလို့ ထငျတယျ” ဟု သုံးသပျပွောကွားသညျ။ http://burmese.monnews.org/2020/10/10/%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%99%e1%
ရခိုငျပွညျနယျ၊ မွောကျဦးခရိုငျ(လဝက)ရုံးမှ အမှုတှဲထိနျးဝနျထမျးတဈဦး ပြောကျဆုံးနရော အောကျတိုဘာ ၉ ရကျ မှနျးလှဲ ပိုငျးအခြိနျက သဆေုံးလြှကျတှရှေိ့ကွောငျး သိရသညျ။
၎င်းငျးသညျ မငျးပွားမွို့နယျ၊ ဥက်ကာပြံရပျကှကျမှ အသကျ(၃၈)နှဈ အရှယျ ကိုကြျောလငျးခိုငျဖွဈပွီး အောကျတိုဘာ ၇ ရကျ နလေ့ညျ ၁၁ နာရီခနျ့တှငျ ပြောကျဆုံးသှားခွငျးဖွဈကွောငျး အမညျ မဖျောလိုသညျ့ လဝကဝနျထမျး တဈဦးက DMG သို့ ပွောသညျ။“မနကေ့ သူမိနျးမက ကြှနျတေျာ့ဆီဖုနျးဆကျတယျ။ မငျးပွား ကိုမရောကျဘူးလို့ ပွောတယျ။ အဲဒီအခြိနျ ပြောကျနေ တယျလို့သိရတာ။ လိုကျရှာကွညျ့တော့ ဗားမဲ့၊ ဗားကရားဂူနားက တောထဲမှာကွိုတှဲခပြွီးတော့ သနေတောကို တှရေ့တယျ” ဟု ၎င်းငျးကရှငျးပွသညျ။
အဆိုပါဝနျထမျးသညျ မိမိကိုယျကို သကွေောငျးကွံစညျသှားခွငျးမဟုတျဘဲ သတျဖွတျခံရခွငျးဖွဈနိုငျကွောငျး ပတျဝနျးကငျြ က သုံးသပျပွောဆိုနကွေသညျ။ လကျရှိမှာ သဆေုံးသူအား မငျးပွားမွို့တှငျ သင်ျဂွိုလျခဲ့ပွီး မညျသို့သဆေုံးသှားသညျကို မသိရသေးကွောငျး ၎င်းငျးကဆကျပွောသညျ။ ထိုကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး မွောကျဦးမွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူးနှငျ့ မွောကျဦးရဲစခနျးကို DMG က ဆကျသှယျခဲ့ သျောလညျး ဖုနျးအဆကျအသှယျမရရှိခဲ့ပေ။ https://www.bnionline.net/mm/news-76196
ရှမျးပွညျနယျ မွောကျပိုငျး ကြောကျမဲမွို့နယျတှငျ လကျနကျကိုငျ ပဋိပက်ခမြား ဖွဈပှားထားသျောလညျး တမွို့နယျလုံး ရှေး ကောကျပှဲကို ကငျြးပနိုငျရနျသာ စီစဉျထားသညျဟု ရှမျးပွညျနယျ မွောကျပိုငျး ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ အဖှဲ့ခှဲရုံး အတှငျး ရေးမှူး ဦးနှဈဆနျးဦးက ဧရာဝတီကို ပွောသညျ။
ကြောကျမဲမွို့နယျတှငျ အောကျတိုဘာ ၃ ရကျမှ ၉ ရကျအထိ တပျမတျောနှငျ့ ရှမျးပွညျ ပွနျလညျထူထောငျရေး ကောငျစီ (RCSS) တို့ကွား တိုကျပှဲမြား ဖွဈပှားပွီး ပုံဝိုးကြေးရှာအုပျစုအတှငျးမှ ဒသေခံ ၂၅၀၀ ခနျ့မှာ နရေ့ပျစှနျ့ခှာပွီး ထှကျပွေး တိမျးရှောငျနရေသဖွငျ့ ပဋိပက်ခဖွဈသညျ့ နယျမွမြေားကို လုံခွုံရေး အကွောငျးပွခကျြဖွငျ့ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ခနျြလှပျခံခဲ့ရ မညျကို ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားက စိုးရိမျနကွေသညျ။ ဦးနှဈဆနျးဦးက “ကနြျောတို့ လကျရှိ တငျထားတာက တနျ့ယနျးမှာ ကြေးရှာအုပျစု ၉ စု၊ ကုနျးကွမျးမှာ ကြေးရှာအုပျစု ၁ အုပျစု၊ မနျတုံမှာ၂ အုပျစု ရှိပါတယျ။ အဲဒါတှကေတော့ အတညျမပွု နိုငျသေးပါဘူး။ ကြောကျမဲကတော့ မပါသေးပါဘူး။ ကြောကျမဲက အကုနျလုံး ကငျြးပနိုငျတယျလို့ ကနြျောတို့ ပေးထားပါတယျ” ဟု ပွောသညျ။
ကြောကျမဲမွို့နယျတှငျး အောကျတိုဘာ ပထမပတျတှငျ တိုကျပှဲမြား ဖွဈပှားနသေျောလညျး တိုကျပှဲ ဖွဈသညျ့ ဧရိယာမြား အပါအဝငျ မွို့နယျ တခုလုံးကို ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပနိုငျသညျ့ စာရငျးတှငျသာ ထညျ့ထားပွီး ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပမညျ့ ရကျအနီးတှငျ နယျမွလေုံခွုံရေး တာဝနျရှိသူမြားနှငျ့ အုပျခြုပျရေးပိုငျး တာဝနျရှိသူမြား၊ အစိုးရအဖှဲ့ဝငျမြားက မလုံခွုံ ကွောငျး တငျပွလာပါက ထိုအခြိနျမှသာ ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျက ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပနိုငျခွငျး ရှိမရှိကို ထပျမံ ဆုံးဖွတျမညျဟု ၎င်းငျးက ဆိုသညျ။ တပျမတျော သတငျးမှနျ ပွနျကွားရေးအဖှဲ့မှ ဗိုလျခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက ကြောကျမဲမွို့နယျ တှငျ အောကျတိုဘာ ၁၁ ရကျမှ စ၍ ပဈခတျ တိုကျခိုကျမှုမြား မရှိတော့ပါဟု ပွောသညျ။
SNLD မှ ပွညျသူ့ လှတျတျော ကိုယျစားလှယျလောငျး ဦးစိုငျးအောငျမွငျ့ကလညျး “အတတျနိုငျဆုံးကတော့ ထိုးစဈမဆငျကွ ဘဲ ငွိမျးခမျြးရေး စကား ပွောစခေငျြတယျ။ စဈပှဲ မဖွဈတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ အရငျတုနျးက ဖွဈလာတဲ့ ပွဿနာတှေ အခု ခြိနျမှာ မကနြေပျရငျလညျး ဆကျမဖွဈဖို့ ကနြျောတို့ကတော့ အနူးအညှတျ တောငျးပနျခငျြပါတယျ။ စဈပှဲ မဖွဈရငျတော့ အကောငျးဆုံးပါပဲ” ဟု ဆိုသညျ။ တပျမတျောနှငျ့ RCSS သညျ ပဏာမအပဈရပျရေးဆိုငျရာ သဘောတူညီခကျြ ၁ စောငျနှငျ့ ပွညျထောငျစုအဆငျ့ သဘော တူညီခကျြ၂ စောငျတို့ကို လကျမှတျ ရေးထိုးထားသညျ့အပွငျ၂၀၁၅ ခုနှဈ အောကျတိုဘာ ၁၅ ရကျကလညျး တနိုငျငံလုံး ပဈခတျတိုကျခိုကျမှု ရပျစဲရေးဆိုငျရာ သဘောတူစာခြုပျ (NCA) ကို လကျမှတျ ရေးထိုးထားသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/12/231464.html
ရခိုငျပွညျနယျ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျ ဗနျးဗှီးကြေးရှာအနီးရှိ တောထဲသို့ ဝဥရှာဖှရေနျ သှားရောကျစဉျ အသကျ ၁၉နှဈအရှယျ အမြိုးသမီးငယျ တဈဦး ယနေ့ နလေ့ညျ ၁နာရီဝနျးကငျြက မိုငျးထိသဆေုံးသှားကွောငျး ရခိုငျပွညျနယျမှ အမြိုး သား လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးခငျမောငျလတျကပွောဆိုသညျ။ “ မိုငျးထိတယျလို့ပွောတယျ။ ဒီနေ့ မှနျးလှဲ ၁နာရီလောကျက ဗနျးဗှီးကြေးရှာမှာ နထေိုငျတဲ့ အမြိုးသမီးငယျတဈဦးပေါ့။ သူတို့က တောထဲကိုသှားတာ မိုငျးထိတာပေါ့။ မိုငျးထိတဲ့သူကတော့ သဆေုံးသှားတယျလို့ ဒသေခံတှပွေောဆိုခကျြအရတော့သိရတယျ” ဟု ၎င်းငျးကပွောဆိုသညျ။
အဆိုပါ သဆေုံးသူ အမြိုးသမီးငယျအမညျမှာ မစနျးစနျးအေးဖွဈပွီး ဆငျးရဲနှမျးပါးသောကွောငျ့ ကြောငျးမနနေိုငျဘဲ တောထဲ တှငျ မိသားစု စားရေးသောကျရေးအတှကျ ဝဥသှားရောကျရှာဖှစေဉျ မိုငျးထိကာ သဆေုံးခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး ဒသေခံမြား ပွောဆိုခကျြအရသိရသညျ။“ဗနျးဗှီးကြေးရှာရဲ့ အနောကျဘကျမှာ သူတို့ကဆငျးရဲတော့ ဝဥသှားတူးတာပေါ့။ အားလုံးပေါငျး ၆ ယောကျပေါ့။ အမြိုးသမီး ၄ ယောကျ အမြိုးသား ၂ ယောကျပေါ့။ မိုငျးထိတာက မစနျးစနျးအေး အသကျက ၁၉ နှဈပေါ့။ ကနျြတဲ့သူ ၂ ယောကျတော့ ဒဏျရာရတယျ။ မလပွညျ့မ အသကျ ၂၂နှဈ နဲ့ မထှီး အသကျ ၂၅ နှဈပေါ့။ သူတို့တော့ နှဈယောကျက နညျးနညျးလေးပဲထိတယျ။ ဒဏျရာက မစိုးရိမျရဘူး။ မိုငျးထိတဲ့ မစနျးစနျးအေးကတော့ သူ့သူငယျခငျြးတှကေ ထမျးပွီးတော့ ရှာကိုပွနျအပို့မှာ ရှာမရောကျခငျလမျးမှာ သူကအသကျဆုံးသှားတာပေါ့။ နလေ့ညျ ၁ နာရီဝနျးကငျြလောကျ တော့ရှိမယျ ဖွဈစဉျဖွဈတာကတော့ အသကျဆုံးရှုံးသှားတဲ့ ကလေးမလေးကတော့ ကြောငျးတော့မနတေော့ဘူး။ ဆငျးရဲ တယျဆိုတော့ ကြောငျးမထားနိုငျဘူးလေ”ဟု ဗနျးဗှီးကြေးရှာ သားတဈဦးကပွောဆိုသညျ။
ရခိုငျပွညျနယျတှငျ တပျမတျောနှငျ့ ရခိုငျတပျတျော (AA) တို့ကွား လကျရှိခြိနျထိ တိုကျပှဲမြားဖွဈပှားလကျြရှိပွီး လကျနကျကွီး၊ လကျနကျငယျမြားကွောငျ့ အရပျသားသဆေုံးမှုမြား အပါအဝငျ ယခုကဲ့သို့ မညျသညျ့အဖှဲ့အစညျးကမှ တာဝနျယူခွငျးမရှိ သော ထောငျထားသညျ့ မိုငျးနငျးမိ၍ သဆေုံးဒဏျရာရသညျ့ ဖွဈစဉျမြားလညျး မကွာခဏဆိုသလိုဖွဈပှားလကျြရှိရသညျ။ https://www.khitthitne ws.com/2020/10/%e1%80%95%e1%80%af%e1%80%8f%e1%80%b9%e1%80%
ကယားပွညျနယျ ဘောလခဲမွို့ နနျးဖဲသာယာကုနျးရပျကှကျမှာ ကယားပွညျနယျဒီမိုကရကျတဈပါတီ (KySDP ) ဆိုငျးပုဒျ ဖကျြဆီးခံရတယျလို့သိရပါတယျ။
KySDP အနနေဲ့ ပါတီဆိုငျးပုဒျဖကျြစီးခံရတာ ပထမဆုံးဖွဈပွီးတော့ ဒါဟာ ပါတီကွီးတှကေ ပါတီငယျတှကေို နှောကျယှကျ တာဖွဈတယျလို့ KySDP အတှငျးရေးမှူးလညျးဖွဈ လကျရှိ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစား လှယျလညျးဖွဈတဲ့ ဦးသဲရယျက ပွောပါတယျ။“ကနြျောတို့သုံးသပျမိသလောကျက ပါတီကွီးတှကေ ပါတီငယျတှကေို လိုကျပွီးနှောကျယှကျတာလို့ ကနြျော တို့ မွငျတယျ။ ဒီနဒေီ့အခြိနျမှာတော့ ပွိုငျဆိုငျမှုတှေ ရှိကွတာကို အားလုံးလကျခံနိုငျဖို့ လိုတယျ။ အခုဟာက ဒီပါတီ ကမ ရှိရဘူး။ ငါတို့ဘဲရှိရမယျဆိုတဲ့ စိတျဓာတျမြိုးနဲ့ ဆိုလို့ရှိရငျတော့ တကယျလို့ အစိုးရဖွဈလာ တဲ့တဈနေ့ ကရြငျတော့ ဘယျလို လုပျကွမလဲ။ ဒါကလဲ အာဏာရှငျဆနျတုနျးပါဘဲ။ ” လို့ ပွောပါတယျ။ ဖကျြစီးခံရတဲ့ဆိုငျပုဒျအနီးမှာ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီ အငျအားစုပါတီ ( NDF ) နဲ့ အမြိုးသားဒီမိုကရေးစီအဖှဲ့ခြုပျ ( NLD ) ဆိုငျးပုဒျတို့ရှိပါတယျ။ ဖကျြဆီးတဲ့ သူက စိတျမနှံ့ဆို ပမေယျ့ ယုံဖို့ခကျတယျလို့ ဦးသဲရယျကပွောပါတယျ။ ဒီကိစ်စကို ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျထံတငျပွ သှားမယျလို့လညျး သူက ပွောပါတယျ။
ဘောလခဲမွို့နယျအတှငျးမှာ လကျရှိ ပွညျထောငျစုဝနျကွီးဟောငျးဖွဈတဲ့ ဦးစိုးသိနျးက ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးရေး ပါတီကနေ ဝငျပွိုငျမညျ့မဲဆန်ဒနယျမွလေညျးဖွဈပွီး တခွား အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ၊ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအငျအားစု ၊ ကယားပွညျနယျဒီမိုကရကျတဈပါတီ၊ ညီညှတျသောဒီမိုကရကျတဈပါတီ၊ ပွညျထောငျစုကောငျးကြိုးဆောငျပါတီ၊ တိုငျးရငျး သား စညျးလုံးညီညှတျရေးပါတီ ၊ အမြိုးသားနိုငျငံရေးဒီမိုကရကျတဈပါတီ၊ တဈသီးပုဂ်ဂလတို့ ပါဝငျယှဉျပွိုငျကွတဲ့ မဲဆန်ဒနယျ ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာ ဘောလခဲမွို့နယျအတှငျးမှာ ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီကနပွေီး ၂၀၁၅ ရှေးကောကျ ပှဲမှာ မဲဆန်ဒနယျဖွဈတဲ့ ပွညျသူ့လှတျတျော ၁နရော အမြိုးသားလှတျတျော ၂ နရော၊ ပွညျနယျလှတျတျော ၂ နရောတို့မှာ အနိုငျရရှိခဲ့ကွတဲ့မွို့နယျဖွဈပါတယျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-76160
ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါကူးစကျခံရသူမြားပွားလာမှုကွောငျ့ Stay at Home အဖွဈသတျမှတျထားသညျ့ ကလေးမွို့ စမျးမွို့ ရကျကှကျအား ရောဂါပိုး ကူးစကျခံရသူ ထပျမံတှရှေိ့မှုမရှိပါက Stay at Home ဒသေမှ ပယျဖကျြသှားမညျဖွဈကွောငျးသိ ရသညျ။“စမျးမွို့ကို Stay at Home အဖွဈ ၁၄ ရကျသတျမှတျထားတာပေါ့၊ ဒီနကေ့ ၁၁ ရကျရှိသှားပွီဆိုတော့ မနကျက လုပျတဲ့အစညျးအဝေးမှာ စမျးမွို့ရကျကှကျကို ဒီရကျပိုငျးအတှငျး ပိုးထပျတှတေ့ာမရှိရငျ Stay at Home ကနေ ပွနျဖကျြပေး ဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတယျပေါ့၊ မနကေ့ တဈယောကျထပျတှပေ့မေယျ့ သူက စမျးမွို့ရပျကှကျကမဟုတျဘူး ရနျကုနျကနလောတဲ့ ကားသမားပေါ့” ဟု ကလေးခရိုငျပွနျဆကျရုံးမှ ဉီးစီးမှူး ဉီးညီဇျောကပွောသညျ။
ကိုဗဈ-၁၉ ဒုတိယလှိုငျးကာလတှငျ ရနျကုနျမွို့မှ ပွနျလာသညျ့အမြိုးသမီးငယျတဈဉီးထံမှ တဈဆငျ့ စမျးမွို့ရပျကှကျတှငျ အယောကျ ၂၀ ကြျော ပိုးတှလေူ့နာတှရှေိ့ခဲ့မှုကွောငျ့ စကျတငျဘာလ ၂၉ ရကျနကေ့စ၍ စမျးမွို့ရပျကှကျတဈခုလုံးကို Stay at Home အဖွဈ သတျမှတျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ အောကျတိုဘာ ၈ ရကျနကေ့ ကလေးမွို့နယျမှ ပွနျလညျထှကျခှာမညျ့ အရေး ကွီးကုနျစညျပို့ဆောငျရေး ယာဉျမောငျးနှငျ့ ယာဉျနောကျလိုကျ (၅၅) ဦး ပွညျသူ့ကနျြးမာရဦေးစီးဌာနမှ ကိုဗဈ – ၁၉ ရောဂါပိုး ရှိ မရှိ Test kit ဖွငျ့ စဈဆေးရာမှ High Class ဂိတျမှ ယာဉျနောကျလိုကျတဈဦး ထံတှငျ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါပိုးတှေ့ ရှိခဲ့ပွီး Close Contact ၁၃ ဉီးအား ကှာရငျတငျးဝငျခိုငျး ထားကွောငျးသိရသညျ။
ကလေးမွို့တှငျ ကိုဗဈ-၁၉ ဒုတိယလှိုငျးကာလအတှငျး ပိုးတှလေူ့နာ (၂၈) ဦးထိရှိခဲ့ပွီး (၁၁ ) ဦးမှာ ဆေးရုံမှ ဆငျးသှားပွီး ဖွဈ၍ ယခုလကျရှိတှငျ (၁၇) ဦးမှာ ကုသမှုခံယူလြှကျရှိသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-76176
ကိုဗဈ-၁၉ ဖွဈပှားမှုနဲ့အတူ စားဝတျနရေေး အခကျအခဲတှကွေောငျ့ မွို့ပွနဲ့အလှမျးဝေးတဲ့ ကြေးလကျဒသေက ပွညျသူ တှေ မှာ မဲစာရငျးကွညျ့ဖို့နဲ့ ရှေးကောကျပှဲမှာ ဆန်ဒမဲပေးဖို့ စိတျပါဝငျစားမှုနညျးပါး နကွေတာပါ။ အဆိုပါ ဒသေခံတှကေို သကျဆိုငျရာ ကျောမရှငျက ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာ အသိပညာပေးမှု နညျးပါးတာကွောငျ့ ဒသေခံလူမှုရေးအဖှဲ့တှကေ ကို့အစီအစဉျနဲ့ကို ရှေးကောကျပှဲအသိပညာပေးမှုတှေ ဆောငျရှကျနရေပါတယျ။
“ရပျကြေးကျောမရှငျရုံးခှဲတှမှော ကပျထားပမေယျ့ လာကွညျ့တဲ့သူက တျောတျောကိုနညျးတယျ။ ရှာသူရှာသားအမြားစုက ရှေးကောကျပှဲကို တဈကွိမျလောကျပဲ နဖူးတှေ့ ဒူးတှတှေ့ဖေူ့းကွတာ။ကိုယျ့စားဝတျနရေေးကိုယျ ရှုပျနတောတဈကွောငျး ဒီဟာနဲ့ ပတျသကျပွီး လိုကျလံနှိုးဆျောတဲ့သူ မရှိတာက တဈကွောငျးပေါ့။ ကျောမရှငျကတော့ အဆောကျအဦးတှေ ကြောငျး တှမှော ဒီအတိုငျးပဲကပျထားလိုကျတာပဲ လိုကျလံနှိုးဆျောတာ မရှိဘူး”လို့ ရေးမွောကျပိုငျးကြေးရှာတှမှော အသိပညာပေး ဆောငျရှကျနသေူ ကိုစောအောငျရှဝေငျးက ပွောပါတယျ။ ဒီဒသေခံတှကေိုတော့ နိုငျငံရေးပါတီတှကေ ရှေးကောကျပှဲ အသိပညာပေးမှုထကျ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးတှကေိုသာ ဦးစားပေး ဆောငျရှကျနကွေတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ရေးအရှပေို့ငျး ကြေးရှာတှဟော လမျးပနျးဆကျသှယျရေးခကျခဲတာမို့ အနီးစပျဆုံး မဲရုံမှာ ဆန်ဒမဲလာထညျ့ဖို့ မိုငျ ၃၀ ကြျောခနျ့ခရီးကို တဈနကေုနျလာရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဒသေခံတှေ ဆန်ဒမဲပေးနိုငျဖို့ နိုငျငံရေးပါတီတှနေဲ့ ကျောမရှငျတို့က သှားလာရေးအဆငျပွအေောငျ စီစဉျပေးရငျ မဲပေးမယျ့သူ တိုးလာနိုငျတယျလို့ ဒသေခံတှကေ ပွောပါတယျ။ “ပါတီတှကေ သူတို့အောငျနိုငျရေးအတှကျ ကွိုပို့ အစီအစဉျ တှေ လုပျမယျလို့ ကွားမိတယျ။ ပါတီဖွဈဖွဈ ကျောမရှငျဖွဈဖွဈ ကွိုပို့လုပျပေးရငျ မဲပေးသူက ၂၀၁၅ ထကျ ပိုမြားလာ မယျထငျတယျ”လို့ ကံလှကြေးရှာဒသေခံ ကိုကြျောမြိုးထူးက ပွောပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲမှာတော့ ဒီဒသေ က မဲပေးပိုငျခှငျ့ရှိသူဦးရရေဲ့ ထကျဝကျခနျ့သာ ဆန်ဒမဲလာပေးခဲ့ကွတာပါ။ လာမယျ့ရှေးကောကျပှဲမှာတော့ ရေးမွို့နယျ အတှငျး ဆန်ဒမဲပေးခှငျ့ရှိသူ ၂ သိနျးကြျောရှိ ပါတယျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-76218
ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးက ရှေးကောကျပှဲမကငျြးပနိုငျသညျ့ မွို့နယျမြားကို ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ (UEC) အ နဖွေငျ့ အမွနျဆုံးကွငွောပေးရနျ လိုအပျကွောငျး နိုငျငံရေးပါတီမြားနှငျ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျးမြားကပွောသညျ။
ရှေးကောကျပှဲမကငျြးပနိုငျသညျ့ မွို့နယျမြားကို UEC အနဖွေငျ့ လကျရှိအခြိနျထိ ကွငွောခွငျးမရှိသညျ့အတှကျ အဆိုပါ မကငျြးပနိုငျသညျ့မွို့နယျမြားကို အမွနျဆုံးကွငွောပေးရနျလိုအပျကွောငျး ရသတေ့ောငျမွို့နယျမှ ပွညျသူ့လှတျတျော ကိုယျစားလှယျလောငျးအဖွဈ ယှဉျပွိုငျမညျ့ ဒျေါခငျစောဝကေ ပွောသညျ။“အခုဆိုရငျ ကိုဗဈကွောငျ့ သှားလာရေး တျောတျောခကျခဲတာတှရှေိတယျ။ ပွီးရငျ ဗီနိုငျးတှေ၊ ပနျးဖလကျတှေ၊ လုပျရတဲ့အခါကတြော့ ငှရေေးကွေးရေးကလညျး တျောတျောအကုနျကခြံထားပွီးပွီဖွဈတယျ။ ဥပဒကွေောငျးအရ ရှေးကောကျပှဲမရှိဘူးဆိုရငျတော့ ကမြတို့စောဒကတကျစရာ အကွောငျးမရှိဘူး။ ဒါပမေယျ့ အမွနျဆုံး သိခငျြနတေယျ။ ရှေးကောကျပှဲနီးမှ သိရမယျဆိုရငျ ကမြတို့လုပျထားတဲ့ လူပငျပနျး ခံထားတာ၊ အခြိနျကုနျခံထားတာတှကေ အလာဟသအခညျြးနှီးဖွဈသှားမယျ”ဟု ၎င်းငျးကပွောသညျ။ ရခိုငျပွညျနယျ မှ မွို့နယျတခြို့တှငျ လုံခွုံရေးအခွအေနအေရ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပနိုငျခွမေရှိသညျ့ မွို့နယျမြား ရှိနပွေီး အဆိုပါ မကငျြးပနိုငျ သညျ့မွို့နယျမြားကို အောကျတိုဘာလအတှငျးတှငျကွငွောသှားမညျဟု UEC မှ ပွောဆိုထားသျောလညျး ယခုအခြိနျထိ ကွငွောခွငျးမရှိသညျ့ အတှကျ အမွနျဆုံးကွငွောပေးရနျ လိုလားနေ ကွခွငျးဖွဈသညျ။
ယငျးအပွငျ ရခိုငျပွညျနယျရှိ ကြောကျဖွူမွို့နယျမှ ပွညျနယျလှတျတျောအမှတျ(၂) နရောမှလှဲ၍ ကနျြမွို့နယျမြားအားလုံးတှငျ နရောစုံဝငျရောကျယှဉျပွိုငျသှားမညျ့ ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ(ANP) အနဖွေငျ့လညျး ရှေးကောကျပှဲမကငျြးပနိုငျမညျ့မွို့နယျမြား ကို မကွငွောသေးသညျ့အပျေါ စိုးရိမျမိကွောငျး ယငျးပါတီ အတှငျးရေးမှူး(၁) ဦးအောငျမွကြျောကဆိုသညျ။ ဤသို့ ရှေးကောကျပှဲမကငျြးပနိုငျသညျ့ မွို့နယျမြားကွငွောမညျ့ နရေ့ကျကိုသိရှိနိုငျရနျ ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျမှ တာဝနျရှိသူမြားကို ဆကျသှယျခဲ့သျောလညျး ဖုနျးလကျခံဖွကွေားခွငျး မရှိခဲ့ပေ။
ရခိုငျပွညျနယျနှငျ့ ခငျြးပွညျနယျ၊ ပလကျဝမွို့နယျတို့တှငျ ၂၀၁၈ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလကုနျပိုငျးမှ လကျရှိအခြိနျထိ တပျမတျော နှငျ့ ရခိုငျလကျနကျကိုငျအဖှဲ့(AA)တို့ ထိတှမှေု့မြား မကွာခဏဖွဈပှားနလေကျြရှိသညျ။ ထိုသို့ တိုကျပှဲဖွဈပှားမှုမြား ရှိနခွေငျး ကွောငျ့ နိုဝငျဘာလ ၈ ရကျနတှေ့ငျကငျြးပမညျ့ ၂၀၂၀ ခုနှဈ၊ အထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲအား ၎င်းငျးဒသေမြားတှငျ ကငျြးပရနျရှိ၊ မရှိ တရားဝငျထုတျပွနျခွငျး မရှိသေးသျောလညျး ရှေးကောကျပှဲကငျြးပနိုငျဖှယျမရှိကွောငျး အမြားပွညျသူက သုံးသပျလကျြ ရှိသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-76208
ရခိုငျပွညျနယျမှာ မွနျမာ့တပျမတျောက ကြေးရှာတှကေို မီးရှို့ပွီး အရပျသားတှကေို သတျဖွတျနတေဲ့အတှကျ အရေးယူပေးဖို့ ကုလသမဂ်ဂလုံခွုံရေးကောငျစီကို နိုငျငံတကာ လှတျငွိမျးခမျြးသာခှငျ့အဖှဲ့ AI က တောငျးဆိုလိုကျပါတယျ။
ရခိုငျပွညျနယျက လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျမှုတှကေို မကျြမွငျသကျသတှေေ ဂွိုလျတုက ရရှိတဲ့ ဓါတျပုံတှကေို ကိုးကားပွီး ထုတျပွနျတဲ့ အဲဒီကွညောခကျြမှာ မွနျမာ့တပျမတျောဟာ အရပျသားတှရေဲ့ ဒုက်ခဆငျးရဲတှကေို လုံးဝဥပက်ခာပွုထားတယျလို့ AI ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူက ပွောပါတယျ။ ရခိုငျပွညျနယျမှာ မွနျမာ့တပျမတျောနဲ့ AA ကွား ပဋိပက်ခတှေ ပိုမိုကယျြပွနျ့လာနပွေီး အရပျသားတှေ ပိုမိုထိခိုကျနဈနာနတေဲ့အတှကျ ကုလသမဂ်ဂလုံခွုံရေးကောငျစီက မွနျမာနိုငျငံကို အပွညျပွညျဆိုငျရာ ရာဇဝတျမှုတရားရုံး ICC ကို လှဲပွောငျးပွီး အရေးယူသငျ့တယျလို့လညျး ဆိုပါတယျ။
ရခိုငျပွညျနယျမှာ မွမွှေုပျမိုငျးတှကွေောငျ့ အရပျသားတှေ သကွေဒေဏျရာရနကွေကွောငျး အဲဒီမွမွှေုပျမိုငျးတှကေို AA ရော မွနျမာ့တပျမတျောကရော သုံးစှဲနကွေောငျးလညျး အဲဒီကွညောခကျြမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။ AI ရဲ့ ဒီထုတျပွနျခကျြနဲ့ ပတျသကျပွီး အစိုးရနဲ့ တပျမတျော သတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့ကို RFA က ဆကျသှယျခဲ့ပမေဲ့ အဆကျအသှယျ မရခဲ့ပါဘူး။ https://www.rfa.org/burmese/news/ai-urges-icc-10122020091034.html
ရခိုငျပွညျနယျအပျေါ အမှောငျကရြောကျနမှေုကို ဖယျရှားရေးအတှကျ မကောငျးဆိုးဝါးနှငျသညျ့ စံဂိုးခတျလှုပျရှားမှုကို ရခိုငျပွညျကြောငျးသားသမဂ်ဂက ဦးဆောငျ၍ ရခိုငျတဈပွညျနယျလုံးအတိုငျးအတာဖွငျ့ ယမနျနညေ့က လုပျဆောငျခဲ့ကွောငျး ရခိုငျပွညျကြောငျးသားသမဂ်ဂမှ သတငျးနှငျ့ပွနျကွားရေးတာဝနျခံ ကိုကြျောနိုငျဌေးက ပွောဆိုသညျ။ ရခိုငျပွညျနယျတဈဝနျး လုံးတှငျ ရခိုငျရိုးရာဓလေ့ စကောမြားကို ရိုကျတီး၍ မကောငျးဆိုးဝါးနှငျသညျ့ လှုပျရှားမှုကို ယမနျနကေ့ လုပျဆောငျခဲ့ ကွောငျး၊ အဓိက အားဖွငျ့ ရခိုငျပွညျအပျေါ အမှောငျကရြောကျနမှေုနှငျ့ မတရားလုပျဆောငျမှုမြား အဆုံးသတျရေးဖွဈ ကွောငျး၊ ရခိုငျပွညျသူမြား အားလုံးပူးပေါငျးပါဝငျကွောငျး ရခိုငျအရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးမြားထံမှ သိရှိရသညျ။
“စံဂိုးခတျဆိုတာက ရခိုငျလိုဆိုရငျ သူက စကောရိုကျပွီး မကောငျးဆိုးဝါးနှငျတာပေါ့။ ရခိုငျရိုးရာမှာ အဲဒါကို ကနြျောတို့ လုပျဆောငျတာပါ။ ရခိုငျတဈပွညျနယျလုံး မနကေ့ ပါဝငျကွပါတယျ။ အခု တောကျလြှောကျ မနညေ့က လှုပျရှားမှုကို ပါဝငျတဲ့ သတငျးတှေ ဝငျလာနပေါတယျ။ သံတှဲနဲ့ ဂှကတော့ သတငျးမရသေးဘူးပေါ့။ ၁၇ မွို့နယျမှာ ကနျြတာတှေ အားလုံးက ပါဝငျကွတယျ။ ပွညျပ ရောကျ ရခိုငျတှကေလညျး ဒီလှုပျရှားမှုမှာပါဝငျပါတယျ။ အဓိကက ကနြျောတို့ ရခိုငျတှအေပျေါမှာ
မကောငျးဆိုးဝါးကရြောကျနတေဲ့အတှကျ ဒီမကောငျးဆိုးဝါးတှကေို နှငျထုတျတာပါ။ မနညေ့က ရခိုငျပွညျသူတှကေ ည ၈ နာရီ ၄၀ လောကျမှာ စတယျ။ ကနြျောတို့က ည ၉ နာရီ လောကျကနေ ၉ နာရီ ၂၀ မှာပါဝငျပါတယျ။ ရခိုငျပွညျကြောငျးသား သမဂ်ဂက ဦးဆောငျတာပါ။ တခြို့တှကေလညျး ဒီလို စကောတှပေျေါမှာ စဈပှဲ ရပျတနျ့ရေး”ဟု ကိုကြျောနိုငျဌေးက ဆို သညျ။ အခြို့သော ရခိုငျပွညျသူမြားက စကောမြားပျေါတှငျ ရခိုငျပွညျကြောငျးသားသမဂ်ဂ၏ကွှေးကွျောသံမြားကို ရေးထိုး၍ မကောငျးဆိုးဝါးနှငျကွသညျဟု သိရှိရသညျ။
စံဂိုးခတျလှုပျရှားမှုကို အမြိုးသားရေးလှုပျရှားမှုပုံစံဖွငျ့ ထပျမံ လုပျဆောငျသှားရနျရှိပွီး မညျသညျ့အခြိနျတှငျ ထပျမံလုပျ ဆောငျမညျကိုမူ မသိရှိသေးကွောငျး၊ ရခိုငျပွညျနယျတှငျ ထပျမံ ကွုံလာရမညျ့ အခွအေနမြေားအပျေါတှငျမူတညျကွောငျး ရခိုငျအရပျဘကျလူမှုအဖှဲ့အစညျးမြားက ပွောဆိုသညျ။ https://www.khitthitnews.com/2020/10/%e1%80%9b%e 1%80%81%e1%80% ad%e1%80% af%e1%80%
ရခိုငျပွညျနယျရှိ အကွမျးဖကျ အဖှဲ့ အစညျးမြားနှငျ့ ရငျဆိုငျနရေသညျ့ နယျခွားစောငျ့ ရဲတပျဖှဲ့ ကို အငျအား တောငျ့တငျး စရေနျ တပျမတျောမှ အရာရှိကွီး ၅၁ ဦး ပွညျထဲရေး ဝနျကွီးဌာန၊ မွနျမာနိုငျငံ ရဲတပျဖှဲ့ သို့ ပွောငျးရှေ့ တာဝနျ ထမျးဆောငျ မညျ ဖွဈကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ နပွေညျတျောတှငျ ပွုလုပျသညျ့ နိုငျငံတျော သမ်မတရုံး၏ သတငျးစာ ရှငျးလငျးပှဲတှငျ ဧရာဝတီ သတငျးဌာနက တပျမ တျော အရာရှိမြား ရဲတပျဖှဲ့ သို့ ပွောငျးရှေ့ မညျ့ သတငျး အပျေါ အတညျပွုစဉျ သမ်မတရုံး ပွောခှငျ့ရပုဂ်ဂိုလျ ဦးဇျောဌေးက အ ထကျပါအတိုငျး ပွောဆိုခွငျး ဖွဈသညျ။
မွနျမာနိုငျငံ ရဲတပျဖှဲ့တှငျ အသဈ ထပျမံ ဖှဲ့ စညျးမညျ့ နယျခွားစောငျ့ ရဲတပျရငျး ၂ ရငျးတှငျ ယငျးတပျမတျော အရာရှိမြား တာဝနျထမျးဆောငျမညျ ဖွဈကွောငျး၊ နယျခွားစောငျ့ ရဲတပျရငျး သဘောသဘာဝသညျ နယျမွရေဲ၊ မှုခငျးရဲ သဘော သဘာဝက မတူကွောငျး သမ်မတရုံး ပွောခှငျ့ရသူ ဦးဇျောဌေးက ဆိုသညျ။“လိုအပျခကျြအရ ဒုတိယ ဗိုလျမှူးကွီးကနပွေီး တော့ ဗိုလျကွီးအဆငျ့ ကပ်ပတိနျ Level အထိပေါ့။ ၅၁ ယောကျ ရှိပါတယျ။ ကနျြတဲ့ အဖှဲ့ တှကေတော့ ရဲသန်ဓတှေနေဲ့ စုဖှဲ့ မှာ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီမှာ နယျခွားစောငျ့ တပျဖှဲ့မှာ လိုအပျခကျြအရ ရှပွေ့ောငျးတာ ဖွဈပါတယျ။ ကကျဘိနကျ(အစိုးရအဖှဲ့)ရဲ့ ခှငျ့ပွုခကျြလညျး ပွီးသှားပါပွီ”ဟု ဦးဇျောဌေးက ပွောသညျ။ ၎င်းငျးက ဆကျ၍ “ရခိုငျပွညျနယျမှာ တာဝနျ ထမျးဆောငျနတေဲ့ နယျခွားစောငျ့ရဲတှကေ ARSA ၊ AA တို့လို အကွမျးဖကျ အဖှဲ့ တှနေဲ့ ရငျဆိုငျနရေတာ။ တိုကျခိုကျရေးကို ဦးစားပေးတဲ့ အဖှဲ့ တှေ ဖွဈတယျ”ဟု ပွောသညျ။
ယငျးရှေ့ ပွောငျးလာသူ တပျမတျော အရာရှိမြားသညျ့ ရဲတပျဖှဲ့ ဘကျသို့ သတငျးပို့နိုငျခွငျး မရှိသေးသျောလညျး စဈရာထူး ခနျ့ခြုပျရုံးမှ ပွောငျးရှေ့ မိနျ့ ထှကျသှားပွီ ဖွဈကွောငျး၊ ရာထူးပွောငျးရှလေ့ာသညျ့အခါ ဒုတိယ ဗိုလျမှူးကွီး အဆငျ့သညျ ရဲဘကျသို့ ရောကျသညျ့အခါ ဒုတိယ ရဲမှူးကွီး အဖွဈ အဆငျ့တူ ပွောငျးရှတေ့ာဝနျထမျးဆောငျရခွငျး ဖွဈကွောငျး ဦးဇျောဌေးက ရှငျးပွသညျ။ အစိုးရဘကျက အကူအညီတောငျးခံသဖွငျ့ တပျမတျောဘကျမှ အရာရှိ၊ အခွားအဆငျ့ တပျမတျောသားမြားကို စိစဈ ရှေး ခယျြပွီး မွနျမာနိုငျငံ ရဲတပျဖှဲ့သို့ အခါအားလြျောစှာ စလှေတျပေးနသေညျမှာ ကွာပွီဖွဈ ကွောငျး၊ လုံခွုံရေး၊ စဈဆငျရေး ကိစ်စရပျမြားတှငျ အတှေ့ အကွုံ ရှိသူမြားကို စလှေတျပေးလကျြရှိကွောငျး တပျမတျောမှ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဗိုလျခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက ပွောသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/202 0/10/10/231 378.html
ကရငျပွညျနယျ မွဝတီနယျစပျ ထိုငျး-မွနျမာ အမှတျ(၂)တံတားမှတဆငျ့ ကုနျသှယျမှု ပွုလုပျနသေညျ့ မွနျမာကား မြားအား ယနေ့ (အောကျတိုဘာလ ၁၁ ရကျ) နံနကျပိုငျးက ထိုငျးဘကျခွမျးမှ ဝငျရောကျခှငျ့မပွုသဖွငျ့ မွနျမာ ကားသမား (၁၀၀) ဦး ခနျ့မှ မွနျမာဘကျခွမျး Cargo gate အဝတှငျ ထိုငျးယာဉျမြား ဝငျမလာစရေနျ တနျပွနျပိတျဆို့တားဆီးမှုမြား ပွုလုပျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ Covid-19 ကူးစကျမှု ဂယကျအား အကွောငျးပွကာ ယနေ့ နံနကျ ၆ နာရီခနျ့က ထိုငျးစဈတပျမှ မွနျမာ မျောတျော ယာဉျမြားအား ထိုငျးနိုငျငံဘကျခွမျးသို့ ဝငျရောကျခှငျ့မပွုသဖွငျ့ မွနျမာဘကျမှာလညျး ထိုငျးခဈြကွညျရေးတံတား အမှတျ(၂) တံတား၊ မွနျမာဘကျခွမျး CARGO Gate တှငျ မွနျမာကုနျတငျယာဉျမောငျး(၁၀၀)နီးပါးခနျ့ စုဝေး၍ ထိုငျးနိုငျငံဘကျမှ မျော တျောယာဉျကုနျကားမြားအား မွနျမာဘကျခွမျးသို့ဝငျရောကျမှု မရှိစရေေးအတှကျ စောငျ့ဆိုငျးပိတျဆို့မှု ဖွဈပှားခဲ့ခွငျးဖွဈ သညျ။
“မဲဆောကျမွို့သို့ ကုနျပစ်စညျးမြားတငျဆောငျဖို့အတှကျ ထိုငျးဘကျခွမျး အမှတျ(၂)တံတားရှိ သကျဆိုငျရာသို့ ပေးသှငျးရ မယျ့ ငှကွေေးတှကေို ပေးပွီးကာမှ ကုနျပစ်စညျးတငျ မွနျမာမျောတျောယာဉျငယျတှကေို အမှတျ(၂) တံတား ထိုငျးဘကျခွမျး CARGO ဂိတျရှိ ထိုငျးစဈတပျက မဲဆောကျမွို့တှငျးသို့ ဝငျရောကျခှငျ့မပွုဘဲ ပိတျပငျတား ဆီးခဲ့တာပါ။ ပေးသှငျးထားတဲ့ ငှတှေလေညျးပွနျမရခဲ့လို့ နဈနာမှုရှိခဲ့တယျ”ဟု နံနကျပိုငျးက ထိုငျးဘကျခွမျးသို့ ရောကျရှိပွီးကာမှ ဝငျခှငျ့မရဘဲ လှညျ့ပွနျခဲ့ ရတဲ့ မွနျမာယာဉျမောငျးတဈဦးက ပွောသညျ။ အဆိုပါ ဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျ၍ နှဈနိုငျငံကုနျသှယျမှု အဆငျပွစေရေနျအတှကျ မွဝတီခရိုငျအုပျခြုပျရေးမှူး ဉီးတဇောအောငျနှငျ့ တာ့ချခရိုငျအုပျခြုပျရေးမှူးတို့က ဖုနျးဖွငျ့ဆကျသှယျ၍ မွနျမာကုနျတငျ ယာဉျငယျမြားကို အမှတျ ၂ တံတား ထိုငျးဘကျခွမျး BCF ဇုနျတှငျ ကုနျပစ်စညျးလှဲပွောငျးစမေညျဖွဈသလို မွနျမာဘကျခွမျး အနဖွေငျ့လညျး ထိုငျးကားမြားအား CARGO ဂိတျတှငျသာ ကုနျပစ်စညျးမြား လှဲပွောငျးစမေညျဟု ကနဉီး ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျခဲ့ သညျဟု ခရိုငျအုပျခြုပျရေးမှူးက ပွောသညျ။
သို့သျော ယနေ့ နံနကျ ၉ နာရီတှငျ မွနျမာကုနျပစ်စညျးတငျယာဉျမြားပျေါသို့ ထိုငျးကုနျပစ်စညျးတငျ ယာဉျပျေါမှ ကုနျပစ်စညျးမြား အား ထိုငျးဘကျခွမျး BCF ဇုနျတှငျ လှဲပွောငျးတငျဆောငျလကျြရှိသျောလညျး ထိုငျးတပျမတျောမှ ထှကျခှာခှငျ့မပွုသေး ကွောငျး သိရှိရသညျ။ http://kicnews.org/2020/10/%e1%80%91%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84% e1%80%b9%e1%80